အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးကို ဟူစိန်အိဘ်အလီ နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အကြံပြုထားပါသည်။ (ဆွေးနွေးရန်)
ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ အိဘ်နေအဘီသွာလိဘ် သည် ရှီအာတို့၏ တတိယမြောက်အေမာမ် ဖြစ်ပြီး ရှာဘာန် ၁၅ရက်ဟီဂျရီခုနှစ် ၄ တွင် မဒီနာမြို့တော်တွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ ဟီဂျရီ ၆၁မိုဟရမ်လ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ကရ်ဘလာစစ်ပွဲ၌(မတရားလုပ်ကြံခြင်းခံရပြီး) ရှဟီးဒ် ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။.ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ရှီအာတို့သည် သူ့အား ရှဟီးဒ်ခေါင်းဆောင်(အစ္စလာမ့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်)ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏ ကွန်နီယသ်(သားသမီးကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောအမည်)မှာ အဘာအဘ်ဒုလ္လာဟ် ဖြစ်ပြီး သူ၏ဖခမည်းတော်သည် အလီ(အ.စ)နှင့် မယ်တော်မှာ ဖှါတေမာ(စ.အ)ဖြစ်လေသည်။ ထို့အပြင် သူသည် တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်အိဘ်နေအဘ်ဒုလ္လာဟ်(ဆွ)၏ မြေးတော်လည်းဖြစ်ပေသည်။ သူ၏သားတော် စဂျ်ဂျားဒ် သည် ရှီအာတို့၏ စတုထ္ထမြောက် အေမာမ်(ခေါင်းဆောင်)ဖြစ်ပေသည်။ မြောက်များစွာသော မွစ်လင်(မ)တို့သည် သူ့အား တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏မြေးတော်ဖြစ်သည့်အတွက်နှင့် သူသည် အစ္စလာမ့်လမ်းစဉ်တွင် ကိုယ်ကျိုးစွန့် မိမိ၏အသက်ကို စတေးခဲ့သည့်အတွက် အရိုအသေပြုအလေးထားကြလေသည်။
ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် မိမိသက်တော်(၇)နှစ်အရွယ်အထိ ဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)နှင့်အတူဖြတ်သန်းခဲ့လေသည်။ ဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) သူနှင့် သူ၏အစ်ကိုဖြစ်သူ ဟစန်-နေ-မွဂျ်သဘာ(အ.စ)အားအလွန်ပင် ချစ်ခင်နှစ်သက်တော်မူသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေဝါယသ်တော်များ(အဆိုအမိန့်များ)ရှိထားပြီး ယင်းအဆိုအမိန့်များအတွင်းမှ တစ်ခုသည် ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်း(န)သည် ဂျန္နသ်(သုခဘုံ)လူရွယ်များ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေသည် ဟု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အခြားထူးခြားသော အဖြစ်အပျက်များအတွင်းမှ တစ်ခုသည် မိုဘာဟေလာ(ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း)၌ ထိုမြေးတော်နှစ်ပါးကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် မုက္ခပတ်တော်တွင်ပါရှိသည့် (ابناءنا) ဟူသောနေရာတွင် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် လူရွယ်ဘဝတွင်သွဘ်ရစ်တာန်ဒေသကို အောင်နိုင်ရာတွင်လည်းကောင်း အွစ်မားန်းအိမ်ကို ခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့ရာတွင်လည်းကောင်း ပါဝင်ကူညီခဲ့သည်ဟု များစွာသော သူတို့က ယုံကြည်လက်ခံထားကြသည်။ ဖခမည်းတော် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလများတွင် သူသည် ဖခမည်းတော်ဘက်နေ၍ မှ စစ်ပွဲများတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လေသည်။ မိုအာဝေယာသည် အလီ(အ.စ)နှင့်အပေါင်းအပါများအား လူအများရှေ့မှောက်တွင် ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လာအ်နသ် လုပ်ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့လာအ်နသ်လုပ်ခြင်းခံရသူတို့အတွင်း ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်ပေသည်။ သိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည်မိမိ၏ နောင်တော် ဟစန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)အုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလာများအတွင်း၌ နောင်တော်သည် မိုအာဝေယာနှင့် ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသဖြင့် ထိုစာချုပ်အပေါ် သစ္စာရှိစွာ နေခဲ့သည်။ မိုအာဝေယာနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ချေ။ မိုအာဝေယာအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုအရာနှစ်ခုသည် သမိုင်းတွင်စေခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ ဘနီအိုမိုင်ယာ မျိုးနွယ်စုအတွင်းမှ အချို့သူတို့သည် မြေအချို့ကို မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြောဆိုလာချိန်တွင် ၎င်းတို့ဆန့်ကျင်ဘက်၌ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ မိုအာဝေယာသည် မိမိ၏သားယဇီးဒ်ကို အိမ်ရှေ့မင်းသားရာထူးခန့်အပ်လိုက်ချိန်တွင်လည်း အစ္စလာမ်တွင် အိမ်ရှေ့မင်းသားခန့်အပ်ခြင်းသည် သာသနာ၌မရှိ အသစ်တီထွင်ခြင်း(ဘိဒ်အသ်)ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုသို့ ခန့်အပ်မှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့လေသည်။
ဟီဂျရီ(၆၀)ခုနှစ်တွင် မိုအာဝေယာသေဆုံးသွားပြီးနောက် မဒီနာမြို့ဝန်သည်ယဇီးဒ်၏အမိန့်ဖြင့် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အားအစိုးရနန်းတော်သို့ ဆင့်ခေါ်၍ အတင်းအကျပ် ဘိုင်အသ်ပြု သစ္စာခံခိုင်းစေခဲ့သည်။ သို့သော် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ယဇီးဒ်နှင့် သစ္စာမခံခဲ့ချေ။၎င်းအပြင် မိမိ၏မိသားစုများနှင့် မက္ကာသို့ သွားခဲ့ပြီး ထိုမြို့၌လေးလတိုင်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကူဖှာမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ကြသောသူအများစုသည် ရှီအာများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းသူတို့သည် မိုအာဝေယာသေဆုံးသွားမှုအပေါ် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့သည် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား စာများရေး၍ ဘနီအိုမိုင်ယာ အုပ်ချုပ်မှုအား မလိုလားကြောင်း ဆန္ဒများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် မိမိ၏ဦးရီးတော်၏သားဖြစ်သူမွစ်လင်(မ)အိဘ်နေအကီးလ်အား ထိုဒေသသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေအကီးလ်သည် ကူဖှာမြို့၏ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ရှိ စင်မြင့်(မင်န်ဘရ်)ပေါ်တွင် လူတို့အားလမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြပေးခဲ့လေသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယဇီးဒ်ထံသို့ အစီရင်ခံမှုများရောက်ရှိသွားခဲ့လေသည့်အခါ ယဇီးဒ်သည် အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟ် အိဘ်နေဇေယားဒ်အား ကူဖှာမြို့စားအဖြစ်ခန့်အပ်၍ ကူဖှာမြို့သို့အလျှင်အမြန်သွားရောက်ကာ မတည်ငြိမ်မှုများကို ရှင်းလင်းရန် အမိန့်ပေးခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟ် အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် သစ္စာခံထားသူများအား ပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေအကီးလ်အား ဦးခေါင်းဖြတ်အဆုံးစီရင်ခဲ့သည်။ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ကူဖှာတွင် ဖြစ်ပျက်နေသော အဖြစ်အပျက်များကို မသိခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် ဇီလ်ဟဂျ်ဂျာ (၈)ရက်နေ့(သို့) (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကူဖှာမြို့သို့ ခရီးဆက်ရန် အသင့်ပြင်ခဲ့လေသည်။ ဤသို့ ခရီးဆက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းမှာ မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေအကီးလ် ရှဟီးဒ်မဖြစ်မီ အချိန်၌ ကူဖှာမြို့၏အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်း ရေးသားပေးပို့ခဲ့သော စာကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။
အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟ်အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် မိမိ၏စစ်တပ်ကို ဟေဂျားဇ်မှကူဖှာသို့ သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး၌ အပြည့်တပ်ဆွဲထားလေသည်။ မည်သူကိုမျှ ထိုလမ်း၏အပြင်ထွက်ခွာခွင့်မပြုခဲ့သလို ထိုလမ်းအတွင်းသို့ဝင်ခွင့်လည်းမပြုခဲ့ပါ။ သိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ကူဖှာသို့သွားနေစဉ် လမ်းခရီး၌ စာပို့သမားနှင့် ဆုံမက်ခဲ့ပြီး မိမိစေလွှတ်ခဲ့သော မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေအကီးလ် လုပ်ကြံခံရမှုသတင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဟေဂျားဇ်မှ မိမိနှင့်အတူပါလာသောသူတို့အား မိမိနှင့် လမ်းခွဲလိုက လမ်းခွဲနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပေမဲ့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လမ်းခွဲသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့ခရီးဆက်လာစဉ် လမ်းခုလပ်တွင် ဟူရ်အိဘ်နေယဇီးဒ်ရေယာဟီး၏ တပ်ဖွဲ့နှင့် ထိပ်တိုက် တွေ့ခဲ့ပြီး ထိုတပ်ဖွဲ့သည် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား ရှေ့မဆက်ရန် တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် အပေါင်းအပါများကို စစ်မဖြစ်ပဲအသက်ရှင်လျှက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံခေါ်ဆောင်လာရန်အတွက် ဟူရ်အိဘ်နေယဇီးဒ်ရေယာဟီးအား အမိန့်ပေးထားသည့်အတွက် သူသည်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား အမိန့်အတိုင်း အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံခေါ်ဆောင်သွားရန် ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ဘက်မှ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် နိုင်နဝါဒေသလက်အောက်ရှိ ကရ်ဘလာမည်သော နေရာတွင် စခန်းချခဲ့လေသည်။ မိုဟရမ်လ (၃)ရက်နေ့တွင် အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်အိဘ်နေအဘီဝကားဒ် ဦးဆောင်သော စစ်သည်(၄၀၀၀)ရှိ တပ်ကြီးသည် ကရ်ဘလာ သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟ် အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် ၎င်းအား အီရန်နိုင်ငံရှိ " ရိုင်းယ်"မြို့ကို အပိုင်စားပေးမည်ဟု ကတိပေးထားခဲ့သည့်အတွက် လောဘစိတ်ဖြင့် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏အမိန့်ကို နာခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင် သူသည် အိဘ်နေဇေယားဒ် စိတ်ဆိုး၍ မိမိအားကြိမ်းမောင်းမှုကို မလိုလားသဖြင့် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ငြိမ်းချမ်းမှုဆောင်သော အကြံပြုမိန့်ကြားချက်များကို လက်မခံခဲ့ပေ။ ထိုသို့ငြိမ်းချမ်းမှုဆောင်သော ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏အကြံပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသမိုင်းရင်းမြစ်ကျမ်းများ၌ အမြင်ကွဲလွဲမှုများ မည်မျှပင်ရှိနေပါစေ။
မိုဟရမ်လ(၁၀)ရက်နေ့နံနက်တွင် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် မိမိ၏စစ်သည်များအတွင်း မြင်းစီးသူ(၃၀)ဦးနှင့် ခြေကျင်လျှောက်စစ်သည်(၄၂)ဦးအား အသင့်ပြင်ခဲ့လေသည်။ သိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် မိမိစီးနင်းတော်၌ စီးနင်းလျှက် အိဘ်နေစအ်ဒ် စစ်တပ်ကြီး၏ရှေ့မှောက်တွင် မိန့်ခွန်းပေး၍ မိမိ၏အရိုက်အရာကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့လေသည်။ သို့သော် အိဘ်နေစအ်ဒ်ဘက်မှ ယဇီးဒ်နှင့်ဘိုင်အသ်ပြုသစ္စာခံရန်သာ ထပ်မံပြောဆိုခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)မှလည်း မည်သို့သောအခါမျှ ၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင် ကျေးကျွန်တစ်ဦးကဲ့သို့ ဦးညွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ဘက်မှ စစ်ပွဲကို အစပြုခဲ့ပြီး ၎င်း၏တပ်များသည် ဟိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ တဲနန်းများကို မီးဖြင့်ရှို့ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း(ဇိုဟိုရ်)ပြီးချိန်တွင် ဟိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ စစ်သည်များသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရသည်။ သိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ ဘက်မှ တစ်ဦးပြီးတစ်ဦးအလျင်အမြန် ကျဆုံးလျက် ရှိနေခဲ့ပြီး ဘနီဟာရှင်(မ)အမျိုးသားစစ်သည်များသည် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန် အခွင့်အလမ်းများသာခဲ့သော်လည်းထွက်မပြေးခဲ့ကြပေ။၎င်းသူတို့သည်လည်း ကျဆုံးလျက် ရှိနေခဲ့၏။ သိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ခိုက်လျက် ရှိခဲ့သည်။ ယာကူဘီသမိုင်းကျမ်းနှင့် အခြားသော ရှီအာသမိုင်းကျမ်းတို့၏အဆိုအရ ဟိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် မြောက်များစွာသောရန်သူတို့ကို သတ်ခဲ့သည် ဟုဖြစ်ပေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဟိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ ဦးခေါင်းနှင့် လက်မောင်းတို့တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး မြေပြင်ပေါ်သို့မျက်နှာနှင့်ကျခဲ့သည်။ ထိုသို့အနေအထားတွင် စေနားန်အိဘ်နေအနစ်အိဘ်နေနခ်အီသည် သူ့အား ဓားဖြင့် ထပ်မံခုတ်ပြီး ဦးခေါင်းနှင့်ကိုယ်တစ်ခြားစီပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။ ထိုအခါ အိဘ်နေဇေယားဒ်တပ်များသည် လုယက်မှုများကို စတင်ပြုလုပ်လေတော့သည်။ အိဘ်နေစအ်ဒ်၏စစ်သည်များ စစ်မြေပြင်ကို စွန့်ခွာသွားသောအချိန်တွင် အလ်ကာဇရီယာ ရွာ၌နေထိုင်ကြသော အစဒ်မျိုးနွယ်စုဝင်တို့သည် ဟိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏အလောင်းတော်နှင့် ကျန်အာဇာနည်အလောင်းတော်များအား ထိုစစ်မြေပြင်၌ပင် မြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဟိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ဦးခေါင်းတော်နှင့် ကျန်ဘနီဟာရှင်မျိုးနွယ်စုဝင် အာဇာနည်များ၏ဦးခေါင်းတော်များကို ကရ်ဘလာမှ ကူဖှာ ၊ ကူဖှာမှ ရှာမ်မြို့သို့ ယူဆောင်သွားခဲ့ကြသည်။
ရှီအာတို့သည် ကရ်ဘလာအဖြစ်အပျက်အပေါ်နှစ်ပတ်လည်တိုင်း ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားများကို ကျင်းပလေ့ရှိနေကြသည်။ သို့သော် ကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်သည် စစ်မှန်သောမွစ်လင်(မ)များ၏နက်ရှိုင်းလှသောနှလုံးသားအတွင်းထိထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်နေရာယူမှုသည် အောက်မေ့ဖွယ်ရာအခမ်းအနားများကျင်းပသည်ထက်ပင် ကြီးမားလေသည်။ သိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် မိမိ၏လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝစေရန်အတွက် မိမိနှင့်မိမိ၏မိသားစုဝင်တို့၏အသက်ကို စတေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူသည် မိုအာဝေယာနှင့် ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်ကို ချိုးဖေါက်မှုမပြုခဲ့ပေမဲ့ ထိုစာချုပ်နှင့်ဆန့်ကျင်၍ ယဇီးဒ်ဘက်မှ သစ္စာခံခိုင်းစေမှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သူသည် မိမိဖခမည်းတော်ကဲ့သို့ အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏အနွယ်ဝင်များ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏နောက်လိုက်(အွမ္မသ်)သားများအပေါ် အုပ်ချုပ်လမ်းညွှန်ရန်အတွက် အရှင်မြတ်ဘက်မှ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခဲ့သည် ဖြစ်ကြောင်းကို အပြည့်အဝယုံကြည်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကူဖှာမြို့သားတို့ဘက်မှ ရေးသားခဲ့သော စာများရောက်ရှိလာသည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိတာဝန်ကြေပွန်စေရန်အလို့ငှာ ကူဖှာသို့ သွားရန် အသင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ကရ်ဘလာတွင် ဘနီအိုမိုင်ယာဘက်မှ တခဏအတွင်းထိုသို့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုများကြောင့် ဘနီအိုမိုင်ယာတို့၏ ရက်စက်ရုတ်မာမှုများသည် သမိုင်း၌တွင်သွားစေခဲ့သလို ကရ်ဘလာ စစ်ပွဲပြီးနောက် ရှီအာတို့အားလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ရန် တွန်းပို့ပေးခဲ့လေသည်။
၁ အစွဲပြု၍ခေါ်သောအမည်နှင့် ဘွဲ့တော်များ
၂ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ထကြွတော်လှန်မှုနှင့် သူ၏ကြမ္မာတရား သမိုင်းကြောင်းပြုစုရန် ရင်းမြစ်များ
၉.၁ ယဇီးဒ်နှင့် ဘိုင်အသ် (သစ္စာ) မခံမှု နှင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များ
၉.၂ ကူဖာမြို့သားများမောမ် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) အား ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် အေမာမ်(အ.စ)သည် မွစ်လင်(မ) အိဘ်နေ အကီးလ် အား စေလွှတ်ခြင်း
၉.၃ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ) ကူဖှါမြို့ဘက်သို့ထွက်ခွာခြင်း
၉.၆ ကရ်ဘလာတွင် ကျဆုံးသူများနှင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သူများစာရင်း
၁၁ ကရ်ဘလာစစ်ပွဲဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းနှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ်ထားရှိသောအမြင်များ
၁၂ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အတွင်းမှ ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)
၁၂.၂ မိုဘာဟေလာနှင့်သက်ဆိုင်သော အာယသ်တော်
၁၃ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ကြံမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုရ်အာန်နှင့်ဟဒီးတော်တို့မှ ကြိုတင်၍မိန့်ဆိုထားမှုများ
၁၃.၄.၂ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဦးခေါင်းတော်၏ မော့အ်ဂျေဇာ
၁၃.၄.၃ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား စော်ကားသူများနှင့်ရှဟီးဒ်လုပ်သူတို့၏ဘဝ
၁၃.၄.၄ လူတို့အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာဖြစ်စေတော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တန်ခိုးတော်
၁၄ အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ
ရှိရှိသမျှသောသမိုင်းကျမ်းရင်းမြစ်များတွင် ဟိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ အစွဲပြု၍ခေါ်သော အမည်(ကွန်နီယသ်)မှာ အဘူအဘ်ဒုလ္လာဟ် ဖြစ်ပြီး အထူးပုဂ္ဂိုလ်များက သူ့အား အဘူအလီဟုလည်းခေါ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဖော်ပြထားလေသည်။ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ထံတော်တွင် ဘွဲ့တော်များစွာရှိပြီး နောင်တော်ဟစန်(အ.စ)၏ဘွဲ့တော်များအတိုင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် သူ့ထံတွင်အခြားဘွဲ့တော်များလည်းရှိနေသေးသည်။၎င်းတို့မှာ ဇကီး၊ဝဖီး၊ဆိုင်ယိဒ်၊ မိုဘာရက်၊နာဖေ့အ်၊ အဒ်ဒလီးလ် အလာ ဇားသိလ္လာဟ်၊ ရရှီးဒ်၊ အသ်သားဘေ့အို အလာ မရ်ဒွာသီလ္လာဟ် တို့ဖြစ်သည်။ အိဘ်နေသွလ်ဟာသည်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏အကျော်ကြားဆုံးသော ဘွဲ့တော်ကို ဇကီး ဟု ယူဆထားပြီး ယင်းဘွဲ့တော်များအတွင်းမှ အရေးပါဆုံးနှင့် အဓိကအကျဆုံးသော ဘွဲ့တော်သည် ဆိုင်ယေဒိရှ်ရှဘားဘေအဲဟ်လီလ်ဂျန်နာဟ် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ထားသည်။ ရှီအာတို့၏အေမာမ်များထံမှ ဆင့်ပြန်ထားသော အချို့ရေဝါယသ်(အဆိုအမိန့်)များတွင် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား ရှဟီးဒ်(သို့) ဆိုင်ယီဒိုရှ်ရှိုဟဒါ ဟု ဖော်ပြထားလေသည်။ ဟီဂျရီလေးရာစုနှစ်နှင့်၎င်းနောက်ပိုင်း၌ ရေးသားခဲ့သော သမိုင်းများနှင့် စာအရေးအသားများတွင် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် သူ့၌ အုပ်ချုပ်မှုထီးနန်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ သူအားအမီးရွလ်မို့အ်မေနီးန်း ဟု တမ်းတခဲ့ကြသည်။
​သောင်ရားသ်ကျမ်းတွင် သူ၏အမည်မှာ ရှဘီးရ်ဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်တို့၏ ဘိုင်ဘလ်ကျမ်းတွင် လာရှိထားသည်မှာ မူဆာနဗီ(အ.စ)၏ညီတော် ဟာရူန်း(အ.စ)သည် အရှင်မြတ်ဘက်မှ အလီ(အ.စ)၏ သားတော်များအတွက် ရွေးချယ်ပေးခဲ့သော အမည်များကို သင်ယူပြီး မိမိ၏သားတော်နှစ်ပါးကို ပေးခဲ့သည်။
ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ထကြွတော်လှန်မှုနှင့် သူ၏ကြမ္မာတရား သမိုင်းကြောင်းပြုစုရန် ရင်းမြစ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ထိုရင်းမြစ်များအတွင်း ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့ရှိပြတိုက်၌ရှိသော လက်ရေးဖြင့်ရေးသားထားသော သမိုင်းကျမ်းတဆူ ဖြစ်သည့် အဘူမိုခန်နဖ် ကျမ်းသည် ရင်းမြစ်များအတွင်း ပိုမိုခိုင်လုံမှုရှိသည်။ ထိုသမိုင်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးပါသော ရင်းမြစ်ကျမ်းများမှာ သဘရီနှင့် ဘေလာဇရီတို့ဖြစ်သည်။ ထိုသမိုင်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သွဘရီ၏ရေဝါယသ်များသည် သုံးမျိုးသုံးစားရှိပေသည်။
အဘူမိုခန်နဖ်(၁၅၇ ဟီဂျရီနှင့် အေဒီ ၇၇၄ တွင်သေဆုံး)ကျမ်းတွင်ပါရှိသော ရေဝါယသ်တော်များသည် ကရ်ဘလာတွင် မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့သူများထံမှ ဆင့်ပြန်ထားသည့် အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းရေးသားထားလေသည်။
မြောက်များစွာသော ရေဝါယသ်တော်များကို ဟိုရှာမ်းအိဘ်နေမိုဟမ္မဒ်ကလ်ဘီ ထံမှ ဆင့်ပြန်ထားခဲ့ပြီး ၎င်းသည်လည်း မိမိ၏ဆရာဖြစ်သူ အဘူမိုခန်နဖ် ထံမှ ဆင့်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားသော ဟဒီးစ်(ဩဝါဒ)ဆင့်ပြန်သူများထံမှ ဆင့်ပြန်ထားသော ရေဝါယသ်တော်များသည် များသောအားဖြင့် အဓိကအချက်များကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
ဘေလာဇရီသည် သွဘရီ၏ ရင်းမြစ်များမှ ယူပြီး အကျဉ်းချုံးပြီး ထိုရေဝါယသ်များသည် အရေးပါသောရေဝါယသ်တော်များဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးအပြင် အခြားသော ရေဝါယသ်တော်များသည်လည်းရှိထားပေသည်။Laura Veccia Vaglieri (အီတလီနိုင်ငံပညာရှင်တစ်ပါး)မှ ဤသို့ယုံကြည်ထားသည်မှာ သမိုင်းရေးသားပြုစုကြသော သမိုင်းသုသေတီများဖြစ်သည့် ဒေန်းဝရီ ၊ယာကူဘီ နှင့် အိဘ်နေ အဘ်ရဘီဟာဟ် စသဖြင့် တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တိကျခိုင်မာသော သမိုင်းများကို တင်ပြပေးခြင်းမဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင် ၎င်းသူတို့သည် အဘူမိုခန်နိဖ်ထံမှ ဆင်ပြန်၍ ကျွန်ုပ်အတွက် တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ရှီအာတို့သည် မိမိတို့အမြင်၌ မှန်ကန်သည်ဟူသောရေဝါယသ်တော်များကိုသာ စစ်မှန်သော ရေဝါယသ်တော်များအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပြီး ထိုသို့စစ်မှန်သောရေဝါယသ်တော်များသည် များသောအားဖြင့် ရှေးခ်မိုဖီးဒ်အားရင်းမြစ်ခံသည်။ အခြားကျန်ရေဝါယသ်တော်များကို ဖန်တီးထားသော ရေဝါယသ်များဟုတ်မဟုတ်စမ်းစစ်ပြီးမှ လက်ခံကြသည်။ ကရ်ဘလာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟီဂျရီ ၇ ရာစုနှစ် ၊ အေဒီ ၁၃ ရာစုနှစ်များတွင် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော ရေဝါယသ်မြောက်များစွာပေါ်လာခဲ့သည်။ဥပမာအနေဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် စစ်မြေပြင်၌ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် တစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်ခဲ့သော အချိန်တွင် မြောက်များစွာသော သူတို့ကို သတ်ခဲ့သည် (သို့) သူသည် စစ်မြေပြင်၌ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ကဲ့သို့ မိမိကိုယ်မိမိခုခံကာကွယ်ခဲ့သည် စသဖြင့်တို့ဖြစ်သည်။ ဤသို့မဟုတ်မမှန်သောရေဝါယသ်တော်များကို အိဘ်နေကစီးရ် မှ ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့သို့သောလုပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အများ၏ထိုးနှက်ပြောဆိုမှုများကိုလည်း ၎င်းခံခဲ့ရသည်။
မိုဟမ္မဒ်ဟာအေရီရေးသားခဲ့သည်မှာ -အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)ဖွားမြင်တော်မူသော ခုနှစ်ကို ဟီဂျရီ(၃)ခု(သို့) (၄)ခု (သို့)(၅)ခုနှင့် ဖွားမြင်တော်မူသောနေ့ကို အများက ရှာအ်ဘာန်လ(၃)ရက်ဟု ဆိုထားကြသလို ရဘီအွလ်အောင်ဝဲလ်လအဆုံးနှင့် ရှာအ်ဘာန်လအစအပြင် ရှာအ်ဘာန်လ(၅)ရက်နေ့ဟု ဆိုထားကြလေသည်။ ဖွားမြင်တော်မူသည့်နေ့နှင့် အချိန်အား ကြာသပတေးနေ့နှင့် နေဝင်ချိန်ဟု ရေးသားထားကြသည်။ မြေးတော်နှစ်ပါးအကြား ဖွားမြင်တော်မူသည့်ကာလ ကွာဟချိန်မှာ အချို့က (၆)လနှင့်(၁၀)ရက်၊အချို့က (၁၀)လနှင့်(၂၂)ရက်ဟု ဆိုထားကြသည်။ သို့သော် မာဒလွန်းဂ်ဆိုသူက အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဟီဂျရီ(၄)ခုနှစ် ရှာအ်ဘာန်(၅)ရက်၊ အေဒီ(၆၂၆)ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်နေ့တွင်ဖွားမြင်သည်ဟု မြောက်များစွာသော ရေဝါယသ်တော်များကို သက်သေပေး၍ ဆိုထားလေသည်။ သူ၏မွေးနေ့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟီဂျရီ(၆)ခုနှစ် ဂျမာဒိလ်အောင်ဝလ်လ၊ အေဒီ(၆၂၇)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလဆန်းဟု ဖော်ပြထားလေသည်။
ဖွားမြင်တော်မူသောအချိန်တွင် အဘိုးတော်သည် အေမာမ်ဟစန်(န)ဖွားမြင်တော်မူသောနေ့တွင် ပြုကျင့်ခဲ့သည့်အတိုင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ဖွားမြင်တော်မူချိန်တွင်လည်း အဇာန်ပေးခြင်းနှင့်အကီကာပြုလုပ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဘ္ဘားစ်အိဘ်နေအဘ်ဒုလ်မွသ်လိဘ်၏ဇနီးဖြစ်သူ အွမ်မေဖှဇ်လ်ထံသို့ နို့ချိုတိုက်ကျွေးရန် ပို့သခဲ့သည်။ သခင်မသည် မိမိ၏သားအရင်းဖြစ်သူ ကစမ်အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်နှင့်အတူ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား နို့ချိုတိုက်ကျွေးခဲ့မှုကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် နို့ဆို့ဘက်ညီအစ်ကိုများဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကိုလိုင်နီမည်သော ပညာရှင်ကြီးမှ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် မိခင်ဖှာသေမာထံမှလွဲ၍အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံ၌ နို့ချိုသောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဟု ဆင့်ပြန်ထားလေသည်။ အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်သည် မြေးတော်အား ရှဘီးရ်၊ဟိုစိုင်း(န)ဟု မည့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုအမည်နာမတော်များသည် ဟာရူန်(အ.စ)၏သားတော်အငယ်၏အမည်ဖြစ်ပေသည်။ အလီ(အ.စ)သည် မိမိသားတော်အမည်ကို ဟရ်ဘ် ဟုပေးလိုခဲ့သော်လည်း တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် မြေးတော်အား အမည်ပေးခဲ့သထားအတွက် သားတော်၏ထိုအမည်များကို နှစ်သက်ခဲ့လေသည်။ အခြားရေဝါယသ်တော်များတွင် ဟဘရှာတွင် ရှိနေခဲ့သော ဂျာအ်ဖရ်သွယားရ်၏ အမည်နာမတော်အတိုင်း အစပိုင်း၌ ဂျာအ်ဖရ်ဟု အေမာမ်ဟိုစိုင်းအားပေးခဲ့ကြပေမဲ့ တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်သည် မြေးတော်အား ဟိုစိုင်း(န)ဟူ၍သာပေးခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားလေသည်။ ရှီအာတို့က ဟိုစိုင်း(န)ဟူသောနာမတော်သည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအမည်သာလျှင် ကနဦးမှ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်း(န)ဟူသော နာမတော်နှစ်ခုသည် ဂျန္နသ်သုခဘုံမှ နာမတော်များဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အာရဗ်တို့အကြား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဟု ရေဝါယသ်တော်များတွင် ဖော်ပြထားလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဖွားမြင်တော်မူပြီးချိန်မှစ၍ ပထမ(၇)နှစ်သည် အဖိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏လက်ပေါ်တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မွစ်လင်(မ)တို့၏တမန်တော်ဖြစ်သလို သူ၏အဖိုးတော်ဖြစ်သည်။ မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) သက်တော်(၇)နှစ်အရွယ်၌ပင် တမလွန်သို့ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) သည် အဘိုးတော်နှင့်နေခဲ့ရသည့်သက်တမ်းအလွန်နည်းပါးခဲ့သည်။ အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မြေးတော်ဟစန်-နေ-မွဂျ်သဘာနှင့် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တို့ကို အလွန်မှပင်ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြောင်းအား ရေဝါယသ်တော်များတွင် ဖော်ပြထားမှုများကို တွေ့မြင်နေရပေသည်။ဥပမာအနေဖြင့်တင်ပြရလျှင် (မည်သူမဆို သူနှစ်ဦးအား ချစ်ခင်နှစ်သက်ပါက ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး အကြင်သူသည် သူနှစ်ဦးအား မုန်းတီးပါက ထိုသူသည် ကျွန်ုပ်အား မုန်းတီးခြင်းပင်ဖြစ်ချေသည်။ ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်န်သည် ဂျန္နသ်သုခဘုံ လူငယ်များ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ရှီအာတို့သည် ဒုတိယ ဟဒီးတော်ကို ပိုမိုအလေးထားကြပြီး ထိုဟဒီးစ်တော်အရ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) တို့၏ အေမာမသ်သည် စစ်မှန်သော အေမာမသ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပေးထားကြသည်။ အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်သည် မြေးတော်နှစ်ပါးကို တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏ပေါင်ပေါ်၌ ပွေ့ထိုင်ထားသလို တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏ပုခုံးပေါ်တွင် တင်ထားလေ့ရှိသည်။ အဘိုးတော် ဝတ်ပြုချိန်များတွင် စဂျ်ဒါဟ် အနေအထားတွင် မိမိ၏ကျောခုံးပေါ်သို့ တက်လျက် ရှိနေခဲ့ပါလျှင်လည်း ထိုစဂျ်ဒါအနေအထားအတိုင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေခဲ့လေ့ရှိသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် တခါတရံ မြေးတော်နှစ်ပါးအား ပေါင်ပေါ်တွင် တင်ထားလျှက် လူတို့အကြားမိန့်ခွန်းများ ပြောလေ့ရှိခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)သည် မြေးတော်အကြီးဖြစ်သည့်အတွက် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) ကဲ့သို့ အဘိုးတော်မှ အလေးပေးမှုများရှိခဲ့သလို အဘိုးတော်နှင့် အချိန်ကာလများစွာ အတူနေခဲ့ရသည်။ မြေးတော်နှစ်ပါးလုံးသည် အဘိုးတော်နှင့် အလွန်ပင် ရုပ်ရည်အသွင်လက္ခဏာများ တူခဲ့ပေမဲ့ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ) အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)နှင့် ပို၍တူလေသည်။ မြေးတော်နှစ်ပါးငယ်စဉ်ဘဝတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဓိကအကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်များမှာ မိုဘာဟေလာ ဖြစ်စဉ်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုနှစ်ပါးသည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် မိုဘာဟေလာအာယသ်တော်၏ «ابناءَنا» ဟူသော ဝေါဟာရ၏ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်သူများသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
ရေဝါယသ်တော်တစ်ခုအရ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် အိုမရ်အုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း၌ ၎င်းမှ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ မင်ဘရ် (တရားဟောစင်မြင့်)ပေါ်ထိုင်လျှက် ဟောပြောနေစဉ် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ရောက်ရှိလာပြီး တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ မင်ဘရ်ပေါ်ထိုင်သည့်အတွက် စောဒကတက်ခဲ့သည့်အခါ အိုမရ်သည် မိမိ၏ဟောပြောမှုကို တဝက်နှင့်ပင်ရပ်တန့်၍ မင်ဘရ်မှဆင်းခဲ့သည်။ အိုမရ်သည် မိမိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း အေမာမ်ဟစန်နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တို့သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မြေးတော်များဖြစ်သည့်အတွက် အေမာမ်အလီ(အ.စ)နှင့် ဘဒဲရ်တိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်သူများအားလုံးကို တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာမှ အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိသကဲ့သို့ အခွင့်အရေးရှိခဲ့လေသည်။ အချို့သော သမိုင်းကျမ်းများ၏ ရေးသားဖော်ပြချက်များအရ အေမာမ်ဟစန်နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တို့သည် ဟီဂျရီသက္ကရဦဇ် ၂၉ ခုနှစ် သွဘရီစ်တာန် ကိုအောင်နိုင်မှု့၌ ပါဝင်ခဲ့ကြလေသည်။..
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အွစ်မာန်းလက်ထက်၌ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဆွဟာဘာတစ်ဦးဖြစ်သူ အဘူဇရ် ဂဖာရီအား ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့သည့်အချိန်တွင် မိမိသည် ဖခမည်းတော်အလီ(အ.စ)နှင့်နောင်တော် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)တို့နှင့်အတူ အဘူဇရ်ဂဖာရီ အားလမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည်။ မာဒလူးန်ဂ်ဆိုသူသည် ကျမ်းတစ်ခုတွင်ရေးသားထားသည်မှာ အွစ်မာန်၏အိမ်အား ပြည်သူများမှ ဝိုင်းရံထားသည့်အချိန်တွင် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ဆွဟာဘာတို့၏သားများနှင့်အတူ အွစ်မာန်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် သွားရောက်ခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ အွစ်မာန်သည် စစ်သည်ထပ်မံစေလွှတ်ပေးရန်အတွက် အလီ(အ.စ)ထံတောင်းဆိုလာသောအခါ အေမာမ်အလီ(အ.စ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား ထပ်မံစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အွစ်မားန်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)အား မိမိကိုယ်မိမိ သူပုန်ထသူများလက်မှ ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု ပြောဆို၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အပြင်သို့ သွားရောက်စေခဲ့သည်။ ထိုအတိုင်းတဘက်မှလည်း မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်က အွစ်မာန်းအပေါ်တော်လှန်ပုန်ကန်ရန်အတွက် အလီ(အ.စ)သည် လူတို့အား လိုက်လံ သွေးထိုးလှု့ဆော်နေသည်ဟု ဝါဒဖြန့်လျက် ရှိနေခဲ့သည်။ အမှန်မှာတော့ အလီ(အ,စ)သည် ဤသို့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ အွစ်မာန်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက်ပင် မိမိ၏သားတော်နှစ်ပါးကို စေလွှတ်ခဲ့လေသည်။ မိုဟမ္မဒ် အေမားဒ် ဟာအေရီရေးသားခဲ့သည်မှာ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အစ)တို့သည် အွစ်မာန်းကိုအား ခုခံကာကွယ်ပေးရင်း ဒဏ်ရာများပင်ရခဲ့ကြသည်ဟု ဖြစ်သည်။
ဖိုင်:Ali hassan housein.jpg
ရာစုနှစ် ၁၉ ခန့်တွင် အေမာမ်အလီ(အ.စ)နှင့် သားတော်နှစ်ပါးပုံတူအားရေးဆွဲခဲ့သော ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုတွေ့ရစဉ်
အေမာမ်အလီ(အ.စ) အုပ်ချုပ်နေစဉ် ကာလ၌ ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် ဖခင်နှင့်အတူ စစ်ပွဲတိုင်းတွင် ဖခင်ဘက်မှပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် စစ်ဖီးန်တိုက်ပွဲတွင် မိမိတို့၏ရဲဘော်များအကြား ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းတစ်ခုကို မြွက်ကြားခဲ့သည်။ ခမည်းတော်အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလ၌ မိမိသည် နောင်တော်ဟစန်(အ.စ)ပြီးနောက် ဇကားလိုက်လံသိမ်းဆည်းကောက်ခံရာတွင် ဦးရှောင်နေရာ၌ တာဝန်ယူထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ အလီ(အ.စ)အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အေမာမ်အလီ(အ.စ)နှင့်အတူ အမြဲအနီးကပ်ဆုံးနေထိုင်ခဲ့သော ဘနီဟာရှင်မျိုးနွယ်မှသူတို့သည် သားတော်ဟစန်(အ.စ)၊သားတော်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) ၊သားတော်မိုဟမ္မဒ်ဟနဖီးယာဟ်နှင့် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ် တို့ဖြစ်လေသည်။ မာအ်ဝီယာမှ လာနသ်(အရှင်မြတ်၏ဂရုဏာတော်မှကင်းဝေးပါစေဟု)ပို့သ ကျိန်စာတိုက်ခဲ့သောသူများအတွင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည်လည်း တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အေမာမ်အလီ(အ.စ)ဓားခုတ်ခံရမှုကြောင့် ရှဟီးဒ်ဖြစ်(အသက်ဆုံးရှုံး)ချိန်၌ ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် မဒါအင်န် ဆိုသည့်ဒေသတွင် တာဝန်ဖြင့် ရောက်ရှိနေခဲ့သည်။ နောင်တော် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)၏ ပေးပိုစာရသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဖခမည်းတော်၏ဈာပနအခမ်းအနားအမှီ အပြေးရောက်လာခဲ့သည်။
ကူဖှာအရေးအသားဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)ရေးသားခဲ့သော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တော်
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မာအ်ဝေယာနှင့် ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်ဆိုရန်သဘောမတူလိုခဲ့ပေမဲ့ နောင်တော် ဟစန်(အ.စ)၏အမိန့်တော်ကို နာခံပြီး ထိုသို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်မပြုခဲ့ပေ။ ထိုသို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကူဖာမြို့သားတို့သည် မာအ်ဝေယာတပ်အား အနောက်ဘက်မှ အလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အားအကြံပြုလာသည့်အခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထိုအကြံပြုချက်ကိုလုံးဝ လက်မခံခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ မာအ်ဝေယာသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသရွေ့ကာလပတ်လုံး ထိုစာချုပ်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသစ္စာကတိ တည်မြဲရမည်။ သို့သော် မာအ်ဝေယာ သေဆုံးသွားခဲ့သည့်အခါ တစ်မျိုးတစ်မည် ပြန်လည် တွေးတောကြံဆကြမည် ဟုဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် နောင်တော်ဟစန်(အ.စ)နှင့် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်တို့နှင့်အတူ ကူဖှာမှ မဒီနာသို့ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မာအ်ဝေယာ၏ ခေတ်ကာလတွင် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျှ မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။ သမိုင်းက သက်သေပေးနေသည်မှာ အေမာမ်အလီ(အ.စ)ရှီအာ(နောက်လိုက်)များအတွင်းမှ ဟွဂျ်ရ်အိဘ်နေအိုဒိုင်းယ်ဆိုသူသည် မာအ်ဝေယာအားတော်လှန်ရန်အတွက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံအကြိမ်ကြိမ်လာရောက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဘေလာဇရီ ၏ရေးသားချက်အရ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မာအ်ဝေယာအသက်ရှိစဉ်ကာလတလျှောက်လုံး မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမှလုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း နှင့် ဤသို့မိန့်ဆိုရသည့်အဓိပ္ပာယ်မှာ အသင်တို့အမြဲတမ်းအသင့်ရှိကြပါလေ ယခုတစ်စုံတစ်ရာ မပြောဆိုလေနှင့် ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။"
မိုဟမ္မဒ်အေမားဒ်ဟာအေရီဆိုသည်မှ ရေးသားခဲ့သည်မှာ -နောင်တော်ဟစန်(အ.စ)လက်ထက်၌ပင် မာအ်ဝေယာနှင့်ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီ(၁၀)နှစ်ကြာသည်အထိ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့် ခံယူချက်၌လည်းကောင်း ကြံဆမှုများ၌လည်းကောင်း အတွေးအခေါ်ပိုင်း၌လည်းကောင်း တူညီမှုရှိခဲ့သည်။ မည်မျှပင် မာအ်ဝေယာနှင့် စာချုပ်ချုပ်မှုကို မလိုလားခဲ့ပါစေ။ ထိုသို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်း၌လည်း မာအ်ဝေယာနှင့် သစ္စာခံယူမှု(ဘိုင်အသ်ပြုလုပ်မှု)အလျဉ်းမရှိခဲ့ပေ။ သို့သော် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များအပေါ်ကတိသစ္စာတည်ခဲ့သည်။ မိုဟမ္မဒ်ဘာကိရ်မှ ရေဝါယသ်တစ်ခုကို ဆင့်ပြန်ထားသည်မှာ အေမာမ်ဟစန်နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)တို့သည် မာအ်ဝေယာဘက်မှ ခန့်အပ်ထားသော မဒီနာမြို့စား မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်၏နောက်တွင် နမားဇ်ဝတ်ပြုခဲ့သည်ဟု ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆယိဒ် မိုဟမ္မဒ်အေမားဒီ ဟာအေရီသည် ရှီအာတို့၏ရင်းမြစ်ကျမ်းများတွင် ရေးသားထားသော အထောက်အထားများအတွင်းမှ ဟွရ်အာမိုလီ၏ အပြစ်ရှိသူတို့၏နောက်တွင် နမားဇ်ဝတ်ပြုခြင်းသည် မပိုင်ကြောင်း ဟုပြောကြားချက်ကို သက်သေပြု၍လည်းကောင်း သမိုင်းကျမ်းများတွင်ပါသော အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မရ်ဝါန်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်ဆံပုံများကို သက်သေထား၍ အထက်ပါ ရေဝါယသ်သည် မမှန်ကန်ကြောင်း ကိုထောက်ပြထားလေသည်။
ထိုကာများအတွင်း၌ပင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အဘူမရ်ရာဟ်အိဘ်နေမစ်အူးဒ်စကဖီး၏သမီးတော် လိုင်လားနှင့် ထိမ်းမြားမှုပြုခဲ့သည်။ ထိုမှ အလီအက္ကဘရ်(အ.စ)ကို ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ အဘူမရ်ရာဟ်သည် အမဝီမျိုးနွယ်စုတို့နှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားသဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံသို့ ငွေကြေးဥစ္စာများ မာအ်ဝေယာဘက်မှ အမြဲပို့သလေ့ရှိသည်ဟု ရေးသားကြသည်။၎င်းအပြင် အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် မိမိကျမ်းတွင်ရေးသားထားသည်မှာ မာအ်ဝေယာသည် ဒီရ်ဟမ်(ရွှေဒင်္ဂါး)၃၀၀၀၀၀ ကို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပို့ခဲ့သည်။(ဤသို့ရေးသားမှုများသည် အလျဉ်းခိုင်လုံမှုမရှိနိုင်ပါ စစ်မှန်သော သမိုင်းကျမ်းများကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက ရှင်းလင်းစွာသိနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မာအ်ဝေယာသည် အလီ(အ.စ)အား အမြဲတမ်း (လာအ်နသ်ပို့သ)ကျိန်ဆဲလေ့ရှိခဲ့သည်။ ရှီအာများကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချလေ့ရှိခဲ့သည်။ မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်မှလည်း မဒီနာမြို့အတွင်း ဘနီအိုမိုင်ယာနှင့်ဘနီဟာရှင်မ် မျိုးနွယ်စုနှစ်စုအကြားပြေလည်မှုရရှိရန်ကြိုးစားသူအားလုံး ရပ်တန်းကရပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင်မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်သည် မာအ်ဝေယာ၏အမိန့်အရ ယဇီးဒ်နှင့်အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်၏သမီး အွမ္မေကွလ်စူမ်သခင်မ(အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏တူမတော်)အားထိမ်းမြားပေးပါရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အခါ အေမာမ်ဟိုင်စိုင်းန်(အ.စ)ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် အွမ္မေကွလ်စူမ်သခင်မအား မိုဟမ္မဒ်အိဘ်နေအဘီဘက်ရ်၏သားတော် ကာစင်မ် နှင့်ထိမ်းမြားပေးလိုက်လေသည်။ ထို့အပြင် မရ်ဝါန်သည် မဒီနာမြို့အတွင်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် အလီ(အ.စ)အပေါ် လာအ်နသ်ပို့သခဲ့သည့်အခါ ၎င်းအပေါ် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည်လွန်စွာမှပင် အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ခေတ်ကာလ၌ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသော မရ်ဝါန်နှင့် ၎င်း၏ဖခင်ဖြစ်သူ ဟကမ်တို့အား လာအ်နသ်ပို့သခဲ့လေသည်။
အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)အဆိပ်ပေးခြင်းခံရခဲ့ပြီးအိပ်ယာအတွင်း၌ နာမကျန်းဖြစ်နေခဲ့စဉ် အေမာမ်ဟစန်သည် မာအ်ဝေယာလုပ်ကြံခိုင်းခဲ့ကြောင်း မိမိညီတော်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)အား မပြောခဲ့ပေ။ ထိုအချိန်များတွင် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)သည် မိမိလောကကြီးကို နုတ်ဆက်သွားခဲ့သည်ရှိသော်မိမိအား ဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ(ဆွ)၏ နဘေးတွင် မိမိအား မြှုပ်နှံရန်မှာကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ မြှုပ်နှံမည့်ကိစ္စအပေါ် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလုပ်သူများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး သွေးစီးယိုမှုအနေအထားများဖြစ်လာခဲ့မည်ဆိုလျှင် ထိုမိမိအား မိခင်ဖှာတေမာ(စ.အ)၏ နဘေး၌သာ မြှုပ်နှံရန် ထပ်မံပြောဆိုမှာကြားခဲ့လေသည်။ သို့သော် မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်သည် အိုင်ယေရှာ၏ သွေးထိုးမှုဖြင့် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)အား တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အုပ်ဂူဘေးတွင် မြှုပ်နှံရန်စီစဉ်မှုကို ဟန့်တားခဲ့ပြီးနောက် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)၏ ရုပ်ကလာပ်တော်ကိုပင် မြှားများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရင်းမှာ အွစ်မာန်သေဆုံးသွားစဉ်က ၎င်းသူအား ဘကီးဟ်သင်္ချိုင်းတွင် မြှုပ်နှံခွင့်မပေးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ဤသို့မြှားများဖြင့် ပစ်ခတ်၍ လက်စားချေတားဆီးခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ကိုရိုင်းရှ်တို့၏ ဟလ်ဖွလ်ဖိုစူးလ် ကတိစာချုပ်အရ ဘနီဟာရှင်မ်၏ အခွင့်အရေးများကို ဘနီအိုမိုင်ယာထံမှ တောင်းခံခဲ့လေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် မိုဟမ္မဒ်အိဘ်နေဟနဖီယာနှင့် အခြားသူတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်တိုင်ပင်ပြီး အေမာမ်ဟစန်မှာကြားထားသည့်အတိုင်း မိမိခင်၏ဂူဗိမ္မာန်ဘေးတွင် မြှုပ်နှံရန် စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက်ပိုင်းမှစ၍ ကူဖှာမြို့ရှိ ရှီအာတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် စတင်သစ္စာခံကြလေတော့သည်။၎င်းတို့သည် ဂျိုအ်ဒါအိဘ်နေဟိုဘိုင်ရာအိဘ်နေ အဘီဝဟဘ် မခ်ဇူမီ၏သားများနှင့်အတူ စိုလိုင်မားန်းအိဘ်နေစိုရဒ်ခဇာအီ၏အိမ်တွင် တွေ့ဆုံတိုင်ပင်ကြပြီးနောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံ စာတစ်စောင်စတင်ပို့သခဲ့ကြပြီး အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့သည့်အပေါ်ဝမ်းနည်းကြောင်းကိုပါ တပါတည်းရေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသူတို့သည် ယင်းစာအတွင်း၌ပင် ရေးသားခဲ့ကြသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ် မိမိတို့သစ္စာရှိကြောင်း ၊ ယဇီးဒ်နှင့်မာအ်ဝေယာအပေါ်အလွန်ပင်ရွံရှာကြောင်း နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံသို့လာရောက်ပူးပေါင်းလိုကြောင်း စသဖြင့်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့် မာအ်ဝေယာတို့ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်ကို မချိုးဖေါက်ရန်နှင့် မိမိတို့၏ စိတ်ခံစားချက်များအတိုင်း မပြုလုပ်ကြရန် အပြင် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် မာအ်ဝေယာ သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း အသက်ထင်ရှားရှိခဲ့မည်ဆိုပါက မိမိလုပ်ဆောင်သင့်သည်များကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် စာရေးသားပေးပို့ခဲ့လေသည်။
တတိယမြောက်ခလီဖာ အွစ်မာန်း၏သားဖြစ်သူ အမရ်သည် မဒီနာမြို့၌ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် များစွာသောရှီအာတို့နှင့် တွေ့ဆုံနေမှုများကို မရ်ဝါန်အား သတိပေးခဲ့သည်။ မရ်ဝါန်သည်လည်း ထိုအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ မာအ်ဝေယာထံသို့ စာရေးအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် မာအ်ဝေယာသည် မဒီနာမြို့တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် လူအများသွားလာနေမှုများကို သိရှိခဲ့ရသည်။ သို့သော် ထိုအကြောင်းအရာများအပေါ် မာအ်ဝေယာဘက်မှ တစ်စုံတစ်ရာ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်းကောင်းမှ ဤသို့ပြောကြားခဲ့သည်မှာ -မည်သည့်အခါတွင်မဆို မစ်ဂျိဒ်ဒွန်နဗဝီအတွင်း လူအုပ်စုကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့အကြား၌ အကျိုးမရှိသော စကားများပြောခြင်းမရှိခဲ့ပါက ထိုအုပ်စုသည် ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ အုပ်စုသာလျှင်ဖြစ်မည်ကို သိထားပါလေ။ ထို့အပြင် မာအ်ဝေယာသည် မဒီနာမြို့စား မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်အား မှာကြားခဲ့သည်မှာ ဟိုစိုင်း(အ.စ)အား မည်သို့မျှတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုရန်ဖြစ်သည်။ အေမားဒီဟာအေရီရေးသားထားသည်မှာ- အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)သည် ဘနီအိုမိုင်ယာတို့နှင့်ပတ်သက်လာပါက အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)ထက်ပို၍ ပြင်းပြလေသည်။ တနေ့သောအခါတွင် မရ်ဝါန်သည် သခင်မကြီးဖှာတေမာ(စ.အ)အား စော်ကားသော စကားပြောခဲ့ပြီး အေမာမ်အလီ(အ.စ)ကို ဆဲဆိုရိုင်းပြခဲ့သည့်အတွက် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် ၎င်းသူအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် အေမာဒီဟာအေရီသည် ရှီအာတို့အတွင်းရှိ အေမာမသ်(ခေါင်းဆောင်မှု) ၏အဓီပ္ပါယ်နှင့် သမိုင်းကြောင်းကို ကိုးကား၍ အေမာမ်ဟစန်နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့သည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအပေါ်၌သာ လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအကြောင်းအရာအပေါ်၌ သက်သေထူရန်အတွက် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)၏ဈာပနကိစ္စဆောင်ရွက်မှုနှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိ၏နောင်တော်ဟစန်(အ.စ)၏မှားကြားချက်များကို လိုက်နာမှုများကို အထောက်အထားပေး၍ တင်ပြထားလေသည်။ တနေ့သောအခါတွင် မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်သည် ပြင်းထန်သော စာတစ်စောင်ရေးသား၍ အစ္စလာမ့်အွမ္မသ် (လူထု)အကြား သွေးမခွဲရန် သတိပေးခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်မှလည်း ထိုစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြင်းထန်စွာပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် မာအ်ဝေယာသည် ဇေယားဒ်အိဘ်နေအဘီးဟ် ဆိုသူအား ၎င်း၏မိခင်သည် မိမိ၏ဖခင်အဘူဆိုဖေယားန်နှင့် ကာမဂုဏ်ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အပေါ် ညီအစ်ကို ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မာအ်ဝေယာထံစာရေးသား၍ ရှုံ့ချပြောဆိုခဲ့လေသည်။၎င်းအပြင် ဟွဂျ်ရ်အိဘ်နေအိုဒိုင်းယ်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍လည်း မအ်ဝေယာအား ဆန့်ကျင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် မာအ်ဝေယာသည် ထိုသို့ရေးသားလာသောစာကို လုံးဝအရေးမစိုက်ခဲ့ပေ။ သို့ပေမဲ့လည်း မာအ်ဝေယာသည် မိမိ၏ဝန်ကြီးများကို ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုသတင်းပေးခဲ့သော်လည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား မိမိဘက်မှ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုများမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ မာအ်ဝေယာအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ သမိုင်းတွင်စေခဲ့သော လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ချက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ ဘနီအိုမိုင်ယာမျိုးနွယ်စုအတွင်းမှ အချို့သော အကြီးအကဲတို့သည် ၎င်းတို့မပိုင်ဆိုင်သော မြေနေရာများကို အတင်းအဓမ္မသိမ်းပိုက်ဖို့ရန် ပြုလုပ်သောအခါတွင်လည်းကောင်းဒုတိယတစ်ချက်မှာ မာအ်ဝေယာသည် ယဇီးဒ်အား အိမ်ရှေ့မင်းသားရာထူးခန့်အပ်လိုက်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်နှစ်ချက်လုံးတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)သည် ထိုလုပ်ရပ်များအပေါ်မားမားမတ်မတ်ရပ်ကာ ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ယဇီးဒ်အားအိမ်ရှေ့ရာထူးခန့်အပ်လိုက်သည့်အခါတွင် ထိုသို့ခန့်အပ်မှုသည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်နှင့်ဆန့်ကျင်နေသလို အိုမရ်အားခလီဖှာတင်မြှောက်ချိန်တွင် အသုံးပြုခဲ့သော နည်းလမ်းနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်နေကြောင်း ထောက်ပြ၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် အချို့သောသာဝကြီးများ၏သားများနှင့်အတူ မာအ်ဝေယာမှု ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ခဲ့ကြလေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)ရှီဟီးဒ်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်ကဲ့သို့ အသက်ကြီးသူတစ်ဦးရှိနေလင့်ကစား ဘနီဟာရှင်တို့အကြား အားထားရသည့်သူ တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ မည်သည့်ကိစ္စမဆို အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)နှင့် လာရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
မာအ်ဝေယာသည် ယဇီးဒ် အပေါ်ဘိုင်အသ်(သစ္စာ)ခံယူကြရန် ဆော်ဩနေသော အချိန်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) ထိုကိစ္စအပေါ်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး မာအ်ဝေယာအား ရှုံ့ချခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ မာအ်ဝေယာပေးပို့ခဲ့သော လက်ဆောင်များကို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ လက်ခံယူလျက် ရှိခဲ့သည်ဟုအချို့အရေးအသားများတွင် ရေသားထားမှုကို ဆယိဒ်မိုဟမ္မဒ် အေမာဒီဟာအေရီက ငြင်းဆိုထားသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)သည် ၎င်းမှပေးပို့ခဲ့သော လက်ဆောင်များကို မည်သို့သောအခါတွင်မျှ လက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ ဟု ၎င်းမှ ယုံကြည်ထားသည်။ မာအ်ဝေယာသည် ယဇီးဒ်အားမှာကြားခဲ့သည်မှာ - အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဆက်ဆံသည့်အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး သိမ်မွေ့စွာဆက်ဆံရန်နှင့် သူ့အား မည်သို့သောအခါမျှ ဘိုင်အသ်ခံရယူရန်အတွက် အတင်းအကျပ် မလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ။
(၁) အလီယေမွရ်သဒွါ،(အ.စ) အေဒီ ၆၃၂ မှ ၆၆၁ (၂၉)နှစ် (၂) ဟစန်နေမွဂျ်သဘာ (အ.စ)အေ၁မှ ၆၇၀ (၉)နှစ် (၃)ဟိုစိုင်းန်နေရှဟီးဒ်အေဒီ၆၇၀ မှ ၆၈၀ (၁၀)နှစ် (၄) အလီ အစ်စဂျားဒ်(အေဒီ၆၈၀မှ၇၁၂)(၃၂)နှစ် (၅) မိုဟမ္မဒ်ဘာကိရ် (အေဒီ ၇၁၂မှ ၇၃၂)(၂၀)နှစ် (၆) ဂျာအ်ဖရ် ဆွာဒိက် (အေဒီ ၇၃၂မှ ၇၆၅)(၃၃)နှစ် (၇) မူစလ် ကာဇင်းမ် (အေဒီ ၇၆၅ မှ ၇၉၉) (၃၄)နှစ် (၈) အလီ ရေဇာ (အေဒီ ၇၉၉ မှ ၈၁၈)(၁၈)နှစ် (၉) မိုဟမ္မတကီ (အေဒီ ၈၁၈မှ ၈၃၅) (၁၈)နှစ် (၁၀) အလီနကီ (အေဒီ ၈၃၅မှ ၈၆၈)(၃၃)နှစ် (၁၁) ဟစန်အစ်ကရီ (အေဒီ ၈၆၈ မျ ၈၇၄)(၇)နှစ် (၁၂) ဟွဂျ်ဂျသ်သေမဲဟ်ဒီ (၈၇၄ မှ ယနေ့ထိ)
၎င်းဖော်ပြချက်သည် ရှီအာတို့၏ ခံယူချက်အရ ဖြစ်သည်။
ရီအာတို့၏ ခံယူချက်တွင် အေမာမ်(အ.စ)၏ အေမာမသ်နှင့်ခေလာဖသ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကွယ်လွန်သွားချိန်မှ စတင်ခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ခွင့်အား အွတ်စ်မာန်းပြီးနောက်မှ ရရှိခဲ့သည်ဟုဖြစ်သည်။
အေမာမ်တစ်ပါး၏အေမာမသ်သည် အေမာမ်တစ်ပါးရှဟီးဒ်ဖြစ်သည့်အချိန်မှ စတင်လေသည်။
(၁၂)ပါးမြောက်အေမာမ်၊အေမာမ်ဇမာန်း(ခေတ်လာကအေမာမ်)(အ.ဂျ)၏အေမာမသ်သည် မိမိမတိုင်မီအေမမာမ် ရှဟီးဒ်ဖြစ်သည့်အချိန်မှစ၍ ရှီအာတို့၏ခံယူချက်အရ ယင်းအေမာမ်သည် အသက်ရှိထင်ရှားရှိနေပြီး လူသားတို့အမြင်၌ပျောက်ကွယ်လျက် ရှိသည် ဟုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အေမာမ်ဇမာန်း(အ.ဂျ)၏အေမာမသ်သည် ယင်းအေမာမ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာပြီး ရှဟီးဒ်ဖြစ်မည့်အချိန်ထိ သက်တမ်းရှည်လျှားမည်ဖြစ်ပေသည်။
ယဇီးဒ်နှင့် ဘိုင်အသ် (သစ္စာ) မခံမှု နှင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
မာအ်ဝေယာသည် ဟီဂျရီ ၆၀ ခုနှစ်၊ ရဂျဘ်လ (၁၅)ရက်နေ့၊ အေဒီ ၆၈၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ယဇီးဒ်သည် နန်းတက်မင်းလုပ်၍ မဒီနာမြို့ဝန် ဝလီးဒ်အိဘ်နေအသ အား အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဇိုဘိုင်းရ်၊ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေအိုမဲရ် နှင့် အေမာဇ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) တို့အား သစ္စာခံခိုင်းရန် အမိန့်တော် ထုတ်ပြန်ခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ဝလီးဒ်သည် ယင်း (၃)ဦးကို အချိန်မတော် မိမိနန်းတွင်းသို့ ဆင့်ခေါ်ပြီး ယဇီးဒ်နှင့် သစ္စာခံရန် အတင်းအကျပ် ပြုလုပ်လေတော့သည်။ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေ ဇိုဘိုင်းရ် သည် မအ်ဝေယာ သေဆုံးသည်ကိုလည်း သိထားခဲ့ကြသလို ယဇီးဒ် ဤသို့ ပြုလုပ် မည်ကိုလည်း သိထားခဲ့ကြသည်။ တဘက်မှလည်း ယဇီးဒ်နှင့်လည်း သစ္စာမခံလိုခဲ့ကြပါ။ ၎င်းအပြင် သစ္စာမခံသည့် အတွက် ယဇီးဒ်၏ အရေးယူမှုကိုလည်း စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ညတွင်းချင်းပင် မက္ကာမြို့သို့ တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) သည် မိမိ ဘက်တော်သားများနှင့် အတူ နန်းတော်သို့ ရောက်လာခဲ့သည့်အခါ ဝလီးဒ်မှ အေမာန်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အား ယဇီးဒ်နှင့် တိတ်တစိတ် သစ္စာခံရန် ပြောလေသည်။ ထိုအခါ အေမာမ် (အ.စ)မှ တိတ်တဆိတ် သစ္စာခံမှု မပြုလိုဘဲ လူအများရှေ့မှောက်တွက် သစ္စာခံလိုကြောင်း တင်ပြခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် သစ္စာခံပွဲကို နှစ်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ပြောဆိုမှုကို ဝလီးဒ်ဘက်မှလည်း လက်ခံ သဘောတူခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ယဇီးဒ်သည် ၎င်းအား ရာထူးမှ ဖြုတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ် သည် အကယ်၍ အေမာမ်(အ.စ) ယခု နန်းတော်အတွင်းမှ ထွက်သွားခဲ့သည် ရှိသော် နောက်တစ်ကြိမ် လွယ်ကူစွာဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်၍ မရနိုင်သည်ကို ကောင်းကောင်းသိထားခဲ့ သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မရ်ဝါန်သည် အေမာမ်(အ.စ) အား ဖမ်း၍ သစ္စာခံခိုင်းရန် နှင့် သစ္စာခံမှု မပြုခဲ့ပါက ဤနေရာ၌ပင် သတ်ပစ်ရန် ဝလီးဒ်အား ပြောခဲ့လေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အေမာမ် (အ.စ) သည် ညတွင်းချင်းပင် မိမိ၏ မိသားစု အနွယ်ဝင်တို့နှင့် အတူ မဒီနာမြို့ကို စွန့်ခွာ၍ မက္ကာမြို့သို့ ထွက်လာခဲ့လေသည်။ သို့သော် တစ်ခု သတိထားရမည်မှာ – အေမာမ်(အ.စ)သည် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ မက္ကာသို့ ခရီးထွက်ခဲ့ရာတွင်လည်း အများအသွားအလာ ပြုလုပ်သည့် လမ်းမှ သွားခဲ့သည်။ အခြား လမ်းများမှ မသွားခဲ့ပါ။ ထိုခရီးတွင် အေမာမ် (အ.စ) နှင့် အတူ မိမိ၏ ညီအစ်ကိုများနှင့် တူတော်များအပြင် အမျိုးသမီးများနှင့် သားသမီးများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ညီတော်တစ်ဦးဖြစ်သည့် မိုဟမ္မဒ် ဟနဖီယာသည် ၎င်းခရီးတွင် မပါခဲ့ပါ။ ထို့ပြင် အေမာမ် (အ.စ) အား ကူဖာမြို့သားတို့ဘက်မှ အသေအချာ သစ္စာခံမှုပြုပြီးမှသာ ကူဖာသို့ ခရီးဆက်ရန် အကြိမ်ကြိမ် မှာကြားခဲ့လေသည်။ အီရာနီကားစွယ်စုံကျမ်းတွင် ဝါကေဒီသည်ဆင့် ပြန်ထားသော အဘ်ဒုလ္လာအိဘ်နေဇိုင်းဘိုင်းရ် နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) တို့ အတူတကွ မဒီနာမှ မက္ကာသို့ ထွက်သွားခဲ့ကြ သည်ဆိုသည့် ရေဝါယသ်ကို ငြင်းဆိုထားလေသည်။ အေမာမ်(အ.စ) နှင့် အဘ်ဒုလ္လာဟ် အိဘ်နေဇိုဘိုင်းရ်တို့ မဒီနာမြို့တွင် ရှိနေသည့် ပုံသဏ္ဌာန်အကြား၌ ကွာဟမှုများ ရှိနေ သည်။ အေမာမ်(အ.စ) မဒီနာတွင် ရှိနေခဲ့စဉ် လူတို့သည် အေမာမ်(အ.စ) အား အရိုအသေ ပြု ကြည်ညိုလေးစားခြင်းအား အဘ်ဒုလ္လာဟ် မှ မနာလို ဝန်တိုမှုများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)သည် မက္ကာမြို့သို့ ရောက်သောအခါ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ၏ ဦးရီးတော်ဖြစ်သူ အဘ္ဘားစ် သခင်၏ အိမ်တွင် (၄)လ တိတိ နေထိုင်ခဲ့သည်။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ကူဖာမြို့သားများမောမ် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) အား ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် အေမာမ်(အ.စ)သည် မွစ်လင်(မ) အိဘ်နေ အကီးလ် အား စေလွှတ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
မိုအာဝေယာသေဆုံးသည့် သတင်းကို ကြားသိလိုက်ရသောအခါ ကူဖာသားတို့ သည် လွန်စွာမှ ပင် ဝမ်းသာခဲ့ကြသည်။ ကူဖာမြို့နေ ရှီအာ ခေါင်းဆောင်တို့သည် စိုလိုင်မန်အိဘ်နေစိုရဒ်၏ နေအိမ် တွင် စုရုံးခဲ့ကြပြီး မာအ်ဝေယာ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ချုပ်ငြိမ်းသွားမှု အပေါ် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်အား ကျေးဇူးထောမနာပြုခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသူတို့သည် မာအ်ဝေယာအား ခလီဖာ အရိုက်အရာ နှင့် မထိုက် တန်သူနှင့် ခေလာဖသ်ကို မတရားသိမ်းပိုက်သူဟူ၍ သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မိုအာဝေယာ သေဆုံးသွားပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အေမာမ် ဟိုစိုင်န် (အ.စ) ထံ စာများရေးသား ပေးပို့ခဲ့ကြလေသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ဘနီအိုမိုင်ယာတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို တော်လှန်ရန်နှင့် ဘနီအိုမိုင်ယာ အုပ်ချုပ်ရေးသည် လူသတ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး (ဟွဂျ်ရ်အိတ်နေအိုဒိုင်းယ် အား သတ်ခဲ့သည့်အတွက်) နိုင်ငံ ပိုင် ပစ္စည်းဥစ္စာ များကို ချမ်းသာသူတို့ အကြား အချင်းချင်း ခွဲဝေယူသည့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဆိုးသွမ်းသူများကို မွေးထုတ်ပေးသည့် အုပ်ချုပ်ရေးဟု သတ်မှတ်ရန် သစ္စာဆိုကြသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့ဘက်မှ ယခု လာမည့် သောကြာနေ့ စုပေါင်းဝတ်ပြုမှုတွင် မာအ်ဝေယာမှ ခန့်အပ်ခဲ့သော ကူဖာမြို့စား နို့အ်မာန်အိဘ်နေဘရှီးရ်ကို ဦးဆောင်ဝတ်ပြုခွင့် မပြုဖို့ရန်လည်း ကြေညာခဲ့ကြသည်။ အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(၃) (အ.စ) သည် ကူဖာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါက ထိုမြို့စားမင်းကို ကူဖှါမြို့မှ နှင်ထုတ်ရန်လည်း ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြသည်။ ကူဖှါမြို့သားတို့၏ အကြီးအကဲများသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န်) (အ.စ) ထံသို့ စာများဖြင့် ပြည့်နက်နေသော အိတ်ကြီးများ နှင့်အတူ စာပို့သမား (၇)ယောက်ကို ပို့သခဲ့လေသည်။ ၎င်းတို့အတွင်းမှ ပထမ (၂)ဦးသည် ဟီဂျရီ သက္ကရာဇ် (၆၀)၊ ရမ္မဒွါန်လ (၁၀)ရက် ၊ အေဒီသက္ကရာဇ်(၆၈၀) ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် မက္ကာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့လေသည်။ ထပ်မံ၍ အေမာမ် (အ.စ) ထံသို့ အခြားသော ပို့စာများလည်း ရောက်ရှိခဲ့ သည်။ ထိုအတွင်းမှ ရှဘီစ်ဘင်ရိုဘ်အီ နှင့် အမ်ရ်အိဘ်နေ ဟဂျ်ဂျားဂျ် တို့ ရေးသားသကဲ့သို့ စာများ သည် ကူဖှါမြို့သားတို့ တစ်သွေးတစ်စည်းထဲ ဖြစ်နေကြောင်းကို ဖော်ပြပေးနေလေသည်။ ထိုအခါ အေမာမ်(အ.စ)သည် ယခုလို စုစည်းမှုကို အသိအမှတ်ပြု၍ ၎င်းတို့ထံ စာပြန်ခဲ့သည်မှာ "အွမ္မသ် သားတို့၏ ရှေ့ဆောင် (အေမာမ်) သည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်မှ ချမှတ်ပေးထားသော ကျမ်းအရ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲဝေပေးသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မိမိ ကိုယ် မိမိ အရှင်မြတ်၏ လမ်းစဉ်၌ ပေးဆပ်သူ ဖြစ်ရပေမည်။ ထို့နောက် အေမာမ် (အ.စ) သည် မိမိ ဦးရီးတော် အကီးလ်၏ သားဖြစ်သူ မွစ်လင်(မ) အိဘ်နေအကီးလ် အား အခြေအနေကို သုံးသပ်နိုင်ရန်အတွက် ဦးစွာ စေလွှတ်ခဲ့လေသည်။ ရစူလ်-လေ-ဂျာအ်ဖရီယားန် ဆိုသော သမိုင်း သုတေသီ ပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးသည် အလီ(အ.စ) နှင့် အခန်း (အ.စ) တို့၏ ခေတ်ကာလ၌ ကူဖာမြို့သားတို့၏ မကောင်းခဲ့သော လုပ်ရပ်များကိုထည့်တွက်၍ ဤသို့ သုံးသပ်တင်ပြ ထားသည်မှာ – အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) သည် မိမိ အား ယဇီးဒ်မှ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မည်ကို ကြိုတင်သိထားကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) အဖို့ အကျပ်အတည်းနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် တင်ပြရလျှင် အေမာမ်(အ.စ) သည် ယီမန်သို့လည်းသွားရန် အဆင်မပြေခဲ့ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုဒေသ၌လည်း ယဇီးဒ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အားလုံးသောသူများကလည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)အား ပုန်ကန်သူဟု သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီ ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းအပြင် များစွာသော လူတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)အား ယဇီးဒ်နှင့် သစ္စာခံရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုသူများလည်း ရှိခဲ့ကြသည်။ အချို့ကပင် အေမာမ်(အ.စ) အား ယဇီးဒ်နှင့် ဆွေးနွေးလိုက်ရန်လာရောက်အကြံပြုခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်မှ (အ.စ)မှ လည်း မည်သည့် အခါမျှ ယဇီးဒ် နှင့် သစ္စာခံရန် မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ။ သစ္စာမခံသည့်အတွက် မည်မျှပင် လုပ်ကြံ ခြင်းခံရပါစေ။ 
အေမာမ်ဟိုစိုင်(န်)(အ.စ) သည် ဘဆွရာမြို့၌ ရှီအာထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အတွင်းမှ တစ်ဦးချင်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘဆွရာမြို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးသည့် သဘောဖြင့် ထိုမြို့၌ နေထိုင်လျက် ရှိကြသော မျိုးနွယ်စု (၅)စု၏ ခေါင်းဆောင်များထံသို့ ပုံစံတစ်မျိုးတည်း စာရေး သားပေးပို့ခဲ့သည်။ အေမာမ်(အ.စ) သည် ထိုစာများအတွင်း ရေးသားထားသည်မှာ - "အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)အား မိမိ၏ဖန်ဆင်းခံများအကြား အကောင်းဆုံး သော သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကိုယ်တော်(ဆွ) မိသားစု အနွယ်တို့အား မိမိ နောက် ဆက်ခံမည့်သူများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ လေသည်။ သို့သော် ကိုရိုင်းရှ်တို့သည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ် (တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ အနွယ်ဝင်များ)တို့၏ ရပိုင်ခွင့်ကို မိမိတို့၏ ရပိုင်ခွင့်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အဲဟ်ဘိုင်းသ်သည် အွမ္မသ်(နောက်လိုက်)တို့အကြား စုစည်းမှုရှိရန်နှင့် အကွဲအလွဲ မဖြစ်ပေါ် စေရန် ကို ဦးစားပေး၍ နုတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြသည်။" ... ကုရ်အာန် နှင့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ စွန္နသ်တော်ကို အသင်တို့အား ပြန်လည်သတိရစေလိုပါ၏။ သာသနာပျောက်ကွယ်ခဲ့ချေပြီ။ သာသနာ မှ မပြဋ္ဌာန်းထားသော လုပ်ရပ်များ သာသနာအတွင်းသို့ ရောက်လာခဲ့ချေပြီ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ် နောက်လိုက်မည်ဆိုပါက အသင်တို့အား လမ်းမှန်ဘက်သို့ ပြသပေးမည် ဖြစ်သည်။ တမ်းပလိတ်:پانویسဝီလ်ဖဲရ်ဒ်မာဒလူးန်ဂ် ဆိုသူမှ ]]အေမာမ်(အ.စ) ၏ ဤစာသည် အဘူဘက်ရ်နှင့် အိုမရ်တို့၏ လုပ်ရပ်များအပေါ် အလီ(အ.စ) ရေးသားခဲ့သော စာ နှင့် အလွန်တူညီသည် ဆိုထားလေသည်။ ထိုသို့ဘဆွရာ ခေါင်းဆောင်များထံသို့ အေမာမ်(အ.စ) မှ ရေးသားခဲ့သော စာများသည် လျှို့ဝှက်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းတို့အတွင်းမှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် ယဇီးဒ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်မခံနှင့်လက်ခံသူများမည်မျှ ရှိသည်ကို သိလို၍ အိဘ်နေဇေယားဒ် မှ ပရိယာယ် သုံး၍ ရေးသားပေးပို့ခဲ့သော စာဟု သံသယဝင်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသူသည် ထိုစာအား အိဘ်နေဇောယားဒ်ထံသို့ ယူဆောင်လာခဲ့လေသည်။ အိဘ်နေဇေယားဒ် သည် ဘဆွရာ သို့ လာရောက်ပို့သူများ အားလုံးကို ဦးခေါင်းဖြတ်ခဲ့ပြီး ဘဆွရာမြို့သားများကို သင်ခန်းစာပေးခဲ့သည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) သည် ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင်(မ) နှင့် အတူ အချို့ကို ကူဖှါ မြို့သို့ စေလွှတ်ခဲ့ ပြီး အခြေအနေသုံးသပ်၍ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားခဲ့လေသည်။ ရှဝလ်အစပိုင်း ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် (၆၀)၊ အေဒီသက္ကရာဇ် (၆၈၀) ဇန်နဝါရီလတွင် ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင်(မ)နှင့် အပေါင်းအပါတို့သည် ကူဖှါ မြို့သို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)မှ ကူဖှာမြို့သားတို့အတွက်ရေးသားခဲ့သော စာကို လူထုအကြားဖတ် ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကူဖှါမြို့သားတို့သည် ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင်(မ)ထံ သစ္စာခံခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဟဇ္ဇရသ် မွစ်လင်(မ)သည် ကူဖှါမြို့တရားဟောစင်မြင့် (မဘဲရ်) ပေါ်သို့ပင်တက်လျှက် မိန့်ခွန်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ လူဦးရေ(၁၈၀ဝ၀)ထိ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အစ)အား ကူညီရန်အတွက် ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင် (မ)နှင့်သစ္စာခံခဲ့ကြသည်။ ဘနီအိုမိုင်ယာ လက်ပါးစေများဖြစ်ကြသော အိုမဲရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်၊ မိုဟမ္မဒ်အိဘ်နေအရှ်အစ် နှင့် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေမွစ်လင်(မ)တို့သည် ကူဖှါမြို့ အခြေအနေနှင့် ကူဖှါမြို့စား နို့ဘ်မာန် အိဘ်နေ ဘရှီးရ်၏ မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများကို ယဇီးဒ်ထံ အစီရင်ခံစာများ ပေးပို့ခဲ့ကြလေသည်။ ထိုအခါ ယဇီးဒ်သည် မူလမှ နို့အ်မားန်အိဘ်နေ ဘရှီးရ်အား မယုံကြည်ခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းကို ရာထူး မှ ဖြုတ်ချကာ ဘဆွရာမြို့စား အိုဘိုင်ဒွေလ္လာဟ်အိဘ်နေ ဇေယားဒ် အား တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အိဘ်နေဇေယားဒ် ထံသို့ ကူဖှါမြို့သို့ အမြန်ဆုံး သွားရောက် ကာ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများ ကို နှိမ်နင်းရန်အတွက် သတင်းပို့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေနေအကီးလ် အား ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အိဘ်နေဇေယားဒ် သည် ဝတ်စားပုံကအစ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န်)(အ.စ) သဏ္ဌာန်ဖန်တီး၍ အယောင်ဆောင်ကာ ကူဖှာမြို့သို့ ဝင်လာခဲ့ပြီးနောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) အား သစ္စာခံထားသူတို့ကို စတင်နှိမ်နင်းလေတော့သည်။ ထို့နောက် ၎င်းသူတို့ ကြောက်လန့်သွားစေရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြမ်းကြုတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့လေသည်။ ဘဲဟ်ရာမီယားန်း ဆိုသူမှရေးသားသားထားသည်မှာ အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် အချို့ကို ခြိမ်းခြောက်၍သော် လည်းကောင်း အချို့ကိုလာဒ်ပေး၍ သော်လည်းကောင်း အချို့ကို ကောလဟာလ သတင်းများ ထုတ်ပြန်၍ သော်လည်းကောင်း၊ နည်းပရိယာယ်မျိုးစုံ အသုံးပြုကာ ကူဖှါမြို့သားတို့အား အေမာမ်ဟို စိုင်းန်(အ.စ) ကို ကူညီခြင်းမှ ရပ်တန့်သွားစေရန် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် ကူဖှါမြို့သားတို့နှင့် အေမာမ်ကိုစိုင်း(န်)(အ.စ) တို့အကြား အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားစေရန် ရည်ရွယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န်)(အ.စ) အား တိုက်ခိုက်ရန် စစ်တပ်ကြီး တစ်တပ်ကို စေလွှတ်ခဲ့လေသည်။ ဘနီအိုမိုင်ယာတို့၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မဖြစ်ဖြစ်သောနည်းဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န်)(အ.စ) အား သတ်ဖြတ်(ရှဟီးဒ်လုပ်)ရန်ဖြစ်သည်။ ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင် (မ)သည် ဘက်၌ အင်အားနည်းသွားခဲ့ပြီးကူဖှာမြို့ နန်းတော်ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သည့်အခါ မိမိကိုယ်မိမိ တစ်နေရာတွင် ခိုလှုံ၍နေခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် တစ်ဦးမှ ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင်(မ)ရှိနေသော နေရာကို သတင်းပေးလိုက်သည့်အတွက်ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် (၆၀)ဇီဟ်လဂျ်လ (၉)ရက်၊ အေဒီသက္ကရာဇ် (၆၈၀)စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် သူ့အားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး လူအများရှေ့၌ ကူဖှါမြို့ နန်းတော်၏ ခေါင်မိုးပေါ်မှ ဦးခေါင်းဖြတ်၍ ပစ်ချခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် မိုရားဒ် မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင် ဟာနီအိဘ်နေအွရ်ဝါအားလည်း ဟဇ္ဇရသ်မွတ်လင်(မ)အား မိမိ၏အိမ်၌ ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင်(မ)အားဝှက်ထားခဲ့သည့်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တင်၍ သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ယဇီးဒ်သည် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို အစီရင်ခံစာများ မှတဆင့် သိခဲ့သောအခါ ၎င်းသည် အိဘ်နေဇေယားဒ်အားချီးမွမ်း မြှောက်စားခဲ့သလို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား မျက်ခြေမပျက်စောင့် ကြည့်နေရန်နှင့် အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် စစ်ပွဲဆင်နွှဲလိုခဲ့မည်ဆိုပါက အေမာမ်(အ.စ)အား အဆုံးစီရင်သတ်ဖြတ်ရန် မှာကြားခဲ့လေသည်။ ဤသို့မှာကြားချိန်သည် အဇ္ဇရာသ်မွစ် လင်(မ)မှ ကူဖှါမြို့တွင် အခြေအနေကောင်းမွန်၍ အောင်မြင်မှုများရရှိနေကြောင်း၊ ကူဖှါမြို့သားတို့ သစ္စာခံခဲ့ ကြောင်းနှင့် ကူဖှါမြို့သို့ အမြန်ဆုံးလာရောက်စေလိုကြောင်းကို ဝမ်းသာအားရ၍ ရေးသားခဲ့သော ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင်(မ)၏စာများအေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)ထံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ချိန် ဖြစ်လေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)အား မိုဟမ္မဒ်ဟနဖီယာနှင့်အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေအိုမရ်တို့မှ မသွားရန် အကြံပြုခဲ့ကြသလို အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်မှလည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မက္ကာ၌ ရှိနေခဲ့စဉ် ထိုဒေသ သို့မသွားရောက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့လေသည်။ ထို့ပြင် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဇိုဘိုင်းရ်သည်လည်း မသွားရန် ပြောခဲ့သည်။ (အဘ်ဒုလ္လာဟ်အဘိနေဇိုဘိုင်းရ် သည်အမှန်တကယ် မသွားစေလို၍ ပြောခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် မက္ကာမြို့တွင် အေမာမ်ဟုစိုင်းန်(အ.စ) မရှိလေ မိမိ သဘောကျလေဖြစ်သည်။) သို့သော်လည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် မပြင်ခဲ့ပေ။ အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား အလီ(အ.စ)နှင့် အခန်(အ.စ) တို့အပေါ် ကူဖှါသားတို့မှ သစ္စာမဲ့မှုများကို သတိပြန်လည်ရစေရန် ပြောကြားခဲ့ပြီး ဤခရီးစဉ်၌ အမျိုး သမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်တို့အား မခေါ်ဆောင်သွားရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ အေမာမ် ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်အား ဤသို့မေတ္တာရပ်ခံမှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီး မိမိ၏ အလုပ်ဆောင်မှု အားလုံးတို့ကို အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်အပေါ် (သဝကုလ်လုပ်၍) အပ်နှံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်မိန့်ကြားတော် မူခဲ့လေသည်။ (စာဖတ်သူတို့ အနေဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ) သည် (နအူဇိုဘိလ္လာဟ်)မည်သူ၏ စကားကိုမျှ အလေးမထားသူဟု မြင်ကောင်းမြင်နိုင်သည်။ သို့သော် ဤသို့ မဟုတ်ချေ။ အေမာမ်(အ.စ)သည် မာအ်စူမ်ဖြစ်သည့်အတွက် အရာအားလုံးကို အများသူတို့ ထက်ပို၍ သိနားလည်သည့် သူဖြစ်သော်လေသည်။ ထို့အပြင် အေမာမ်(အ.စ)သည် ထိုအချိန်၌ ကူဖှါလမ်းမှအပ အခြားရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိခဲ့ချေ။ ထို့အပြင် အေမာမ်(အ.စ)သည် အစ္စလာမ် ကျန်ရှိစေရန်အတွက် အလ္လာဟ်၏ လမ်းတွင်မိမိကိုယ်ကိုနှင့် မိသားစုကိုပါ စတေးရန် ဝန်လေးသူ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အချုပ်အနေဖြင့် ပြောရသော် ထိုအချိန်၌ အေမာမ်၏ တာဝန်သည် ကူဖှါသို့သွားရန် သာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။ ဝေလဲဖဲလ်မာဒ်လွန်းဂ်ရေးသားသည်မှာ- ရေဝါယသ်များစွာတွင် ဖော်ပြထား လေသည်မှာ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဇိုဘိုင်းရ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်န် (အ.စ)အား မက္ကာမြို့မှအမြန် ဆုံးထွက်ခွာ၍ ကူဖှါမြို့ရှိအာများထံသို့ အမြန်ဆုံး သွားရောက်ရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့လေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော အေမာမာမ်ဟိုစိုင်န် (အ.စ) အား၎င်းမှ မိမိပြိုင်ဘက်ဟု သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး မက္ကာမြို့၌ မိမိ၏ ပြိုင်ဘက်မရှိတော့လေပို၍ ကောင်းလေဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြားသော ရေဝါယသ်တော်များ၌ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဇိုဘိုင်း သည်အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)ကူညီဆောင်မ လိုသောဆန္ဒဖြင့် ပြောဆိုခဲ့သည်ဟူ၍ ဖော်ပြထားလေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်န် (အ.စ) သည် ကူဖှါမြို့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုများကို သတင်းမရှိခဲ့ချေ။ ထို့နောက် ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် (၆၀)ဇီလ်ဟဂျ်လ (၈)ရက်(သို့) (၁၀)ရက်၊ အေဒီ (၆၈၀) စက်တင်ဘာလ (၁၀) (သို့) (၁၂)ရက်နေ့တွင် ကူဖှါမြို့သို့ ထွက်ခွာရန် အဆင့်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဟဂျ်ပြုလုပ်နေရင်း အွမ္မရာကျင့်စဉ်များသို့ ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ကာ မိမိ၏ မိသားစုဝင် အမျိုးသားများနှင့် ဘက်တော်သား အယောက် (၅၀)အပြင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များကိုပါ ခေါ်ဆောင်၍ ကူဖှါမြို့ဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ မက္ကာမြို့နှင့် ကူဖှါမြို့သို့ သွားရာလမ်းခရီးတလျှောက်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင် (အ.စ) နားနေခဲ့သောနေရာများသွဘရီနှင့် ဘေလာဇရီ ကျမ်းတို့တွင် ဖော်ပြထားလေသည်။ ထိုအကြောင်း အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ သမိုင်းသုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ “ဝေလ်ယာဝဇန်း”မှလည်း ရေးသားထားလေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်(အ.စ) စတင်ထွက်ခွာချိန်တွင် ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲ အဘ်ဒုလ္လာဟအိဘ်နေဂျာအ် ဖဲရ်သည် ပြန်လာရန်အတွက် မိမိသားတော်နှစ်ပါးမှတဆင့် အေမာမ် (အ.စ)ထံ စာရေး၍ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့လေသည်။
ထို့အပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန (အ.စ)၏ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိတ်ဘ်နေဂျာအ်ဖဲရ် သည် မက္ကာမြို့စား အမ်ရ်အိဘ်နေစအီးဒ်အိဘ်နေအာ၏ထံသို့ အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန (အ.စ) မက္ကာမြို့သို့ ပြန်လာခဲ့သည်ရှိသော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်စာ ရေးပေးရန်စာရေး၍ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ မက္ကာမြို့စားသည် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖဲရ်၏စာကြောင့် မိမိ၏ညီတော် ယဟ်ယာအား ရဲဘော်ရဲမက်များနှင့် အတူအေမာမ်ဟိုစိုင်န(အ.စ)နောက်သို့လိုက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အေမာမ် ဟိုစိုင်န်(အ.စ)အား မှီသွားခဲ့ပြီး အေမာမ်ဟိုစိုင်န(အ.စ)အား မက္ကာသို့ ပြန်လှည့်ရန် ပြောလာခဲ့သည့်အခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန(အ.စ)သည် ၎င်းတို့အား မိန့်ကြားလေသည်မှာ ကျွန်ုပ်သည် အဘိုးတော် မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)နှင့် အိပ်မက်၌တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီး အဘိုးတော်သည် သူ၏ လမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းဖို့ရန် ကျွန်ုပ်အားတာဝန်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို အရာအားလုံးကိုအလ္လာဟို အရှင်မြတ်ထံသို့ ပုံအပ်ရန်မှာကြားတော်မူခဲ့သည်။ ရဲဘော်ရဲမက်တို့နှင့် အတူပါလာသော အဘ်ဒုလ္လာဟ်၏သားတော် နှစ်ပါးဖြစ်သည့် အောန်နှင့်မိုဟမ္မဒ်တို့သည်လည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန (အ.စ)နှင့်အတူ ကဲရ်ဘလာသို့ လိုက်ပါသွားပြီးနောက် အာရှူရာနေ့တွင် (ရှဟီးဒ်ဖြစ်) ကျဆုံးသွားခဲ့ကြသည်။ .
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) သည် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် လူအမျိုးမျိုးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရ သည်။ ဖဲရ်ဇဒက်ဆိုသူကဗျာဆရာတစ်ဦးနှင့် ဆုံမက်ခဲ့ရာတွင် ၎င်းမှအိုဟိုစိုင်န်(အ.စ) ကူဖှါသားတို့၏ နှလုံးသားသည် အသင်နှင့်အတူရှိနေသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဓားများသည် အသင့်အပေါ်၌ ရွယ်ထား ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ လမ်း၌ဆုံမက်သူတိုင်းက နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရန် မေတ္တာရပ်ခံသည့် အခါ အရာအားလုံးသည် အလ္လာဟ်၏ လက်ဝယ်၌ရှိသည်။ အရှင်မြတ်သည် သူ၏ဖန်ဆင်းခံတို့ အတွက် အကောင်းဆုံးကိုသာလျှင် လိုလားတော်မူ၏။ အရှင်မြတ်သည် မှန်ကန်သူတို့အား မည်သို့ သောအခါမျှ မုန်းတီးမည်မဟုတ်ချေဟု ပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ ဇိုဟိုင်းရ်အိဘ် နေကိုင်းဘဂျလီသည် အွစ်မာန်၏ ဘက်တော်သားတို့အတွင်းမှ တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ ၎င်းသည်လည်း မိမိ၏ ကိစ္စဖြင့် ခရီးထွက်လာရင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)နှင့် လမ်းခရီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးနားခိုလိုကြသည့်အခါ ၎င်းသည် နားခိုရန်အတွက် ရွက်ဖျင်တဲကို အေမာမ်(အ.စ)နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းအဝေးတစ်နေရာတွင် ထိုး၍နားခိုလေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် နားခိုရန်အတွက် ရွက်ဖျင်တဲထိုးသည့်အခါ နေရာအခက်အခဲကြောင့် အေမာမ်(အ.စ)၏ ရွက်ဖျင်တဲ အနီးအနား၌ ထိုးခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိတို့နှင့် ပူးပေါင်းရန် ၎င်းအား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အေမာမ်(အ.စ)နှင့်အတူ ခရီးဆက်လာရင်း ၎င်း၏အမြင်များ ပြောင်းလဲ၍လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် ထံသို့ပူပေါင်းခဲ့ပြီးနောက် သူသည် အေမာမ်(အ.စ)၏ အကောင်းဆုံးသော ဘက်တော်သားများ အတွင်းမှတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့လာလေသည်။
အိုဘိုဒုလ္လာအိဘ်နေဇေယားဒ်သည် မဒီနာမြို့မှနေ၍ ကူဖှါမြို့အထိ ခရီးသွားလာရာလမ်းများ တွင် အစောင့်အကျပ်များချထားခဲ့ပြီး မည်သူ့ကိုမျှ အဝင်အထွက်ပြုလုပ် ခရီးသွားလာခွင့် မပြုခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် ဟစီးန်အိဘ်နေသမီးမ်အား ကာဒေစီးယာဟ် ဒေသအထိစေလွှတ် ခဲ့ပြီး မဒီနာမြို့မှ ကူဖှါမြို့သို့ အဝင်အထွက်လမ်းများကို စောင့်ကျပ်စေခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်န် (အ.စ)သည် ဘဒဝီမျိုးနွယ်စိုတို့၏ သတင်းပေးမှုဖြင့် အိုဘိုဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဇေယားဒ်မှ အစောင့်အကျပ်များ ချထားမှုကို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) သိခဲ့သည်။ သို့သော် စိုးစဉ်းမျှထိတ်လန့်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ထို့အပြင် မိမိ၏ခရီးကို ရှေ့ဆက်ခဲ့လေသည်။ စအာလဘီယာဟ် ဒေသသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော အခါ လမ်းခရီးတွင် အချို့သော ခရီးသွားများဖြင့် တွေ့ဆုံသည့်အခါ မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေ အကီးလ် နှင့် ဟာနီအိဘ်နေ အွရ်ဝါတို့ရှဟီးဒ်ဖြစ် (ကျဆုံး)သည့် သတင်းကိုကြားသိခဲ့ရသည့။ အချို့ ရေဝါယသ် တော်၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ ထိုသို့သတင်းကြားလိုက်သည့်အခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် နောက်ပြန်လှည့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း ဟဇ္ဇရသ်မွတ်လင်(မ)၏ သားတော်နှစ်ပါးမှ မိမိဖခင်၏ သွေးကြွေး ပြန်ဆပ်မည်ဟု ပြောသဖြင့် ရှေ့ဆက်ခဲ့သည်။ မာဒင်လွန်းဒ်ဂ်သည် ဖော်ပြပါ ရေဝါယသ်တော် ခိုင်လုံမှု၌ သံသယများရှိသည် ဟုဆိုထားလေသည်။ (အမှန် တကယ်မှာလည်း ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ခဲ့ချေ။) ရစူလေဂျာအ်ဖရီယားန်သည် ဤသို့လက်ခံသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်န် (အ.စ)သည် ဟဇ္ဇရသ်မွစ်လင်(မ)(ရှဟီးဒ်)ကျဆုံးသည့် သတင်းကို ကြားသိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ကူဖှါမြို့သို့ ခရီးနှင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့နောက်ပြန်မလှည့်ပဲ ခရီးဆက်ခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)နှင့် နောက်လိုက်သားများအားလုံးတို့သည် အောင်နိုင်မှု ရရှိရေးအတွက် ခရီးဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)နှင့်အတူ မိသားစုဝင်များပါ လိုက်ပါလာခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရင်းကို ရစူလေဂျာအ်ဖရီယာန်မှ် ဆက်လက်ရှင်းပြထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)ကူဖှါသို့ လာရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ယဇီးဒ်အား တော်လှန်ဖြုတ်ချရန် အတွက် ဖြစ်လေသည်။ အကယ်၍ ကူဖှါမြို့ကိုအောင်နိုင်သွားခဲ့သည်ရှိသော် မဒီနာတွင် မိမိ၏ မိသားစုဝင်များ ကျန်နေခဲ့မည် ဆိုပါက၊ မဒီနာမြို့ရှိ အမဝီမျိုးနွယ်စု (ယဇီးဒ်တို့၏ အဆွေအမျိုးလက် ပါးစေ) တို့သည် မိမိ၏မိသားစုများကို ဒုက္ခပေးမည်ဟု သိထားသည့်အတွက် တပါတည်း ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)သည် ဇိုဘာလာဟ် ဒေသသို့ရောက်သောအခါ မိမိတို့ကူဖှါမြို့သို့ မကြာမီရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကို ကူဖှါမြို့သားတို့ထံ သတင်းပို့ရန် စေလွှတ်ခဲ့သော ကိုင်းစ်အိဘ်နေ မိုစဟ်ဟရ် ဆွိုင်ဒါဝီ (သို့) နို့သောက်ဘက်ညီအစ်ကိုဖြစ်သူ ဟိုစိုင်းန်အဘ်ဒုလ္လာဟ် အိဘ်နေယက်သွရ် ဆိုသူအား သတ်ဖြတ်ပြီး နန်းတော်၏ ခေါင်မိုးပေါ်မှ ပစ်ချခဲ့သည့် သတင်းကို ရရှိ ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့သတင်းရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)သည် မိန့်ကြားလေ သည်မှာ-ယခုလိုကူဖှါမြို့သားတို့ဘက်မှ သစ္စာဖောက်မှုများ ဖြစ်ခဲ့ရသည့်အပေါ် မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်နှင့် လမ်းခွဲလိုက လမ်းခွဲနိုင်သည်ဟု ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ အေမာမာမ်ဟိုစိုင်န် (အ.စ)နှင့် မဒီနာမြို့မှ စတင်ထွက်ခွာလာစဉ် ကတည်းမှ အတူလိုက်ပါလာသူများမှအပ လမ်းခရီးတွင် အေမာမ် (အ.စ)နှင့်ပူးပေါင်းဝင်ရောက်လာခဲ့သော အချို့သူများသာ အေမာမ်(အ.စ)ကို ထားခဲ့ပြီး လမ်းခွဲသွားခဲ့ကြသည်။ ရစူလေဂျာလ်ဖရီယားန်သည် ဤသို့ သုံးသပ်ပြောဆိုထားသည်မှာ ကူဖှါမြို့၏ ပြောင်းလဲ သွားမှုကို ဤအချက်က မီးမောင်းထိုးပြထားလေသည်။ မာဇ္ဇရသ်မွစ်လင်(ခ) ရှဟီးဒ် မဖြစ်မီ အချိန်၌ ကူဖှါမြို့ အခြေအနေသည် ပုံစံတစ်မျိုးရှိခဲ့ပြီး ၎င်းရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း တစ်မျိုးဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကူဖှါမြို့သို့မသွားသင့်တော့ကြောင်း အေအမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) သိလိုက်၏။
ရှရားဖ်ဒေသ(သို့) ဇူဟရှ်မ်ဒေသတွင် ဟွရ်အိဘ်နေယဇီးဒ်သမီမီတပ်စုကြီးနှင့် အေမာမ်ဟိုင်စိုင်န်(အ.စ)တို့တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အခါ ရာသီဥတုသည်ကလည်းအလွန်ပူပြင်းသည့်အတွက် ရေသောက်စရာပင်မရှိတော့ချေ။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ ၎င်းတို့အားရေအေးတိုက်ကြွေးခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ဟွရ်၏တပ်စုကြီးအား မိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ကြေညာခဲ့လေသည်။ အသင်စစ်သည်အပေါင်းတို့ အသင်တို့ထံအေမာမ်(ခေါင်းဆောင်)မဲ့နေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်သည် အွမ္မသ်(နောက်လိုက်)တို့အကြား စုစည်းရန်အကြောင်းခံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူတို့ထက်ပို၍ အသင်တို့အပေါ် ကြီးစိုးပိုင်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် ယခုအချိန်အခါတွင် မထိုက်သန်သောသူတို့သည် မတရားအာဏာလု၍ အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ အကယ်၍ အသင်တို့သည် ကျွန်ုပ်နှင့် ပူးပေါင်းမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်သည် ကူဖှာဘက်သို့ခရီးဆက်မည်။ အကယ်၍ ဤသို့မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်နောက်ပြန်လှည့်မည်။ သုဖြစ်သည်။
သို့သော် ကူဖှာမြို့သား(ဟွရ်၏ရဲမက်)တို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထိုသို့ မိန့်ကြားဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ် မည်သည့်အဖြေမှ ပြန်လည်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။ ထို့နောက်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အစရ်နမားဇ်ကို မိမိ၏ဦးဆောင်မှုနှင့် စုပေါင်းဝတ်ပြုခဲ့ကြပြီးနောက် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ၍ ၎င်းတို့အကြား ပထမအတိုင်း မိန့်ဆိုကာ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အနွယ်တော်ဝင်များသည် ခေလာဖသ်အရိုက်အရာနှင့် ပိုမိုထိုက်တန်ကြောင်းနှင့် ထိုအရိုက်အရာသည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ အဲဟ်လေဘိုင်း(သ်)အနွယ်ဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ထို့အပြင် ကူဖှာမြို့သားတို့မှ ရေးသားခဲ့သော စာများအကြောင်းကို ဖြည့်စွက်မိန့်ကြားခဲ့လေသည်။ သွရ်သည် ကူဖှာမြို့သားတို့ဘက်မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံ စားများရေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုံးဝသတင်းမရှိခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အိတ်နှစ်အိတ်ပြည့်နက်နေသည့် ၎င်းတို့ရေးသားခဲ့သောစာများကို ထုတ်ပြခဲ့သော်လည်း ဟွရ်စစ်တပ်ကြီးသည် မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်မှုမပြုခဲ့ပါ။၎င်းအပြင် ဟွရ်သည် မိမိကိုယ်ကို စာရေးသားပေးပို့သူများအကြား မပါဝင်ကြောင်းနှင့် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏ အမိန့်အောက်တွင်သာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေကြောင်း ပြောခဲ့လေသည်။ အိဘ်နေဇေယားဒ်မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား မိမိထံသို့ စစ်ရေးအရ ရင်ဆိုင်မှုမရှိပဲ အေးချမ်းစွာဖြင့် ခေါ်လာရန် ၎င်းအား အမိန့်ပေးထားခဲ့သည်။ ထိုအမိန့်တော်အရ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်ကြိုးစားခဲ့၏။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ခရီးဆက်ရန် ပြင်ဆင်ပြီး ခရီးပြန်ဆက်တော့မည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့သဖြင့် မိမိ၏ကြိုးစားမှုအား လက်လျှော့ခဲ့လေသည်။ မာဒလွန်းဒ်ဂ်ရေးသားထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ခရီးဆက်ရန်ပြင်လိုက်သည့်အခါ ဟွရ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သွားမည့်လမ်းကို ပိတ်၍ တားဆီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ပေးအပ်သော အမိန့်အား ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်မှ လိုက်နာမှုမရှိခဲ့ပါက ဟွရ်မှလည်း ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ကူဖှာမြို့ဖြစ်စေ မဒီနာမြို့ဖြစ်စေ မည်သည့်ဒေသကိုမျှသွားခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ချေ။ သု ဟွရ်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဟွရ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား အကြံပြုသည်မှာ ကူဖှာမြို့သို့လည်းကောင်းမဒီနာမြို့သို့လည်းကောင်း သွားနိုင်ရန်အတွက် ယဇီးဒ်(သို့)အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံသို့ စာရေး၍ သွားခွင့်တောင်းခံပါလေဟုဖြစ်သည်။ ထိုအတိုင်းပင် ဟွရ်ကိုယ်၍လည်း သွေးမြေမကျပဲ ဤကိစ္စပြေလည်သွားစေရန်အတွက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံစာရေး၍ အမိန့်တောင်းခံခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ၎င်း၏အကြံပြုမှုကို လက်မခံခဲ့ပေ။ ထို့နောက် မြောက်ဘက်အရပ်ဒေသဖြစ်သော အဇီးဘ်ဒေသ(သို့)ကာဒေစီယာဟ်ဒေသို့ခရီးဆက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဟွရ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ဤသို့ပြောကြားလေသည်မှာ "ကျွန်ုပ်သည် အသင့်ကောင်းကျိုးအတွက် ထိုသို့အကြုံပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အကယ်၍ တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရမည်ဆိုလျှင် အသင်အသတ်ခံရမည်သာဖြစ်သည်"ဟုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားမှုအပေါ်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အနည်းစိုးစဉ်းမျှ ကြောင်ရွံ့တုန်လှုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို မိမိဆက်ရမည့်ခရီးကို ဆက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့်ကူဖှာမြို့နယ်ပယ်အတွင်းရှိ နိုင်နဝါမည်သောဒေသသို့ရောက်လာခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ၎င်းနေရာနားခဲ့လေသည်။ သွရ်သည် ကူဖှာမြို့မှ ရှီအာလေးဦးတို့ကို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်သို့ကူးပြောင်းသွားခြင်းကိုလည်း မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုနောက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ဘက်မှ စာပို့သမားတစ်ဦးရောက်လာခဲ့ပြီး ၎င်းသူသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ကိုပင် ဆလာမ်ဆိုခြင်းမရှိပဲ ဟွရ်ထံတည့်တည့်သွားရောက်ကာ အိဘ်နေဇေယားဒ်မှ ပေးပို့လိုက်သော စာကို ဟွရ်လက်သို့ပေးလိုက်သည်။ ထိုစာတွင် အိဘ်နေဇေယားဒ်မှ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ရေရှိသောမည်သည့်နေရာတွင်လည်းကောင်း ခိုင်မာသောမည်သည့်အဆောက်အဦးတွင်သော်လည်းကောင်း နားခိုခွင့်မပေးရ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် ထိုသို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီး အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရေးဘက်သို့ ဖိတ်ခေါ်နေပေသည်။ ဇိုဟိုင်းရ်အိဘ်နေကိုင်းန်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ဟွရ်၏စစ်တပ်သည် အရေအတွက်နည်းသည့်အတွက် ၎င်း၏တပ်ကို ချေမှုန်း၍ အင်အားတောင့်တင်းသော အကရ်မည်သော ရွာအတွင်း၌ အင်အားပြန်လည်စုစောင်းရန် အကြုံပြုခဲ့သော်လည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ လက်မခံခဲ့ချေ။ အကြုံပြုချက်ကို လက်မခံရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် တိုက်ပွဲကို မိမိဘက်မှ မစတင်လိုသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လေသည်။
မိုဟရမ်လ(၂)ရက်နေ့တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် နိုင်နဝါအရပ်ဒေသရှိ ကရ်ဘလာဟူသည့်နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ထိုနေရာ၌ပင်စခန်းချခဲ့သည်။ အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်အဘီဝကားဇ် ခေါင်းဆောင်သော စစ်သည်ရဲမက်အပေါင်း(၄၀၀၀)ပါဝင်သည့် စစ်တပ်ကြီးသည် မိုဟရမ်(၃)ရက်နေ့၌ ကရ်ဘလာသို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုစစ်တပ်ဦးရေသည် အိဘ်နေဇေယားဒ်မှ ရိုင်ယ်မြို့တွင် ပုန်ကန်နေသော ဒဲယ်လမီလူမျိုးများကို နှိမ်နင်းဖို့ရန်အတွက် စေလွှတ်ခဲ့သော စစ်တပ်ထက်ဦးရေပိုများလေသည်။ ထို့ကြောင့် မိုဟရမ်(၃)ရက်နေ့၏အခြေအနေသည် ယခင်နေ့များထက်ပို၍ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် ပထမတော့ မိမိကိုယ်ကို တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ဆွဟာဘာတစ်ဦး၏သားတစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး စစ်မတိုက်လိုခဲ့ပေ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ ပေးအပ်ထားသောတာဝန်ကို ရှောင်လွှဲ၍နေခဲ့သည်။ သို့သော် အိဘ်နေဇေယားဒ်ဘက် မှ အိုအိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ် အကယ်၍ အသင်သည် အမိန့်နာခံမှုမရှိခဲ့ပါလျှင် အသင့်အား ရိုင်ယ်မြို့ကို အပိုင်စားပေးမည်ဟု ပေးခဲ့သော ကတိကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်သည် ဟု ၎င်းအား အမိန့်ထုတ်ပြန်လာလေသည်။ ထိုသို့ကြားသိလိုက်ရသည်နှင့် တပြိုင်နက် အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် လောဘတက်သွားခဲ့ပြီးနောက် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏ အမိန့်ကို စတင်လိုက်နာလေတော့သည်။ဦးစွာ အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံစာရေး၍ ဤဒေသသို့အဘယ်ကြောင့်လာရသည်ကို စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့လေသည်။ ထို့နောက်အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်ထံသို့ မိမိသည် စစ်တိုက်ရန်အတွက်လာရောက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ကူဖှာမြို့သားတို့၏ဖိတ်ခေါ်စာများကြောင့် လာရောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် အကယ်၍ ယင်းကူဖှာမြို့သားတို့သည် မိမိအားအလိုမရှိတော့ပါလျှင် မိမိသည် မဒီနာသို့ အေးချမ်းစွာဖြင့် ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ပြောကြားချက်အတိုင်း အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည့်အခါ အိဘ်နေဇေယားဒ်ဘက်မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ယဇီးဒ်နှင့်သစ္စာခံ(ဘိုင်အသ်)လုပ်ရန် အတင်းအကျပ်ပြုလာခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ရေစတင်ဖြတ်တောက်သည့်အချိန်ဖြစ်ပေသည်။ အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် အမ်ရ်အိဘ်နေဟဂျားဂျ်ဇိုဘိုင်ဒီဦးဆောင်သော စစ်သည်အယောက(၅၀၀)ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် တပ်တစ်စုအား ယူဖရေးတီးမြစ်ကို ဝိုင်းရံထားရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် ဘက်တော်သားများအပါအဝင် ကလေးသူငယ်များကိုပါ (၃)ရက်တိုင်တိုင်ရေဖြတ်တောက် ခဲ့လေသည်။ ထိုနောက် ညတွင်းချင်းပင် ဟဇ္ဇရသ်အဘ္ဘာစ်ဦးဆောင်၍ လူအယောက်(၅၀)ဖြင့် ယူဖရေးတီးမြစ်အစောင့်တပ်များကို တိုက်ခိုက်ကာ ရေရရှိရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ထိုသို့ရေပိတ်ထားသော်လည်း အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် ဆွေးနွေးလိုခဲ့သည့်အတွက် ညလုံးပေါက် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။ ထိုအခါအေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည်ာစစ်မဖြစ်ကြပဲ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးယဇီးဒ်ထံသို့သွားရောက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောကြမည်ဟု အိဘ်နေစအ်ဒ်အားအကြံပြုခဲ့သည်။ သို့သော် အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် အိဘ်နေဇေယားဒ်ဘက်မှ ဒဏ်ခတ်မည်ကို ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည့်အတွက် ထိုအကြံပြုချက်အား လက်မခံခဲ့ပေ။ ထိုသို့ဆွေးနွေးမှုသည် နှစ်ဦးအကြားတွင်သာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း မြောက်များစွာသော ဆင့်ပြန်မှု(ရေဝါယသ်)တော်များတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)ဘက်မှ အချက်(၃)ကို အကြံပြုသည့်အနေဖြင့်တင်ပြခဲ့လေသည်။:
နယ်စပ်မြို့(ရိုင်ယ်မြို့)သို့သွား၍ ပုန်ကန်သူများကို သာမန်စစ်သည်တစ်ဦးကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန်
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ကြင်ယာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည့် ရိုဘားဘ်၏ ကျေးကျွန် ဖြစ်သူအွက္ကဘာအိဘ်နေစမ်အားန်သည် ကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်တွင် အသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိပဲကျန်ရစ်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ ၎င်းသူသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်မှ ထိုသို့ အကြံပေးခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုထားမှုကို လုံးဝပြတ်သားစွာငြင်းဆိုထားလေသည်။ (အမှန်တကယ်မှာလည်း ဤသို့သောရေဝါယသ်သည် အလွန်မှပင်မှားယွင်းသော ရေဝါယသ်တစ်ခုဖြစ်လေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ယဇီးဒ်ကဲ့သို့သောသူနှင့် မူလကတည်းမှ သစ္စာမခံလိုခဲ့ပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း နောက်ဆုံးတွင်ကရ်ဘလာသို့ ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ စာဖတ်သူတို့အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့သောရေဝါယသ်တော်များကို သတိထားသင့်သည်)ထို့အပြင် ယင်းကျေးကျွန်မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မည်သည့်အခါမျှ ဤကဲ့သို့သော စကားများမပြောခဲ့သည့်အပြင် ဤကဲ့သို့သော အကြံပြုချက်များကိုလည်း မပေးခဲ့ပါ။၎င်းအပြင်အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် တစ်ချိန်သာလျှင် ၎င်းတို့နှင့် စကားပြောရန်အတွက် မိမိတဲနန်းနှင့်လှမ်းသော နေရာသို့သွားခဲ့သည်ဟု သက်သေထူထားလေသည်။ မာဒ်လွန်းဂ်က အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ယဇီးဒ်နှင့် သစ္စာခံဘိုင်အသ်လုပ်မည်ဟု အကြံပြုခဲ့သည်ဟု ရေးသားပြောဆိုထားခြင်းသည် သဘောရိုးမဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)အား ယဇီးဒ်သတ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ် ၊အိဘ်နေဇေယားဒ်သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကာ ယဇီးဒ်အား ကာကွယ်ပေးလိုသောဆန္ဒများရှိနေကြောင်း ပေါ်လွင်နေပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် အပစ်အားလုံးကို အိဘ်နေဇေယားဒ်ခေါင်းပေါ်သို့ ပုံချလိုသော ဆန္ဒကြောင့် ဤကဲ့သို့သော် ရေဝါယသ်များကို လုပ်ကြံခဲ့ကြလေသည်။ ရစူလ်လေဂျာအ်ဖရီယာန်းမှ သာရီးခေသွဘရီကျမ်းနှင့် အလ်ကာမိလ် ဖီသ်သာရီးခ်ကျမ်းများကို ကိုးကား၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် မည်သို့သောအခါမျှ ယဇီးဒ်နှင့် သစ္စာခံမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ ဟုရေးသားထားလေသည်။
အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် လက်ရှိအနေအထားကို သဘောရန်ဆုံးဖြတ်လိုသော်လည်း ရှင်မ်အိဘ်နေဇီရှောင်ရှန်(စစ်ဖီးန်းတိုက်ပွဲတွင် အလီ(အ.စ)ဘက်မှ ဝင်၍စစ်တိုက်ပေးခဲ့သူ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မဖြစ်ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် ယဇီးဒ်နှင့်သစ္စာခံခိုင်းရန် အိဘ်နေဇေယားဒ်အားသွေးထိုးခဲ့လေသည်။ ထပ်မံ၍ အကယ်၍ အသင်အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်ငြိမ်းချမ်းမှုရယူခဲ့ပါက အိဘ်နေဇေယားဒ်၏အားနည်းသူနှင့် ဟိုစိုင်န်အဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် အားသာသူဖြစ်သွားပေမည်။ ထို့ကြောင့်မိမိ၏ သိက္ခာကျခံမည်လောဟု အိဘ်နေဇေယားဒ်အား ပြောကြားခဲ့သည်။ အိဘ်နေိဇေယားဒ်သည် ရှင်မ်ရ်အိဘ်နေဇီဂျောင်ရှန်၏စကားများကို ကြားလိုက်ရသည်နှင့် မိမိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြောင်းလိုက်လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ရှင်မ်ရ်သည် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏အမိန့်စာကို အိုမရ်အိဘ်စအ်ထံသို့ ယူဆောင်လာပြီး သူ့အားပေးခဲ့သည်။၎င်းစာတွင် အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိန့်ကြားချက်ကို လိုက်နာမှုမရှိပါက သတ်ပစ်ရန်နှင့် မိမိထိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်လိုမှုမရှိပါက စစ်သူကြီးရာထူးကို ရှင်မ်ရ်အားလွှဲပြောင်းပေးရန် ညွှန်ကြားထားလေသည်။ ၎င်းအပြင် ရှင်မ်ရ်သည် မိမိဘက်မှ ဖြည့်ဆွက်၍ အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်ကို ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သေဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ခန္ဓာအား အစိတ်စိတ်အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားရန် နင်းချေပစ်မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့လေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှင်မ်ရ်သည် အလွန်မှပင်ယုတ်မာကြမ်းတမ်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက်ဤကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ရှင်မ်ရ်၏ စကားများကို အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်ကြားလိုက်ရသောအခါ ၎င်းအား ကျိန်းဆဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုများကို ဖျက်စီးပစ်သူသည် အသင်သာလျှင်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်မှ မည်သို့သောအခါမျှ ယဇီးဒ်နှင့်သစ္စာခံမည်မဟုတ်ကြောင်းကို အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ် ကောင်းကောင်းသိထားသည်။ အိဘ်နေဇေယားဒ်ဘက်မှလည်း အမိန့်စာလာရှိထားသည်မှာ အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် ထိုတာဝန်ကို မယူနိုင်ပါက ရှင်မ်ရ်သို့လွှဲပြောင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အိုမရ်အိဘ်စအ်ဒ်မှလည်း ရာထူးကို ရှင်မ်ရ်ထံမလွှဲပေးလိုခဲ့ချေ။ နောက်ဆုံးတွင် ထိုတာဝန်ကို မိမိကိုယ်၌ လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး လက်ခံလိုက်လေသည်။
မိုဟရမ်လ(၉)ညနေခင်းနေဝင်ချိန်တွင် အိုမရ်အိဘ်စအ်သည် မိမိ၏စစ်သည်ရဲမက်များနှင့်အတူ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ခိုင်မာတဲနန်းများဘက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိ၏ဓားကို မြေ၌စိုက်ကာ မှီလျှက် မှေးနေခဲ့ချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မှေးနေရင်းဖြင့် ခေတ္တခဏအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီး အိပ်မက်၌ အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ အဘိုးတော်မှ "အိုငါ့၏မြေးတော် ဟိုစိုင်န် အသင်သည် များမကြာမီ ငါတို့ထံသို့ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်"ဟု မိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)သည် နောင်တော်ထံသို့ရောက်ရှိ၍လာခဲ့ပြီး အိုဟိုစိုင်န်း(အ.စ) အိုမရ်အိဘ်စအ်ဒ်သည် မိမိ၏စစ်သည်များနှင့်အတူ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဟု ပြောဆို၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား နှိုးခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိ၏ညီတော်အဘ္ဘားစ်(အ.စ)အား ၎င်းတို့လာရောက်ရခြင်းအကြောင်းကို စုံစမ်းရန်အတွက် ၎င်းတို့ထံစေလွှတ်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်ဘက်မှ ဆုံဖြတ်ချက်များပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စကားများအပြန်အလှန်ပြောဆိုခဲ့ရကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် အကြောင်းစုံကို သိသွားခဲ့သည်။ ထိုအခါ ၎င်းည၌ပင် မိမိ၏မိသားစုများအပြင် ဘက်တော်သားတို့ အကြားမိန့်ခွန်းများခြွေခဲ့လေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုမိန့်ခွန်းများကို သားတော် အေမာမ်စဂျ်ဂျားဒ်မှ ဆင့်ပြန်တော်မူထားခဲ့လေသည်။ ယင်းမိန့်ခွန်းများအတွင်းမှ တစ်ခုသည် "ကျွန်ုပ်သည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်အား ထောမနာပြုပါ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့အကြား မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ကဲ့သို့သော တမန်တော်ကို ပို့ဆောင်ပေးတော်မူခဲ့ပြီး အရှင်မြတ်၏စစ်မှန်သော သာသနာတော်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား သွန်သင်ပြသတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၌ အသင်တို့ကဲ့သို့သော မိတ်ဆွေကောင်းများကို မတွေ့ခဲ့ရသလို မိသားစုဝင်များအကြား ကျွန်ုပ်၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော စိတ်ဓါရှိသည့် ကျွန်ုပ်၏မိသားစုကဲ့သို့ မည်သည့်မိသားစုကို မျှ မတွေ့ဖူးချေ။ ထို့ကြောင့်အရှင်မြတ်ဘက်မှ အသင်တို့အပေါ်ကောင်းချီးအဖြာဖြာနှင့် ဆုလဒ်တော်များ ပေးတော်မူပါဟု ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပါလို၏။ မနက်ဖန်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့သည် သေချင်းတရားနှင့်ရင်ဆိုင်ကြရပေမည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိပါအံ့။ ထို့အတွက်ကြောင့် အသင်တို့အားလုံးကို မိန့်ဆိုလိုသည်မှာ ယခုလိုမှောင်နေခိုက် မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်နှင့် လမ်းခွဲ၍သွားလိုက သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့် အတူရှိနေဖို့ရန် အသင်တို့အား ကျွန်ုပ်ဘက်မှ အလျဉ်းမတိုက်တွန်းလိုပါ။ ဟုဖြစ်လေသည်။
သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်တော်သားများနှင့် အနွယ်ဝင်တို့အားလုံးသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လမ်းခွဲ၍ ထွက်ခွာသွားခြင်းမပြုပဲ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ် သစ္စာစောင့်ထိန်းခဲ့ကြသည်။ သခင်မကြီးဇိုင်နဘ်(စ.အ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ မိန့်ခွန်းကို ကြားလိုက်ရသည်နှင့်မေ့လဲသွားခဲ့သည်။ ထိုအခါအေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် နှမတော်အား စကားများပြောဆို၍ ဖြေသိမ့်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် ခုခံကာကွယ်ရန်အတွက် အသင့်ပြင်သောအားဖြင့် ခိုင်မာ(တဲနန်းများ)ကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးနီးကပ်ကပ်စိုက်ထူစေခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ထိုတဲနန်းများကို ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းနှင့်ပေါင်းချည်နှောင်ကာ ထိုတဲနန်းများ၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင် ဝါးနှင့်သစ်သားများကို ထင်းပုံများအဖြစ် ဝိုင်းရံ၍ စီထားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ရန်သူတို့သည်တဲနန်းများအတွင်းသို့ ဝင်လာမည်ဆိုပါက အလွယ်တကူမဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ထိုထင်းပုံများကို မီးရှို့၍ ဟန့်တားမည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဤသို့လုပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်မစတင်မီ ညတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် နောက်လိုက်သားများအားလုံးတို့သည် တစ်ညလုံးအလ္လာဟိုအရှင်မြတ်အား ဝတ်ပြုဦ:ချကာ မိမိလိုရာဆုများကို အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှ တောင်းဆုပြုခဲ့ကြပြီး မနက်လင်းသည်နှင့် ရန်သူတို့ဘက်မှ စတင်၍ စစ်ကိုအစပြုခဲ့ကြသည်။
မိုဟရမ်လ(၁၀)ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မိမိ၏နောက်လိုက်များအတွင်းမှ မြင်းစီးစစ်သည် (၃၀)ဦးနှင့် ခြေကျင်စစ်သည်(၄၂)ကို အသင့်ပြင်ခဲ့လေသည်။ ဘယ်ဘက်စစ်ဗြူဟာတပ်မှူးကို ဟဘီးဘ်အိဘ်နေမဇွာဟီရ်အားခန့်အပ်၍ ညာဘက်စစ်ဗြူဟာ တပ်မှူးကို ဇိုဟိုင်းရ်ဘိဘ်နေကိုင်းန်အား ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဗဟိုစစ်ဗြူဟာမှူးအဖြစ် ဟဇရသ်အဘ္ဘားစ်အား တာဝန်များအသီးသီးပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တဲနန်းများ၏ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထင်းများပုံစေပြီး ထိုထင်းများကို မီးရှို့ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ခိုင်မာတဲနန်းအတွင်းသို့ ဝင်ကာ အမွှေးနံသာများလိမ်းကာ မိမိကိုယ်ကို သင်းပျံ့စေခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိမိ၏အစီးအနင်းပေါ်တွင်ထိုင်လျှက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကို လက်တစ်ဖက်မှ ကိုင်ကာ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်ပါးတွင် ဆုမွန်(ဒိုအာ)ပြုခဲ့ပြီးနောက် ကူဖှာသားတို့ဘက်လှည့်ကာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့လေသည်။ သို့ရာတွင် မိန့်ကြားတော်မူလေသည်မှာ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စိုးပိုင်တော်မူသော အရှင်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင် အရှင်မြတ်၏သာသနာတော်အား အရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင် စောင့်ရှောက်မည် ဟုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့အား မိမိနှင့်မိမိ၏နောင်တော်ဟစန်(အ.စ)တို့သည် ဂျန္နသ်(သုခဘုံ)၏ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြောင်း တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ မိန့်ကြားမှုကို မိန့်ကြားခဲ့ပြီး ပြန်လည်သတိရစေခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိမိအားသတ်ဖြတ်ခြင်းသည် တရားတော်နှင့်ကိုက်ညီပါသလားဟု စဉ်းစားခိုင်းစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိအား ၎င်းတို့ဘက်မှ မြောက်များစွာသော စာများရေး၍ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့မှုအပေါ် ရှု့ချခဲ့လေသည်။ ထို့နောက်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ ထပ်မံပြောကြားသည်မှာ မိမိတို့သည် အသင်တို့နှင့် စစ်မတိုက်လိုသည့်အတွက် နေရာဒေသတစ်ခုသို့ သွားရောက်နေထိုင်လိုကြောင်းနှင့် ထိုသို့သွားမှုကို သဘောတူပေးလိုကြောင်း ထပ်မံမိန့်ကြားခဲ့ပြန်သည်။ သို့သော် ၎င်းသူတို့ဘက်မှ မည်သည့်ဒေသမျှ သွားခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် ယဇီးဒ်နှင့်မလွဲမသွေ သစ္စာခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့လေသည်။ ထိုအခါအေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ မိမိသည် ကျေးကျွန်တစ်ဦးကဲ့သို့ ယဇီးဒ်နှင့် အလျဉ်းသစ္စာခံမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြန်လည်မိန့်ကြားခဲ့လေသည်။ ထို့နောက်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မြင်းပေါ်မှ အောက်သို့ ဆင်းခဲ့ပြီး မြင်းကိုတစ်နေရာ၌ ချည်နှောင်လိုက်လေသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မည်သည့်အခါမျှ စစ်မြေပြင်မှ ထွက်ပြေးမည့်သူတစ်ဦးမဟုတ်ကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ မိန့်ကြားမှုများသည် ဟွရ်အိဘ်နေယဇီးဒ်ရီယာဟီ၏နှလုံးသားအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားမှုကြောင့် ၎င်းသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်မှ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ကူဖှာမြို့သားတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ်သစ္စာဖေါက်မှုကြောင့် ၎င်းတို့အား ကျိန်ဆဲ၍ ရှုံ့ချခဲ့လေသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ယင်းကူဖှာသားတို့သည် ဟွရ်၏စကားများအပေါ် အရေးမစိုက်ခဲ့ကြပေ။ စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက် ဟွရ်သည်လည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်မှ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး ထိုကရ်ဘလာစစ်မြေပြင်၌ပင် ကျဆုံး(ရှဟီးဒ်ဖြစ်)သွားခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ရှဟီးဒ်ဖြစ်(ကျဆုံး)ခဲ့လေသည်။
ဇိုဟိုင်းရ်အိဘ်နေကိုင်းန်သည် ကူဖှာသားတို့အား အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အားရှဟီးဒ်မလုပ်(မသတ်ရန်) နှင့် အေမာမ်(အ.စ)၏စကားကို နာခံရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့လေသည်။ သို့သော်လည်းကောင်းသူတို့သည် ဇိုဟိုင်းရ် အားကြိမ်းမောင်းပြောဆို၍ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီး မြှားတစ်စင်းကို စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲကို အစပျိုးလိုက်လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် တိုက်ပွဲစတင်သွားပြီဖြစ်သည်။ ရန်သူတို့ဘက်မှ ညာဘက်စစ်ဗြူဟာမှူးဖြစ်သူ အမ်ရ်အိဘ်နေဟဂျ်ဂျားဂျ်ဇိုဘိုင်ဒီသည် ညာဘက်မှ စတင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်မှ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည် ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် ပြန်လည်နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ အမ်ရ်သည် မိမိ၏ စစ်သည်တို့အားအနီးကပ် တစ်ဦးချင်းထွက်မတိုက်ပဲ အဝေးမှ မြှားများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ရန်သူတို့ဘက်မှ ဘယ်ဖက် စစ်ဗြူဟာမှူးသည် ရှင်မ်အိဘ်နေဇီဂျောင်ရှန် ဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့် စစ်သည်တို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့အား ဘယ်ဖက်မှ ဝင်ရောက်၍ တိုက်ခိုက်လာပြန်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည်လည်း ပြန်လည်နောက်ဆုတ်ပြေးခဲ့ရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ခြေကျင်စစ်သည်များနှင့် လေးပစ်သမားများကို စစ်ကူအဖြစ် ထပ်မံစေလွှတ်ပေးရန် အိုမရ်အိဘ်စအ်ဒ် အားတောင်းခံခဲ့လေသည်။ တစ်ချိန်က အလီ(အ.စ)၏ ဘက်တော်သားဖြစ်ခဲ့သည့် ရှဘီစ်ဘင်ရုဘ်အီသည် ကရ်ဘလာတိုက်ပွဲတွင် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏အမိန့်အောက်တွင် ခြေကျင်တပ်၏ တပ်မှူးအဖြစ်တာဝန်ယူထားခဲ့ရသည်။၎င်းအား ဝင်တိုက်ရန် အမိန့်ကျလာသည့်အခါ ၎င်းမှ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်အမိန့်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီး ဝင်မတိုက်ခဲ့ပေ။ ထိုသို့ဖြင့်အခြားသော မြင်းစီးတပ်များနှင့်ခြေကျင်စစ်သည်(၅၀၀)တို့မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လေသည်။ ထိုအခါအေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ဘက်တော်သားမြင်းစီးတပ်သည် ၎င်းတို့မြင်းများ၏ခြေထောက်ဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရသည့်အတွက် ခြေကျင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏တပ်သည် ရှေ့သို့တပ်ချီတိုက်ခိုက်သည့်အခါ အိုမရ်အိဘ်နေအစ်အ်ဒ်မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)တို့အား အဘက်ဘက်မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး ခိုင်မာတဲနန်းများထိ ဝင်စီးရန် အမိန့်ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ ခိုင်မာတဲနန်းများကို ဝင်စီးတိုက်ခိုက်သည့်အခါ ခိုင်မာများအတွင်း၌ ရှိနေသူတို့မှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့လေသည်။ အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ခိုင်မာတဲနန်းများကို မီးရှို့ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည့်အခါ ရှင်မ်ရ်သည် အမျိုးသမီးများရှိရာ တဲနန်းများဘက်သို့ သွားရောက်မီးရှို့ရန်လုပ်သည့်အခါ အခြားစစ်သည်များက ၎င်းအားပြောဆိုသဖြင့် အရှက်ရခဲ့ရလေသည်။ သို့သော် နောက်တစ်ကြိမ်အပြင်းအထန် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မီးရှို့သည့်အခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အမိန့်ဖြင့် ပုံထားသော ထင်းများစတင်လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ၎င်းတို့တိုက်ခိုက်မှုသည် မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ .
ဇိုဟိုရ်အချိန်(မွန်းလွဲချိန်)သို့ရောက်လာသည့်အခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် နောက်လိုက်သားတို့သည် ဇိုဟိုရ်နမားဇ် ဝတ်ပြုမှုကို (နမားဇေခေါဖ်) စစ်ပွဲဖြစ်လျှင် ဝတ်ပြုသော အနေအထားဖြင့် ဝတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ဝတ်ပြုပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏စစ်သည်များ အပြင်းအထန်ဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရလေသည်။ ထို့နောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဘက်တော်သားတို့သည် တစ်ဦးပြီးတစ်ဦးကျဆုံး(ရှဟီးဒ်ဖြစ်)သွားကြလေသည်။ ဘနီဟာရှင်မျိုးနွယ်စုတို့အကြား ပထမဦးဆုံးရှဟီးဒ်ဖြစ်(ကျဆုံး)သူမှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏သားတော် အလီအက္ကဘရ်(အ.စ)သာဖြစ်ပေသည်။ ထို့နောက် ဟဇ်ရသ်မွစ်လင်(မ)၏သားများနှင့် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်၏သားတော်များ၊ထို့နောက် အကီးလ်၏သားများနှင့် ကာစင်မ်အိဘ်နေဟစန်(အ.စ)တို့ဖြစ်လေသည်။ ကာစင်မ်အိဘ်နေဟစန်(အ.စ)သည် အလွန်မှပင် နုပျိုချောမောသော လူငယ်လေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ့အား ရက်ရက်စက်စက်ရှဟီးဒ်လုပ်(သတ်)ခဲ့ကြလေသည်။ ကာစင်မ်အိဘ်နေဟစန်(အ.စ)စစ်မြေပြင်၌ ကျသည့်အခါ သူသည် မိမိ၏ ဦးရီးတော်အား လာရောက်ကူညီရန် လှမ်းခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ကာစင်မ်အိဘ်နေဟစန်ထံသို့ အပြေးအလွှားသွားရောက်ခဲ့ပြီး သူ့အား ခုတ်သူကို ပြန်လည်သုတ်သင်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် ကာစ်င်မ်(အ.စ)သည် အိဘ်နေဇေယားဒ်တပ်ကြီး၏မြင်းခွာများအောက်တွင် အစိတ်စိတ်အပိုင်းပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မြင်းများဒုန်းစိုင်း၍ ကာစင်မ်(အ.စ)၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ခုန်ပေါက်နင်းချေသည့်အတွက် စစ်မြေပြင်တွင် ဖုန်မှုန့်များထကာ မည်သူ့ကိုမျှ မတွေ့ရတော့ပေ။ ထိုသို့ဖြင့် ဖုန်မှုန့်များ ပြန်လည် ငြိမ်သက်သွားသည့်အခါမျှ အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သောနေ ကာစမ်င်(အ.စ)၏ ခန္ဓာကို ပွေ့ချီထားသော အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အားတွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ထိုသို့အနေအထားဖြင့် ကာစင်မ်(အ.စ)အား သတ်ဖြတ်သူအပေါ် လာနသ်ပို့သရင်း သူ၏ အလောင်းတော်ကို ခိုင်မာတဲနန်းများဆီသို့ ယူဆောင်လာကာ အခြားသော အလောင်းတော်များနဘေးတွင် ထားလိုက်လေသည်။.
သွဘရီနှင့် ဘေလာဇရီကျမ်းတို့တွင် ဟဇ်ရသ်အဘ္ဘားစ် ရှဟီးဒ် ဖြစ်ပုံအား တင်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် ထိုကျမ်းများ၌ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ခိုင်မာတဲနန်းများ၌ ရေပြတ်တောက်သွားသည့်အခါ သူ့အား ယူဖရေးတီးမြစ်သို့ သွားရောက်၍ ရေယူရန် မိန့်ခဲ့သည့်အခါ ရေသွားရောက်ယူရာတွင် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏ တပ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့်အခါ သူသည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ထံအိဘ်နေဇေယားဒ် စစ်သည်တို့အား ရေမရရှိပဲ အသက်နုတ်တော်မူပါဟု ဒိုအာပြု(ဆုတောင်း)ခဲ့သည်။ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည်လည်း သူ၏ဒိုအာကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ သဇ်ရသ်အဘ္ဘာားစ်၏ပါးစပ်နှင့် မေးအောက်တွင် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရသွားခဲ့သည်။ ထိုအခါယင်းဒဏ်ရာမှ ကျလာသော သွေးများကို လက်ခုတ်ဖြင့် ခံ၍ ကောင်းကင်ယံသို့ မြှောက်ပစ်လိုက်ပြီး အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ထံ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ်သို့ကျရောက်လျက် ရှိသော ဒုက္ခများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်တန်းတော်မူခဲ့လေသည် ဟူ၍သာ ဖော်ပြထားလေသည်။ သို့သော်လည်း ဟဇ်ရသ်အဘားစ် ရှဟီးဒ်ဖြစ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့် ခိုင်မာသော ရေဝါယသ်တော်များကို ရှေးခ်မိုဖီးဒ်မှ တင်ပြထားလေသည်။၎င်းမှာ ဟဇ်ရသ်အဘ္ဘားစ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်အတူ ယူဖရေးတီးမြစ်သို့ ရေသွားရောက်ယူစဉ် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွာသွားကြပြီးနောက် အဘ္ဘားစ်(အ.စ)သည် ရန်သူတို့၏ ဝိုင်းရံခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီးနောက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံပြန်လည်ခုခံရင်း ယခုလက်ရှိ ဟဇ်ရသ်အဘ္ဘားစ်(အ.စ)အား မြှုပ်နှံထားသော နေရာတွင်ပင် ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ .
ထိုအခါ အိဘ်နေဇေယားဒ်၏ တပ်များသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံသို့နီးကပ်လာခဲ့ကြလေသည်။ သို့သော် မည်သူတစ်ဦးမျှ အနားသို့ မကပ်ရဲခဲ့ကြပေ။ ထိုသို့ဖြင့် မာလိက်အိဘ်နေနစီးရ်ကန်ဒီဆိုသူသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)၏ဦးခေါင်းတော်အား ဓားဖြင့်ခုတ်လိုက်သည့်အခါ စောင်းထားသော ဦးသံခမောက် ကွဲရှသွားခဲ့ပြီး ခေါင်းတွင်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့သည်။ ထိုမှ သွေးများစီးကျလာသဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် သံခမောက်ကို ဖယ်၍ ဦးခေါင်းတွင် ခေါင်းပေါင်း(အမာမာဟ်)ပေါင်းလိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသူသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ သံခမောက်ကို လုယူသွားခဲ့၏။ ထိုကြောင့် ကရ်ဘလာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းသူသည် ဆင်းရဲတွင်းသို့ကျရောက်ကာ သေသည်အထိ နိမ့်ကျပြီး သိက္ခာမဲ့သော ဘဝဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ကရ်ဘလာသမိုင်းတွင် ပိုမိုဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာမှာ နို့စို့အရွယ်ကလေးငယ်လေးတစ်ဦး၏အကြောင်းအရာပင်ဖြစ်လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ထိုကလေးငယ်ကို ပေါင်ပေါ်၌ ပွေ့ထားခဲ့လေသည်။ ယာကူဘီသမိုင်းကျမ်းအရ ထိုကလေးငယ်၏ လည်ပင်းသို့ မြှားတစ်စင်းလာစိုက်ခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ကလေးငယ်၏လည်ပင်းမှစီးကျလာသော သွေးများကို လက်ခုပ်နှင့်ခံ၍ မြေပြင်သို့ လောင်းသွန်လိုက်ပြီးနောက် ရှိုင်ဿွာန်(မိစ္ဆာကောင်)၏နောက်လိုက်များကို အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်အရေးယူတော်မူပါဟု တိုင်တည်ခဲ့လေသည်။.
ရှင်မ်ရ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အနားသို့သာ ကပ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် မတိုက်ခိုက်ရဲခဲ့ပေ။ နှစ်ဦးအကြားစကားများအပြန်အလှန်သာပြောခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏သက်တော်သည် (၅၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ရှင်မ်ရ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရန်အသင့်ရှိနေခဲ့၏။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟစန်၏ကလေးအရွယ်သားတော်တစ်ပါးဖြစ်သည့် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဟစန်(အ.စ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)တို့တားနေသည့်အကြားမှ ဦးရီးတော်အား ကာကွယ်ရန်အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူ၏လက်တော်နှစ်ဖက်လည်း ပြတ်သွားခဲ့သည်။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ၎င်းကလေးငယ်အား ပြုစုရင်း အသင်သည် ဂျန္နသ်သုခဘုံ၌ အသင့်၏ဖခမည်းတော်နှင့် စုံစည်းရပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်၌ (၃)ဦးသို့မဟုတ်(၄)ဦးသာကျန်တော့သည့်အချိန်ဖြစ်လေသည်။ ထို့နောက်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိကျဆုံးသွားပြီးနောက် မိမိခန္ဓာကိုယ်၌ အဝတ်အစားကျန်နေစေရန်ရည်ရွယ်၍ အင်္ကျီအထပ်ထပ်ဝတ်ခဲသည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ကျဆုံး(ရှဟီးဒ်)ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ထိုအင်္ကျီများကို ချွတ်ယူသွားခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက်အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ် ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)ရှေ့သို့ရောက်ရှိလာသည့်အခါ သခင်မကြီး(စ.အ)မှ အိုအိဘ်နေစအ်ဒ် ကျွန်မ၏အစ်ကိုအား ဝိုင်းတိုက်နေသည်ကို အသင်ဤအတိုင်းလွှတ်ထားတော့မှာလား ဟု ပြောသည့်အခါ ၎င်းမှ မျက်ရည်များစီးကျခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ခုခံတိုက်ခိုက်နေသည့်အချိန်ဖြစ်လေသည်။ ယာကူဘီကျမ်းနှင့် အချို့သော ရှီအာတို့၏ကျမ်းများတွင်ရေးသားထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မြောက်များစွာသော ရန်သူတို့ကို ချေမှုန်းခဲ့သည် ဟုဖြစ်သည်။ သို့သော် အချို့သောကျမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ အိဘ်နေဇေယားဒ်၏တပ်သားများသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား သတ်ရန်(ရှဟီးဒ်လုပ်ရန်)အခွင်းအရေးများရရှိခဲ့သော်လည်း ထိုသို့မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ဟုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ဦးခေါင်းနှင့် လက်မောင်းတို့တွင်ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရကာ မြေပြင်ပေါ်သို့ မျက်နှာနှင့် ကျခဲ့သည်။ ထိုအခါ ခူလီဘင်န် ယဇီးဒ် အဆ်ဘဟီးထံသို့ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ရန် အမိန့်ရောက်လာခဲ့လေသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့ပြီး ထိုသို့မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထို့နောက် ဆနားန်ဘင်န်အနစ် အမ်ရ် နခ်အီ ဆိုသူသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ထပ်မံဓားဖြင့်ခုတ်ပြီးနောက် ဦးခေါင်းနှင့် ခန္ဓာအားတစ်ခြားစီပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဦးခေါင်းတော်အား ခူလီသို့ပေး၍ ခူလီသည် ထိုဦးခေါင်းတော်ကို အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံသို့ ယူဆောင်သွားခဲ့လေသည်။
ထိုသို့ဖြင့် တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏ တပ်သားတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ခန္ဓာမှ ပစ္စည်းများကိုယူရုံတင်မက ခန္ဓာတင်အထပ်ထပ်ဝတ်ဆင်ထားသော အင်္ကျီများကိုပါချွတ်၍ ယူခဲ့ကြသည်။ ထိုအတိုင်းပင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏မိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတို့ထံမှ ပစ္စည်းဥစ္စာများအပြင် ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းတွင်ခြုံထားသော ခြုံထည်များကိုပါ လုယူခဲ့ကြလေသည်။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏သားတော်အေမာမ်ဇိုင်နွလ်အာဗေဒီန်း(အ.စ)သည် နာမကျန်းဖြစ်နေခဲ့သည့်အတွက် ခိုင်မာတဲနန်းအတွင်းမှပင် အပြင်သို့မထွက်နိုင်ခဲ့ပေ။ ရှင်မ်ရ်သည် ထိုအေမာမ်မ်(အ.စ)ကိုပါ သတ်ဖြတ်(ရှဟီးဒ်)လုပ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်များကျင်းပနေနိုင်ခြင်းသည် ယင်းအေမာမ်(အ.စ)ကရ်ဘလာ၌ ရှဟီးဒ်မဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။ ကရ်ဘလာတွင်ကျဆုံး(ရှဟီးဒ်)ဖြစ်သူ(၇၂)ပါးတို့၏နာမတော်များကို အေမာမ်ဇိုင်နွလ်အာဗေဒီန်း(အ.စ)မှ ဖော်ပြသွားခဲ့ပြီး ထို(၇၂)ပါးသော အစ္စလာမ့်အာဇာနည်များအတွင်း၌ ဘနီဟာရှင်မျိုးနွယ်မှ (၁၇)ပါးပါဝင်ခဲ့လေသည်။ မိုဟ်စင်န်အမီးန်ဆိုသူမှ အိဘ်နေဇေယားဒ်ဘက်မှ သေဆုံးသူဦးရေမှာ (၈၈)ဦးဖြစ်သည်။ သူ၍ ဖော်ပြထားလေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ရှဟီးဒ်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သူ၏သက်တော်မှာ အချို့က ၅၅နှစ် (သို့) ၅၆ နှစ် (သို့) ၅၇နှစ် (၅၈)နှစ်ဟု အမျိုးမျိုးကျမ်းအသီးသီးတွင်ဖော်ပြထားကြလေသည်။ အာရှူရာနေ့သည် အချို့က သောကြာနေ့ဖြစ်သည်ဟုပြောထားကြပြီး အချို့က စနေ(သို့)တနင်္လာနေ့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားကြလေသည်။ သို့သော် သောကြာနေ့ဟု ဆိုထားမှုသည် ပိုမိုခိုင်လုံလေသည်။.
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ခန္ဓာကိုယ်အား မြင်းခွာများဖြင့် တက်နင်း၍ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်ရန်အတွက် (၁၀)အသင့်ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ကရ်ဘလာစစ်ပွဲပြီးဆုံးသွား၍ အိဘ်နေစအ်ဒ်စစ်တပ်လည်း ထိုနေရာမှ ထွက်ခွာသွားကြသည့်အခါ အလ်ကာဇွရီယာကျေးရွာနေထိုင်သူ ဘနီအစဒ် မျိုးနွယ်စုဝင်တို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) အလောင်းတော်အား ထိုနေရာ၌ပင် မြေမြှုပ်ပေးခဲ့ကြလေသည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဦးခေါင်းတော်အား အခြားဘနီဟာရှင်မ်ဦးခေါင်းတော်များကဲ့သို့ ကူဖှာနှင့် ဒမစ်ကစ်မြို့များသို့ ပင့်ဆောင်သွားခဲ့ကြလေသည်။ လာရာဝကျာဝလီရီဆိုသည်မှ အစ္စလာမ့်စွယ်စုံကျမ်းတွင် ၎င်း၏ခံယူချက်အား တင်ပြထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဦးခေါင်းတော် ယဇီးဒ်နန်းတော်သို့ရောက်လာချိန်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏နုတ်တော်ကို လက်တွင်ကိုင်ထားသော တုတ်ဖြင့် ဆော့ကစားသူမှာယဇီးဒ်မဟုတ်ပဲ အိဘ်နေဇေယားဖြစ်ပြီး ယဇီးဒ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဦးခေါင်းတော်ကို အရိုအသေပြုခဲ့သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။၎င်းအပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား စောလျှင်စွာ ရှဟီးဒ်ပြု(သတ်)လိုက်သည့်အတွက် ယဇီးဒ်သည် အိဘ်နေဇေယားဒ်အား ကျိန်ဆဲကာ ၎င်းကို နိမ့်ချပြောဆိုလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ဆမီယာဟ်ဆိုသူမ၏ သားဟု ပင် ပြောခဲ့လေသည် ဟု ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်မှ ခံယူထားလေသည်။ ယဇီးဒ်မှ အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိနှင့် ကင်းရှင်းစွာနေခဲ့မည်ဆိုပါက ခွင့်လွှတ်ပေးရန်အဆင်သင့်ရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့လေသည်။ ကရ်ဘလာပြီးနောက်ပိုင်း ဘနီဟာရှင်မ်အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများကို ကူဖှာမြို့နှင့်:ရှာမ်မြို့(ဒမစ်ကစ်)မြို့များသို့ လှည့်လည်ပြသခဲ့လေသည်။ ယဇီးဒ်သည် ပထမပိုင်းတွင် သုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားသော အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အနွယ်တော်များကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆက်ဆံခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုသို့ဆက်ဆံမှုအား အေမာမ်စဂျားဒ်(အ.စ)နှင့် ဇိုနဘ်သခင်မကြီးတို့မှ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်အတွက် နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်ဆံမှုများတဖြေးဖြေးနူးညံ့လာခဲ့သည်။ ကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယဇီးဒ်၏ ကြင်ယာတော်များမှလည်းငိုကြွေးခဲ့ကြလေသည်။ ယဇီးဒ်သည် ကရ်ဘလာစစ်ပွဲ၌ မိမိဘက်တော်သားများမှ လုယူခဲ့သော ပစ္စည်းများကို ပြန်လျှော်ပေးရန်ပြောဆိုလာခဲ့သည်။ လပေါင်းများစွာ ရှာမ်မြို့အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌ နေခဲ့ကြပြီးနောက် မဒီနာသို့ ပြန်ခဲ့ကြသည်။.
အချို့သောရေဝါယသ်တော်များသည် ရှိသမျှသော အပစ်များကို အိဘ်နေဇေယားဒ်သို့ ပုံချပြီး ယဇီးဒ်ကို အပစ်မဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ် သက်သေထူလိုသော သဘောဆောင်နေသည်။ ဝီလ်ဖလ် မာဒလူးန်ဂ်မှ ရေးသားထားသည်မှာ အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)အား ယခင်ကတည်းမှ လုပ်ကြံလိုခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား မြင်းခွာများဖြင့် တက်နင်းရန်အမိန့်ပေးသည့် အချက်က သက်သေပြလေပေသည်။ မိုအာဝေယာသည်၏ဖခငဇေယားဒ်အား မိမိ၏အစ်ကိုဟု ပြောခဲ့ရာတွင် အေမာမ်(အ.စ)မှ စောဒကတက်ပြောဆိုခဲ့သည့်အချိန်ကတည်းမှ အေမာမ်(အ.စ)အပေါ် အိဘ်နေဇေယားဒ်မှ အငြိုးအတေးထားခဲ့လေသည်။ သို့သော်လည်း ဝီလ်ဖလ်မာဒလူးန်ဂ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)ကို ရှဟီးဒ်လုပ်(သတ်ဖြတ်)မှု၌ အဓိကအကျဆုံးသည် ယဇီးဒ်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ထားလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယဇီးဒ်သည် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ခေတ္တခဏ ရှောင်တိမ်းသွားမည်ဆိုပါကလည်း နောက်နောင်တွင် မိမိခေလာဖသ်ထီးနန်းအတွက် အစိုးရိမ်ရဆုံးသောသူသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဖြစ်သည်ကို အကောင်းဆုံးသိထားသူ ဖြစ်လေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၎င်း၏စိတ်အတွင်း၌ အေမာမ်(အ.စ)အားလုပ်ကြံလိုစိတ် ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ သို့သော် မိမိသည် မွစ်လင်(မ)ထုကြီး၏ ခလီဖှာဖြစ်နေသည့်အတွက် ထိုကိစ္စကို မည်သူတစ်ဦးကိုမျှပြောပြခွင့်မရခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် အိဘ်နေဇေယားဒ်မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား မကျေနပ်သဖြင့် အငြိုးအတေးထားခဲ့မှုကိုလည်း သိထားခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ယဇီးဒ်သည် အိဘ်နေဇေယားဒ်အား ရေးခဲ့သည်စာအတွင်း၌ ၎င်းအား သတိပေးထားသည်မှာ "အိုအိဘ်နေဇေယားဒ် အကယ်၍ ဟိုစိုင်န်း(အ.စ) အောင်နိုင်သွားမည်ဆိုပါက အသင်သည် မိမိ၏အဘိုးကဲ့သို့ ကျေးကျွန်ပြန်လည် ဖြစ်သွားချေမည်"ဟု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယဇီးဒ်သည် ၎င်းထံရေးသားခဲ့သောစာ၌ မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေအကီးလ်အား မဖြစ်မနေ သတ်ဖြတ်ရန် အပြင်းအထန် တိုက်တွန်းထားလေခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် အိဘ်နေဇေယားဒ်သည်လည်း ကိုယ်ရောစိတ်ပါဖြင့် ထိုအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် ကရ်ဘလာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ယဇီးဒ်သည် လုပ်ရပ်အားလုံးတို့ကို အိဘ်နေဇေယားဒ်အပေါ်သို့လွှဲချခဲ့ပြီး မိမိသည်အပစ်မဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ် လူထုအကြားဖော်ပြခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ယဇီးဒ်၏ဤသို့ကောက်ကျစ်သော လုပ်ရပ်အပေါ် အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး မက္ကာမြို့တွင် ရှိနေခဲ့သည် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဇိုဘိုင်းရ်အား လုပ်ကြံရန် ထပ်မံတာဝန်ပေးသည့်အခါတွင် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။.
ကရ်ဘလာတွင် ကျဆုံးသူများနှင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သူများစာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဘက်မှ ရှဟီးဒ်ဖြစ်(ကျဆုံးသူ)စုစုပေါင်း ၇၀(သို့)၇၂ဦးဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့အတွင်းမှ အပါး(၂၀)သည် ဘနီဟာရှင်မျိုးနွယ်စုဝင် အဘူသွာလိဘ်မှ ဆင်းသက်လာသူများဖြစ်ကြပြီး ထိုသူတို့အတွင်းမှ ပထမဦးဆုံးရှဟီးဒ်ဖြစ်သူသည် အလီအက္ကဘရ်(အ.စ)ဖြစ်ပေသည်။ ယဇီးဒ်သည် အလီအက္ကဘရ်(အ.စ)မိခင်၏ဦးရီးတော်၏သားဖြစ်ပေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အလီအက္ကဘရ်(အ,စ)သည် ၎င်းတို့ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်သူစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် အလီအက္ကဘရ်(အ.စ)သည် ဖခမည်းတော်နှင့် အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သခင်တို့၏လမ်းစဉ်သည် အားလုံးထက်သာလွန်သည်ကို သိထားခဲ့သည့်အတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးစာအား လက်မခံခဲ့ပါ။ မာဒလင်လွန်းဂ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အထွေးဆုံးနို့စို့အရွယ်သားငယ် အဘ်ဒုလ္လာဟ်သည် ဖခင်၏ပေါင်ပေါ်တွင် မြှားမှန်ကာ ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ထားသော်လည်း အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များက ထိုအကြောင်းအရာအပေါ်၌ သံသယများရှိကြသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) အဖေတူအမေကွဲ ညီအစ်ကို(၆)ပါးတို့သည် ထိုစစ်ပွဲ၌ ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။၎င်းသူတို့အတွင်းမှ (၄)ပါးသည် ဘနီကလ်ဘ်မျိုးနွယ်စုမှ ဟေဇွားမ်၏သမီး အွမ်မွလ်ဘနီးန်သခင်မကြီး၏ သားတော်များဖြစ်ကြသည်။ အွမ်မွလ်ဘနီသခင်မကြီးအစ်ကို၏သားဖြစ်သူ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေ အဘီမဟလ်သည် ၎င်းတို့(၄)ပါးအတွက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံမှ ခွင့်လွှတ်စာယူလာခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ထိုစာကိုလက်မခံခဲ့ကြပါ။ ဘနီဟာရှင်မျိုးနွယ်မှ ရှဟီးဒ်ဖြစ်သူများမှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏သားတော်(၃)ပါး၊အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်၏သားတော်(၃)ပါးနှင့် အကီးလ်အိဘ်နေအဘီသွာလိဘ်၏ သားတော်(၃)ပါးအပြင် မြေးတော်(၃)ပါးတို့သည်လည်း ထိုစစ်ပွဲတွင် ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့ကြလေသည်။ ထို့အပြင် အိဘ်နေစအ်သည် မိမိ၏ကျမ်းတွင် အဘူလဟဘ်မျိုးဆက်မှ တစ်ပါးနှင့် အဘူစိုဖေယားန်အိဘ်နေဟာရီစ်အိဘ်နေအဘ်ဒုလ်မွသ်လိဘ်၏မျိုးဆက်မှ တစ်ဦးတို့ပါ ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားလေသည်။ အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် ကရ်ဘလာတွင် ရှဟီးဒ်မဖြစ်ခဲ့သောသူတို့အား ရည်တွက်ရာတွင် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)၏သားတော်နှစ်ပါး၊ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်၏သားတော်တစ်ပါးနှင့် အကီးလ်၏သားတော်တစ်ပါး နှင့် အမျိုးသမီးငါးဦးတို့ဖြစ်ကြသည်ဟု ဖော်ပြထားလေသည်။ အဘူဖရဂျ်အိစ်ဖဟာနီဆိုသူမှ ရည်တွက်ရာတွင် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)၏သားတော်(၃)ပါးတို့အသက်မဆုံးရှုံးပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဟစန်အိဘ်နေဟစန်(အ.စ)သည် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ အလီအိဘ်နေဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် နာမကျန်းဖြစ်နေသည့်အတွက် စစ်မထွက်ခဲ့ပါ ဟု ဆိုထားလေသည်။.
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ပထမဦးဆုံး အမ်ရာအွလ်ကိုင်းစ်၏သမီးတော် ရိုဘားဘ်သခင်မနှင့် ထိမ်းမြားခဲ့လေသည်။ အိုမရာအွလ်ကိုင်းစ်သည် အိုမရ်အိဘ်နေခသွားဘ် လက်ထက်တွင် မဒီနာသို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး အိုမရ်ဘက်မှ ၎င်းအားကဇွာအာဟ် မျိုးနွယ်စုဝင်များ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့လေသည်။ အလီ(အ.စ)ဘက်မှစ၍ ၎င်း၏သမီးတော်များအား မိမိသားတော်များနှင့် ထိမ်းမြားပေးရန် ကမ်းလှမ်းလာခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၎င်းသည် မိမိ၏ သမိးတော်(၃)ပါးကို အလီ(အ.စ)သားတော်နှစ်ပါးဖြစ်သည့် ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့နှင့် သဘောတူခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်၌ အလွန်ငယ်သေးသည့်အရွယ်များဖြစ်သည့်အတွက် အရွယ်ရောက်သည်နှင့် ထိမ်းမြားပေးရန် သဘောသာတူခဲ့ပေမဲ့ ထိုအချိန်၌ မထိမ်းမြားပေးခဲ့ပါ။ ထို့အပြင် အေမာမ်ဟစန်သည် သူနှင့်ထိမ်းမြားရန် သဘောတူထားခဲ့သည်သူမနှင့် ထိမ်းမြားခွင့်မရရှိခဲ့ချေ။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ရိုဘားဘ်နှင့် ထိမ်းမြားခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အိုမရာ အနွယ်ဝင်တို့သည် အလီ(အ.စ)အုပ်ချုပ်နေသည့်ကာလအနှောင်းပိုင်းတွင် အလီ(အ.စ)ထံမှ အဆုံးအဖြတ်အမိန့်များကို ရယူရန်အတွက် အလီ(အ.စ)ထံသို့ အမြဲလာလေ့ရှိခဲ့ကြလေသည်။ ရိုဘားဘ် သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ အနှစ်သက်ဆုံးသော ဇနီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး အလီ(အ.စ)ရှဟီးဒ်မဖြစ်မီ အချိန်အထိ သူမ၌ သားသမီးမရှိခဲ့ချေ။ သို့သော် အလီ(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း၌ စကီနာသခင်မအား ဖွားမြင်ခဲ့လေသည်။ အချို့သော ကျမ်းများတွင် စကီနာသခင်မအပြင် အခြားသမီးတော်များဖြစ်သည် အာမေနာ စသည့်သမီးတော်များကို ဖွားမြင်ခဲ့လေသည်ဟု ရေးသားဖော်ပြထားလေသည်။ ထိုအတိုင်းပင် ရိုဘားဘ်သခင်မသည် အခြားသားတော်လေးတစ်ပါးဖြစ်သည့် အဘ်ဒုလ္လာဟ် အားမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့ ၎င်းသည် ကရ်ဘလာ၌ ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်ဂ(အ.စ)အား အဘာအဘ်ဒီလ္လာဟ်ဟု ခေါ်ခြင်းသည် ထိုသားတော်ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်ခြင်းဖြေစ်ပေသည်။ ရှီအာတို့၏အချို့သောကျမ်းများတွင် ပါရှိထားသည်မှာ ထိုသို့အဘ်ဒုလ္လာဟ်အား မွေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းအား အလီအစ္စဂရ်ဟု တွင်စေခဲ့သည်။ သို့သော် အီရာနီကာစွမ်စုံကျမ်းတွင် ၎င်းအကြောင်းအရာကို ခိုင်လုံမှုမရှိဟု သတ်မှတ်ထားလေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီး(သုံ့ပန်းအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း) ရိုဘားဘ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဗိမ္မာန်တော်တွင် နေ၍ အေမာမမ်(အ.စ)အပေါ်ငိုကြွေးနေခဲ့ပြီး အခြားသူများနှင့်လည်း ထပ်မံအိမ်ထောင်မပြုခဲ့ချေ။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ကဇွာအာဟ်မျိုးနွယ်မှ ဆလာကာဟ် ဆိုသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်လည်း ထိမ်းမြားခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားကြသော်လည် းသေးစိတ်ကို တိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ဆလာကာဟ် သခင်မသည် ဂျာအ်ဖရ်မည်သော သားတော်လေးတစ်ပါးအား ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သက်ရှိထင်ရှားရှိနေချိန်၌ပင် ဆုံးပါးသွားခဲ့လေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံတွင် အလီအမည်ရှိသော သားတော်နှစ်ပါးရှိခဲ့လေသည်။၎င်းနှစ်ပါးအတွင်းမှ တစ်ပါးသည် ရှီအာတို့၏လေးပါးမြောက်အေမာမ် ဇိုင်နွလ်အာဗေဒီန်း(အ,စ)ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကရ်ဘလာအခင်းတွင် ရှဟီးဒ်ပြုလုပ်ခြင်းမခံခဲ့ရပေ။ ကရ်ဘလာအခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် ၎င်း၏သက်တော်သည် ၂၃နှစ်ရှိခဲ့ပြီး သူသည် အေမာမ်အလီ(အ.စ)အုပ်ချုပ်နေစဉ်ခေတ်ကာလာတွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့လေသည်။ သူ၏မိခင်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ကျေးကျွန်မဖြစ်ပြီး သူမသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အေမာမ်(အ.စ)၏ကျေးကျွန်တစ်ဦးနှင့်ထိမ်းမြားခဲ့ပြီး အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေ ဇဘီးဒ်ကို မွေးဖွားခဲ့လေသည်။ အချို့သောစွန္နီကျမ်းများတွင် အေမာမ်ဇိုင်နွလ်အာဗေဒီးန်အား အလီအဇ်ဂရ်ဖြစ်၍ အလီ အမည်ရှိသော အခြားသားတော်တစ်ပါးမှ အလီအက္ကဘရ်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားလေသည်။ သို့သော် ရှေးခ်မိုဖီးဒ်နှင့် အခြားရှီအာပညာရှင်တို့သည် စွန္နီကျမ်းတွင်ပါရှိသော အကြောင်းအရာ၏ပြောင်းပြန်သည် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားလေသည်။ အလီအမည်ရှိသားတော်အကြီးသည် အေမာမ်ဇိုင်နွလ်အာဗေဒီးန်(အ.စ)ဖြစ်၍ သားတော်အငယ်မှာအလီအက္ကဘရ် ဖြစ်ပေသည်။၎င်းသည် ကရ်ဘလာ၌(၁၉)နှစ်သားအရွယ်ရှိခဲ့ပြီး ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ သူ၏မိခင်သည် အဘီမရ်ရာဟ်ဘင်န်အွရ်ဝါစကဖီဆိုသူ၏သမီးဖြစ်သူ လိုင်လာသခင်မပင်ဖြစ်လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အခြားဇနီးတော်တစ်ဦးမှာ မိုင်မွန်နာဖြစ်ပေသည်။.
အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးနောက်အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏သာဝကတစ်ဦးဖြစ်သည့် သွလ်ဟာ၏သမီးဖြစ်သူ အွမ်မေအီစ်ဟားက် နှင့် ထိမ်းမြားခဲ့ပြီး ဖှါတေမာအမည်ရှိ သမီးတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။ အီရာနီကာစွယ်စုံကျမ်းတွင်ရေးသားထားသည်မှာ ဖှါတေမာသည် စကီနာသခင်မထက် အသက်ငယ်ပေသည်။
မွစ်လင်(မ)တိုင်းသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အရိုက်အရာကို သိထားခဲ့ကြသည့်အတွက် အေမာမ်(အ.စ)အား ရိုသေကိုင်းရှိုင်းကြလေသည်။ သို့သော် ဘနီအိုမိုင်ယာအနွယ်ဝင်များသာလျှင် အေမာမ်(အ.စ)အား ယဇီးဒ်ကို လက်မခံသည့်အတွက် (باغی) ပုန်ကန်သူ ဟုသတ်မှတ်ပြောဆိုခဲ့ကြလေသည်။ ယင်းအုပ်စုသည် ယဇီးဒ်မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အားရှဟီးဒ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို မျက်ကွယ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီး ယဇီးဒ်ကိုအပြစ်မရှိသူ တစ်ဦးဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြလေသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်ရပ်တည်နေခဲ့သော အခြားအုပ်စုတစ်စုလည်းရှိနေပြန်သေးသည်။ ယင်းအုပ်စုသည် ဘနီအိုမိုင်ယာမျိုးနွယ်စုအား မုန်းတီးကြသလို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် ကရ်ဘလာတွင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူအားလုံးတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း သာသနာအတွက် ဟု မသတ်မှတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့သူများအားလုံးကိုလည်း မကောင်းမပြောကြချေ။၎င်းတို့သည် တိုင်းပြည်အတွင်း၌ အချင်းချင်းအကြားပြည်တွင်းစစ်ပွဲများ မဖြစ်ပွားရေးကို ရှေးရှု့၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် ယဇီးဒ်တို့အကြား မည်သူ့ဘက်မှ မပါပဲ နေခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အားရှဟီးဒ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်အပေါ် ဘနီအိုမိုင်ယာဘက်ပါသူတို့၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ရပ်တည်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အတွကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏မြေးတော်ဖြစ်သလို သူသည် မှန်ကန်သောလမ်းစဉ်၌ အသက်ကိုစတေးခဲ့သည့်အတွက် မွစ်လင်(မ)ထုကြီးတစ်ရပ်လုံးသည် သူ့အား ချစ်မြတ်နိုင်းပြီး ရိုသေကိုင်းရှိုင်းကြလေသည်။ သို့သော် ရှီအာတို့သည် အထက်ပါအချက်အလက်များအပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား မိမိ၏အေမာမ်အဖြစ်ခံယူကာ ရိုသေကိုင်းရှိုင်း အချစ်ထားကြသည်။ အဲဟ်လေစွန္နသ်တို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား အချစ်ထားကြသည့်အကြောင်းအရင်းများအတွင်းမှ အခြားတစ်ခုသည် အဘူမိုခန်နဖ်မှ ရေးသားပြုစုခဲ့သော ကရ်ဘလာနှင့်ပတ်သက်သည့် ရေဝါယသ် တော်များကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုရေဝါယသ်တော်များအတွင်းအချို့က ခိုင်လုံမှုရှိသလို အချို့ရေဝါယသ်တော်များသည် ခိုင်လုံမှုအားနည်းပေသည်။ ထိုရေဝါယသ်တော်များကို များသောအားဖြင့် ကူဖှာမြို့သားများမှ ဆင့်ပြန်ထားခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏လုပ်ရပ်များအပေါ်နောင်တ တရားရကာ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ကြလေသည်။ အလွန်မှပင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသော ကူဖှာသားတို့မှဆင့်ပြန်ထားသော ကရ်ဘလာ နှင့် ပတ်သက်သည့်ရေဝါယသ်တော်များကို အဘူမိုခန်နဖ်မှ ထပ်ဆင့်ရေးသားမှုကို လေ့လာမည်ဆိုပါက အဘူမိုခန်နဖ်သည် ရှီအာဘက်သို့ ယိမ်းသည့်သဘောဟန်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့နိုင်ပေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အဘူမိုခန်နဖ်၏ ရေးသားဆင့်ပြန်သော ရေဝါယသ်တော်များသည် ကရ်ဘလာအကြောင်း၏ ရင်းမြစ်ရေဝါယသ်တော်များဖြစ်လာခဲ့ပြီး အချို့က ၎င်း၏ရေဝါယသ်တော်များကို တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံမှ လာသည့် ရေဝါယသ်တော်များဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မွစ်လင်(မ)တို့အကြား ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ ရစူလ်ဂျာဖရီယာန်းဆိုသော သမိုင်းသုတေသီ တစ်ဦးဖြစ်သူမှ ရေးသားထားသည်မှာ မိုအာဝေယာသည် (جبر) ဂျဘ်ရ် (လူတွင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ အရာဟူသမျှကို အရှင်မြတ်မှလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်)ဟူသော ခံယူချက်ကို အစ္စလာမ်ထုကြီးအကြား သွတ်သွင်းလာခဲ့ပြီးနောက် ကရ်ဘလာတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရပ်တည်ခဲ့သည့် ရပ်တည်ချက်ကို အမှားတရားများကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ရပ်တည်သည့် ရပ်တည်ချက်ဟု သတ်မှတ်ယူဆခြင်းမရှိတော့ပဲ ကရ်ဘလာအကြောင်းအရာသည် ယဇီးဒ်အပေါ်ပုန်ကန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြောင်းအရာတစ်ခု အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခဲ့ကြလေသည်။ 
ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏မြေးတော်နှင့် အလီ(အ.စ)၏ သားတော်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အဲဟ်လေစွန္နသ်ပညာရှင်ကြီးများသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ဂုဏ်တော်အမျိုးမျိုးဖြင့် တမ်းတကာရေးသားခဲ့ကြလေသည်။ အဲဟ်လေစွန္နသ်ပညာရှင်အကျော်အမော် တစ်ဦးဖြစ်သည် အဲဟ်မဒ်အိဘ်နေဟမ်ဘလ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏အဆိုအမိန့်တစ်ခုအားဆင့်ပြန်ရေးသားထားသည်မှာ "ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ဂျန္နသ်သုခဘုံရှိလူငယ်များ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်"ဟု ဖြစ်လေသည်။ ထိုအတိုင်းပင် အလာအွဒ်ဒီန်းမိုသကီ ဟင်န်ဒီ ဆိုသူမှလည်း ကန်ဇွလ်အိုမာလ်ကျမ်းတွင် "ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာဟ်၏ရစူလ်တို့၏ ဂရုဏာသက်ရောက်မှုရရှိစေရန် အကြောင်းခံတစ်ခု ဟု သတ်မှတ်ဖော်ပြထားလေသည်။၎င်းအပြင် သူသည် ဂျန္နသ်သုခဘုံ၌ အမြဲနေရမည့်သူဟူ၍လည်းဖော်ပြထားကြသည်။ အိဘ်နေစဘားဂ် မာလကီးသည် အဲဟ်လေစွန္နသ် ပညာရှင်များအကြားတစ်ဦးဖြစ်သည်။၎င်းမှ ဆင့်ပြန်ထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် နမားဇ် ဝတ်ပြုနေသည့်အခါတွင် သူ၏ မျက်နှာတော်သည် (အရှင်မြတ်အပေါ်ထားသည့် ကြောက်စိတ်ကြောင့်)အဝါရောင်သို့ ပြောင်းသွားလေ့ရှိသည် ဟုဖြစ်သည်။ အိဘ်နေသိုင်မီယာဆိုသူမှလည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ရှဟီးဒ်ပြုလုပ်ခဲ့သူများအပေါ် လာအ်နသ်လုပ်ထားလေသည်။ အိဘ်နေခလ်ဒူးန်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ မွဂျ်သဟီးဒ်ဆဟာဘီ တစ်ပါးအဖြစ် ရေးသားဖော်ပြထားပြီး ယဇီးဒ်ကို တော်လှန်ရာတွင် အမှန်ကန်ဆုံးသော ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံပြောဆိုထားလေသည်။တမ်းပလိတ်:مدرک
(၁၂)ပါးသော အေမာမ်များကိုလက်ခံထားသော ရှီအာများ၊ အစ်မာအီလီယာရှီအာနှင့် ဇိုင်ဒီယာရှီအာတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား အချစ်ထားရသည့်အကြောင်းအရင်းများအတွင်းမှ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ခေါင်းဆောင်(အေမာမ်)တွင်ရှိသင့်သော အချက်များရှိခြင်းနှင့် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှ ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော မိမိတို့၏ခေါင်းဆောင်(အေမာမ်)ဖြစ်သည့်အတွက်ပင်ဖြစ်လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အခြားသော အေမာမ်များနည်းတူ ဖန်ဆင်းခံလူသားတို့နှင့် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်တို့အကြား အကြောင်းခံတစ်ခုဖြစ်လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား(وسیله) ထား အကြောင်းခံခြင်းဖြင့် လမ်းမှန်ကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သလို မြောက်များစွာသော အခက်အခဲများမှလည်း လွတ်မြောက်နိုင်လေသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့် အခြားသော အေမာမ်(အ.စ)တို့၏ အဆိုအမိန့်များအရ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ဗိမ္မာန်သို့သွားရောက်ဖူးမြှော်ခြင်းအတွက် များစွာသော အကျိုး(စဝါးဘ်)တို့ကို ရရှိမှာ ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသလို ထိုဗိမ္မာန်တည်ရှိရာနေရာ၏ မြေကြီးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ထွဋ်မြတ်မှုများအကြောင်း အဆိုအမိန့်များရှိနေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ခြုံစောင်အောက်မှ ငါးပါးသောသူတို့အတွင်းမှ တစ်ပါးဖြစ်ပြီး အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှ ချီးမြှင့်သော ဂုဏ်များကို ပိုင်ဆိုင်သူလည်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့မှတစ်ပါး သူသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏မြေးတော်ဖြစ်သည့်အတွက် ရိုသေကိုင်းရှိုင်းထိုက်သူလည်းဖြစ်သည်။ သက္ကဝါ တရားနှင့်လည်း အစွန်းကုန်ပြည့်စုံ၍ (၂၅)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဟဂျ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် မဒီနာမှ မက္ကာသို့ ခြေကျင်လမ်းလျှောက်ခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင် နေ့စဉ် ရကားသ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ နမားဇ်ဝတ်ပြုလေ့ရှိသည်။ဤအကြောင်းအရာများသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ထွဋ်မြတ်မှုအပေါ်သက်သေထူနေပေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အခြားသော ထူးခြားသည့်ဂုဏ်တော်မှာ ရက်ရောခြင်း(စခါဝသ်)ပင်ဖြစ်လေသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အဖြစ်အပျက်များစွာရှိထားလေသည်။၎င်းအပြင် (ဟိလ်မ်)ခံသီးတရားရှိခြင်း၊(သဝါဇို့အ်)ရိုကျိုးခြင်းနှင့် (ဖှဆွာဟသ်)တည်းဟူသော အာဝဇ္ဇန်းရွှင်ခြင်းတို့ဖြစ်လေသည်။(အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံမှ အဓိပ္ပာယ်နက်ရှိုင်းလှသော ဩဝါဒများနှင့် ကဗျာအလင်္ကာများစွာကို ကျမ်းများတွင်ဖော်ပြထားလေသည်)ဤသို့သော် အကြောင်းအရင်းများကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)သည် သေခြင်းတရားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလျဉ်းတုန်လှုပ်မှုမရှိခဲ့ချေ။ ထို့အပြင် သိက္ခာမဲ့စွာဖြင့်ရှင်သန်ခြင်းနှင့် မာနထောင်လွှား၍ရှင်သန်ခြင်းကို အလွန်ရွံရှာခဲ့သည်။ ယင်းအကြောင်းအရင်းများအပြင် ရှီအာတို့၏ရင်းမြစ်ကျမ်းများတွင် ဖော်ပြချက်များအရ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)သည် မိမိကိုယ်ကိုစတေး၍ သာသနာကို ကယ်တင်ခဲ့သည့်အချက်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ပိုမိုအချက်ထားရသည့်အချက်ပင်ဖြစ်လေသည်။ ရှီအာတို့၏ခံယူချက်တွင် အေမာမ်ဟူသည် အတိတ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာများနှင့်အနာဂတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်မည့်အကြောင်းအရာများကို အကြွင်းမဲ့သိရမည်ဖြစ်သည်။၎င်းအပြင် အေမာမ်(အ.စ)၏ပညာသည် အချိန်ကာလကြာမြင့်သည်နှင့် တိုးလာခြင်း(သို့)လျှော့နည်းသွားခြင်းမရှိပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိနှင့် မိမိဘက်တော်သားတို့ရင်ဆိုင်ရမည့်အကြောင်းအရင်းများကို ကြိုတင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့သိထားပါလျှက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မက္ကာမှ ကူဖှာဘက်သို့ ထိန့်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းအလျဉ်းမရှိပဲ ထွက်လာခဲ့လေသည်။ မည်သို့သောအခါမျှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန် မကြိုးစားခဲ့ပေ။ သဒီးတော်တစ်ပုဒ်၌ ဖော်ပြထားလေသည်မှာ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား အလ္လာဟ်လမ်းစဉ်တွင် မိမိကိုယ်ကို စတေးရန်လိုလားပါသလား(သို့) ဘဒရ်စစ်ပွဲတွင် ကောင်းကင်တမန်မလာအေကာများကို ကူညီရန်စေလွှတ်ခဲ့သလို ကောင်းကင်တမန်ပေါင်း(၄၀၀၀)အား စေလွှတ်၍ အိဘ်နေဇေယားဒ်အပေါ် အောင်နိုင်မှုကိုလိုလားပါသလား ဟုမေးခဲ့လေရာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ ပထမအချက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့လေသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဂုဏ်အင်္ဂါအရိုက်အရာကို ပိုမိုတိုးသွားစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကရ်ဘလာတွင် ကောင်းကင်တမန်မလာအေကာတို့၏ အကူအညီကို မယူပဲ မိမိကိုယ်ကို အစ္စလာမ့်အတွက် စတေးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ထိုကောင်းကင်တမန်အပါး(၄၀၀၀)သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကယာမသ်နေ့ထိတိုင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ဗိမ္မာန်၌ ငိုကြွေးကာ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုများပြုလုပ်လျက် ရှိပြီး ဗိမ္မာန်တော်သို့ လာသမျှသူအားလုံးအတွက်လည်း ခွင့်လွှတ်ပလပ်မှု ရရှိစေရန် ဆုမွန်တောင်းခံပေးလျက် ရှိနေသည်။ ရှီအာတို့၏ကျမ်းတွင် ထိုသို့စတေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရေးသားထားသည်မှာ "အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် အသက်ကို အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ယူဆောင်လာသော သာသနာတော်ကြီး အဒွန့်ရှည်စေရန်အတွက်နှင့် ယဇီးဒ်၏လုပ်ရပ်များကြောင့် သာသနာတော်ကြီးပျက်စီးသွားသည်များကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက်ဤသို့စတေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်"ဟု ဖြစ်လေသည်။၎င်းအပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် "မိုနာဖှိက်"(အယောင်ဆောင်)လုပ်ရပ်သည် အလွန်မှပင်ရှက်ဖွယ်ရာကောင်းသော လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာသိအောင်ကြေညာခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင် ညစ်ညမ်းသော အုပ်ချုပ်သူအပေါ်တော်လှန်ရမည်မှာ အားလုံး၏တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း အများကို သွန်သင်ပြသပေးခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုံး၍ ဆိုရသော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မွစ်လင်(မ)လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ စံနမူနာကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ လာရာဝကြာ၀လီရီဆိုသူမှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိ၏သွေးကျ၍ လူသားတို့၏ အပြစ်များကို ထိုသွေးဖြင့်ဆေးပေးခဲ့သည်၊ မိမိအသက်ကို စတေး၍ ရပိုင်ခွင့်ကို မည်သို့တောင်းခံရမည်ကိုလည်း အများသိအောင် ပြသပေးခဲ့သည် ဟု ခံယူထားလေသည်။ဤသို့ခံယူချက်သည် ရှီအာတို့၏ အယူဆများနှင့် ကွဲပြားမှုများရှိနေပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကဲ့သို့ခံယူချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်ကျမ်းများအတွင်း၌ ဖော်ပြထားခြင်းကို မတွေ့ရပါ။ သို့သော် ထိုခံယူချက်သည် နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ရှီအာတို့၏ ပူဆွေးဝမ်းနည်းပွဲအခမ်းအနားများအတွင်းသို့ သွတ်သွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ ထိုသို့ခံယူချက်သည် ခရစ်ယာန်တို့၏ အတွေးအခေါ်များသာဖြစ်ပေသည်။
အေမာဒီဟာဟေရီသည် ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ့်စွယ်စုံကျမ်းတွင်ရေးသားထားသည်မှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏မိန့်ကြားချက်အရ အလီ၊ဟစန်၊ဟိုစိုင်န်းနှင့် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဆင်းသက်သော ကျန်အေမာမ်(အ.စ)(၉)ပါးတို့သည် မြင့်မြတ်သော အရိုက်အရာများရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်ဟု ဖြစ်သည်။ အိဘ်နေဘာဘေဝိုင်ဟ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အဆက်အနွယ်မှ အေမာမ်(၉)ပါးဆင်းသက်ခဲ့ပြီး ထိုအဆက်အနွယ်သည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)မှ မဟုတ်ကြောင်းကို မူစာ(အ.စ)နှင့် ဟာရူန်(အ.စ)တို့၏ ဖြစ်စဉ်နှင့် ခိုင်းနှိုင်းပြီး ပြောဆိုထားလေသည်။ ထို့အပြင် ဟာအေရီသည်ရေးသားသည်မှာ ရှီအာတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ,စ)၏အေမာမသ်ကို သက်သေထူရန်အတွက် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိနောက်ပိုင်း အေမာမ်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ဆိုမှုများနှင့် အေမာမ်ဟစန်(အ,စ)မှ မိုဟမ္မဒ်ဟနဖီယာအား မိမိနောက်ပိုင်းတွင် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ အဆိုအမိန့်များကို နာခံရန်မှာကြားမှုများကို ကိုးကား၍ အထောက်အထားပြုခဲ့လေသည်။ ဆက်လက်၍ ၎င်းသူမှ ခံယူထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အေမာမသ်သည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှ စခဲ့သည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိုအာဝေယာ လက်ထက်တွင် မည်သို့သော ထကြွမှုမှ မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။(အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိမိ၏နောင်တော်သည် မိုအာဝေယာနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်ကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်ပေသည်) သို့သော် မိုအာဝေယာသေဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မိမိ၏အေမာမသ်ကို ထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြခဲ့လေသည် ဟု ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းမှ ရေဝါယသ်တော်တစ်ခုအား မီးမောင်းထိုးပြ၍ ရှီအာတို့၏ခံယူချက်ကို တင်ပြထားသည်မှာ အလီ(အ.စ)သည် မိမိ၏နောက်ပိုင်း၌ ဟစန်(အ.စ)နှင့် ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)တို့ကို ကိုရိုင်းရှ်တို့မှ ပညာမဲ့များဟု မသတ်မှတ်ရစေရန်အတွက် သားတော်နှစ်ပါးအား လူထုအကြား မိန့်ခွန်းများ မြွက်ကြားစေခဲ့လေသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ အေမာမသ်နှင့်ပတ်သက်၍ အလီ(အ,စ)သည် မိမိလက်ထက်ကတည်းမှ မီးမောင်းထိုးပြထားခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပေသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည်ကား အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အေမာမသ်အတွက် သက်သေတစ်ခုပင်ဖြစ်လေသည်။ ထို့အပြင် ဟာအေရီသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကိစ္စများ၌ (ဆွဟာဘာ)သာဝကတို့၏ ပြောကြားချက်များကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ လူတို့သည် အကြောင်းကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖတ်သဝါမသိနားမလည်ပါက အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံ ဖတ်သဝါလာရောက်မေးမြန်းမှုများကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း မိမိသည်အေမာမ်ဖြစ်ကြောင်းကို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ကိုယ်၌ နုတ်တော်မှ မိန့်ဆိုပြောကြားမှုများကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း ၊ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ မောအ်ဂျေဇာနှင့် ကရာမသ်(သာမန်လူသားအဆင့်ထက်ကျော်လွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ)ကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) စစ်မှန်သော အေမာမ်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း ရှီအာတို့၏ရှု့ထောင့်မှ ရပ်တည်ကာ သက်သေထူထားလေသည်။ အချို့ရေဝါယသ်တော်များတွင် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့၏ မော့ဂျဇာနှင့် ကရာမသ် တို့သည် တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်နေသည်မှာ မည်သူမျှမခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပေ။
ရှီအာတို့အကြားအကျော်အမော သဖ်စီးရ်ပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဆယိဒ်မိုဟမ္မဒ်ဟိုစိုင်းန်သွဘာသွဘာအီးသည် စွန္နီနှင့်ရှီအာတို့၏ ကျမ်းများအတွင်းမှ ရေဝါယသ်တော်များကို တင်ပြကာ အလီနှင့်သခင်မကြီးဖှါတေမာ(အ.စ)တို့၏ကလေးများနာမကျန်းဖြစ်နေချိန်တွင် ကလေးငယ်များပြန်လည်ကျန်းမာလာစေရန် အဓိဌာန်ပြုလုပ်မှုအပေါ်အရှင်မြတ်ဘက်မှ နှစ်သက်တော်မူခဲ့သည့်အတွက် အထက်ပါစူရာအား ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ချပေးခဲ့ကြောင်း သက်သေထူထားလေသည်။ ထိုပညာရှင်ကြီးသည် စူရာများအစီအစဉ်ကျရောက်လာပုံ၊အာယသ်တော်တို့၏ဆိုလိုရင်းနှင့်ထိုစူရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး လာရှိထားသော ရေဝါယသ်တော်များကိုပါ ထောက်ရှု့၍ ယင်းစူရာကို မဒနီ(မဒီနာမြို့တွင်ကျရောက်သောစူရာ)ဟု ယူဆထားလေသည်။ ထို့အပြင် အသားအရေမဲသော အမျိုးသားတစ်ဦးသည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)လာရောက် စကားပြောခဲ့လေသည်...ထိုစူရာသည် ထိုအမျိုးသားနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျရောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုထားသော အဲဟ်လေစွန္နသ်တို့မှဆင့်ပြန်ထားသော အချို့ရေဝါယသ်တော်များကို လေ့လာစမ်းစစ်၍ မဟုတ်မှန်ကြောင်းကို ဖော်ပြပြီးလျှင် အထက်ပါ စူရာသည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)တို့နှင့်သာ ပတ်သက်ပြီးကျရောက်လာခဲ့ကြောင်းကိုရေးသားထားလေသည်။
အဲဟ်လေစွန္နသ်အကျော်အမောပညာရှင်များအတွင်းမှ ရှဟာဘွဒ်ဒီးန်အာလူစီသည် ရူးဟွလ်မအာနီကျမ်းတွင် အခြားသူများတင်ပြထားသော ရေဝါယသ်တော်များနှင့် သဖ်စီရ်များကို တင်ပြလျှက် အထက်ပါစူရာသည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုထားလေသည်။၎င်းသည် သီရ်မီဇီ၊ အိဘ်နေဂျောင်ဇီတို့၏အဆိုများနှင့် အာယသ်၏ အပေါ်ယံအဓိပ္ပာယ်တို့အား ကြည့်ခြင်းဖြင့် ထိုစူရာသည်မဒနီဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေပါသည်။ ထိုသို့မဒီနီဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းအပေါ် သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် အေမာမ်အလီ(အ.စ)သားသမီးများတို့သည် မဒီနာမြို့တွင် ဖွားမြင်တော်မူသူများဖြစ်ကြပြီး ထိုစူရာသည်လည်း ထိုသူတို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ပြောဆိုထားလေသည်။ ထို့အပြင် ထိုအကြောင်းအရာသည် အာယသ်တော်များ၏ အပေါ်ယံအဓိပ္ပာယ်နှင့်လည်း ဆန့်ကျင်နေမှုမရှိကြောင်း တင်ပြထားလေသည်။ ဖခ်ရေရာဇီသည် သဖ်စီးရ်-ရေ-ကဘီးရ်အမည်ရှိ မိမိ၏သဖ်စီးရ်ကျမ်း၌ သခင်မကြီးဖှါတေမာ(စ.အ)၏ကလေးများ နာမကျန်းဖြစ်သည့် အကြောင်းအရာကို ဇမခ်ရှရီဆိုသူသော သဖ်စီးရ်ပညာရှင်ကြီး၏ ကရှ်ရှားဖ်ကျမ်းမှလည်ကောင်း ၊ ဝါဟေဒီဆိုသူ၏ အလ်ဘစီးသ် ကျမ်းမှလည်းကောင်း ဆင့်ပြန်တင်ပြထားပြီးနောက် ယင်းအာယသ်တော်များသည် အလီနှင့် ဖှါတေမာ(စ.အ)တို့၏ကလေးများအပြင် ဆွဟာဘာများနှင့် သာဘေအီးန်(ဆွဟာဘာနောက်လိုက်များ)အတွင်းမှ မြင့်မြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ကြောင်းပြောဆိုရေးသားထားလေသည်။
ရှီအာတို့အတွင်းမှ သဖ်စီးရ်ပညာရှင် ဆယိဒ်မိုဟမ္မဒ်ဟိုစိုင်းန်သွဘာသွဘာအီးသည် မိုဘာဟေလာဖြစ်စဉ်အား အစ္စလာမ်၏အစောပိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများအတွင်းမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အပါအဝင် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)တို့နှင့် နဂျရားန်ဒေသရှိ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများအကြား ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားလေသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်တွင် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများမှ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံမှ မိမိသည် အရှင်မြတ်ဘက်မှ စစ်မှန်သော တမန်တော်ဟူက သက်သေပေးရန် တောင်းခံလာခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့်နောက်ဆုံးတွင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ဘက်မှ မိုဘာဟေလာ(အပြန်အလှန်လာအ်နသ်လုပ်ခြင်း)လုပ်မည်ဟု ချိန်းဆိုခဲ့လေသည်။ နှစ်ဘက်လုံးမှ မိုဘာဟေလာပြုလုပ်ရန်အတွက် ကွင်းပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အတူ အလီ(အ.စ)၊ဖှါတေမာသခင်မကြီး(စ.အ)၊ဟစန်(အ.စ)နှင့် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့ပါလာသည်ကို ထိုဘုန်းတော်ကြီးများ မြင်တွေ့လိုက်ရသည့်အခါတွင် ထိုသူတို့နှင့်မိုဘာဟေလာပြုလုပ်မည်ဆိုပါက မိမိတို့သည် အသက်ချမ်းသာစွာဖြင့် အိမ်ပြန်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်းကို သိလိုက်ကြလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)သည် မိမိ၏မိသားစုနှင့်အတူ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့် တည်ငြိမ်စွာမိုဘာဟေလာကွင်းပြင်သို့လာရောက်နေသည်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည့်အတွက်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ရူးဟ်ဟွလ်မအာနီ သဖ်စီးရ်ကျမ်းတွင်လည်း ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများဘက်မှ သက်သေတောင်းခံမှုများအကြောင်းနှင့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ဘက်မှ မိုဘာဟေလာလုပ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအကြောင်းကို တင်ပြပြီးနောက် မိုဘာဟေလာအာယသ်တော်တွင် ပါဝင်သူများမှာ အလီ(အ.စ)၊ဖှါတေမာ(စ.အ)၊ဟစန်(အ.စ)နှင့် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့သာဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားလေသည်။ ဆက်လက်၍ရေးသားထားသည်မှာ ထိုအကြောင်းအရာသည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)တို့၏ မြင့်မြတ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ပေသည်ဟု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အဲဟ်လေစွန္နသ်တို့၏ သဖ်စီးရ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဖက်ခ်ရေရာဇီသည် မိမိ၏ သဖ်စီးရ်-ရေ-ကဘီးရ် အမည်ရှိသော သဖ်စီးရ်ကျမ်းတွင်လည်းကောင်း၊ဘိုင်ဒွာဝီဆိုသူသည် မိမိ၏ အန်ဝါးရ်ရွလ်သန်ဇီးလ်ကျမ်းတွင်လည်းကောင်း၊ မဟလ္လီနှင့် စိုယူတီသည် မိမိတို့၏ သဖ်စီးရ်-ရေ-ဂျလာလိုင်းန်ကျမ်း၌လည်းကောင်း၊ အိဘ်နေကစီးရ်သည် သဖ်စီးရ်-ရေ-ကုရ်အာန်နီလ်အဇွမ်းကျမ်း၌လည်းကောင်း၊အိဘ်နေအသွီယာအန်ဒလိုစီသည် အလ်မိုဟရရွလ်ဝဂျီးရ်ကျမ်းတွင် မိုဘာဟေလာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများသည် အလီ၊ဖှါတေမာ၊ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်း(အ.စ)တို့ဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားကြလေသည်။
အလ္လာမာသွဘာသွာအီသည် မိမိ၏သဖ်စီးရ်းရွလ်မီဇာန်ကျမ်းတွင် အထက်ပါအာယသ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြီးပြည့်စုံသော အကြောင်းအရာတစ်ခုအား ရေးသားတင်ပြထားခဲ့လေသည်။ဤအာယသ်တော်၏ဆိုလိုရင်းသည် ခြုံလွှာအောက်တွင် ရှိခွင့်ရခဲ့သော တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၊အလီ၊ဖှာတေမာ၊ဟစန်၊ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့သာဖြစ်လေသည်။ ထိုအကြောင်းအရာအပေါ်ထောက်ခံပေးထားသော ဟဒီးတော်ပေါင်း(၇၀)ကျော်ရှိပြီး ထိုဟဒီးစ်တော်များသည် များသောအားဖြင့်အဲဟ်လေစွန္နသ်တို့မှ ဆင့်ပြန်ထားသော ဟဒီးစ်တော်များပင်ဖြစ်လေသည်။ အဲဟ်လေစွန္နသ်တို့အကြား၎င်းဟဒီးစ်တော်အား ဆင့်ပြန်သောသူတို့မှာ အွမ္မေစလ်မာ၊အာယေရှာ၊အဘူစအီးဒ်ခဒ်ရီ၊စအ်ဒ်၊ဝါစေလာဟ်အိဘ်နေအစ်ကာအ်၊အဘီဟမ်ရာအ်၊အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်၊တမန်တော်မြတ်(ဆွ)လွပ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့သော စောင်ဝ်ဘားန်အမည်ရှိကျေးကျွန်၊အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်၊အလီအိဘ်နေအဘီသွာလီဘ်(အ.စ)နှင့် ဟစန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)တို့ဖြစ်လေသည်။ ယင်းဟဒီးစ်တော်အား ပုံစံပေါင်း(၄၀)နီးပါးဖြင့်ဆင့်ပြန်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ရှီအာတို့အကြား ဆင့်ပြန်ထားသော ရာဝီ(ရေဝါယသ်ဆင့်ပြန်သူ)များမှာ-အလီအိဘ်နေအဘီသွာလီဘ်(အ.စ)၊အလီအိဘ်နေဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၊ဘာကီရ်(အ.စ)၊ဂျာအ်ဖရ်ဆွာဒီက်(အ.စ)၊အလီအိဘ်နေမူစရ်ရေဒွာ(အ.စ)၊အွမ္မေစလ်မာ၊အဘူဇရ်၊အဘီလိုင်လာ၊အဘူအစ်ဝဒ်-ဒေ-ဒိုဝလ္လီ၊အမ်ရ်အိဘ်နေမိုင်မိုနာအောင်ဝဒီနှင့်စအ်အိဘ်နေအဘီဝကားစ်တို့ဖြစ်ကြလေသည်။ ရှီအာတို့အကြားတွင် ပုံစံပေါင်း(၃၀)ကျော်ဖြင့် ဆင့်ပြန်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပေသည်။ အာလူစီသည် မိမိ၏တင်ပြမှုတွင် ၎င်းအာယသ်တော်၏ ဆိုလိုရင်းသည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)ဖြစ်ကြောင်းကို ရေဝါယသ်အမျိုးမျိုးဖြင့် သက်သေထူတင်ပြပြီးနောက် ဟဒီးစ်-စေ-ကေဆာကို ထပ်မံမီးမောင်းထိုးတင်ပြပေးခဲ့သည်။၎င်းအပြင် သူသည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)အား ခြုံလွှာအောက်တွင် ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့သူများဟု ဖော်ပြထားလေသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်သည် အလွန်မှပင်သန့်စင်ပြီးအပြစ်မလုပ်သူများဟု ရှီအာတို့မှ ယုံကြည်ထားမှုကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)သည် အပြစ်ကင်းစင်သူမဟုတ်ကြောင်းကို တပါတည်းဆက်လက်ဖော်ပြသွားခဲ့လေသည်။၎င်းသည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ,စ)တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကနဦးကတည်းမှ အပြစ်မလုပ်သူဟူ၍ မယူဆထားပေ။ သွဘရီသည် ဂျာမေအွလ်ဘယားန်ဟူသည့် မိမိကျမ်းတွင် ဟဒီးစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို ရေးသားတင်ပြထား၍ ၎င်းအာယသ်တော်သည် အလီ၊ဖှာတေမာ၊ဟစန်၊ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့နှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားလေသည်။ ထို့အပြင် အဲဟ်လေဘိုင်းဟူသည်မှာလည်းထို ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်ဟု ဆိုထားလေသည်။ ဘိုင်ဒွာဝီသည် အန်ဝါးရွလ်သန်ဇီးလ်ကျမ်းတွင် ဆိုထားလေသည်မှာ ရှီအာတို့သည် အလီနှင့်ဖှာတေမာ(အ.စ)တို့အပြင်၎င်းတို့၏သားတော်နှစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်ကြောင်းကို ဤအာယသ်တော်အား သက်သေပြု၍ ဖော်ထုတ်တင်ပြကြလေသည်။ သို့သော် ယင်းအာယသ်တော်မတိုင်မီအာယသ်တော်နှင့် ယင်းအာယသ်တော်ပြီးနောက် လာသောအာယသ်တော်များကို ထောက်ရှု့ကြည့်မည်ဆိုပါက ၎င်းတို၏တင်ပြ အထောက်အထားပေးမှုသည် ခိုင်လုံမှုမရှိကြောင်းပေါ်လွင်နေပါသည်။ ထို့အပြင် ဟဒီးစ်တော်များသည်လည်း ၎င်းသူတို့သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏အနွယ်တော်များဖြစ်ကြောင်းကိုသာ သက်သေထူနေပါသည်ဟု ဖြစ်သည်။ ဖက်ခ်-ရေ-ရာဇီသည် မိမိ၏သဖ်စီးရ်-ရေ-ကဘီးရ်ကျမ်းတွင် ယင်းအာယသ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)သည် မည်သူမည်ဝါတို့ဖြစ်သည်ကို အမြင်အမျိုးမျိုးဖော်ပြထားကြလေသည်။ သို့သော် ခိုင်လုံမှုရှိသော အမြင်မှာ အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)ဟူသည်မှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏သားသမီးများ၊ဖှာတေမာ(စ.အ)၊အလီ(အ.စ)၊ဟစန်(အ.စ)၊ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၏ကြင်ယာတော်များသာဖြစ်ပေသည် ဟုရေးသားထားလေသည်။ အိဘ်နေကစီးရ်သည် အလ်ကုရ်အာန်နီလ်အဇီးမ်သဖ်စီးရ်ကျမ်းတွင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သခင်မကြီးဖှာတေမာ(စ.အ)အိမ်တော်သို့ (၆)လတိတိ နမားဇ်ပြီးတိုင်းသွားရောက်ကာ စလာမ်ဆိုပြီး နမားဇ်အတွက် ဖိတ်ခေါ်သည့် ရေဝါယသ်တော်အပြင် ဟဒီးစ်-စေ-ကေစာကိုပါ ဆင့်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပေသည်။ အိဘ်နေအသွီယာသည် မိုဟရ်ရီလ်လွလ်ဝဂျီးဟ်ကျမ်းတွင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ဟဒီးတော်တစ်ပုဒ်ကို ဆင့်ပြန်ပြီးနောက် ယင်းအာယသ်တော်သည် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၊အလီ၊ဖှာတေမာ၊ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျရောက်ခဲ့သော အာယသ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ရေးသားထားလေသည်။ မာတိုရီဒီသည် သာအ်ဝီလားသ်သွလ်အဲဟ်လေစွန္နသ်ကျမ်းတွင် ရှီအာတို့သည် ဟဒီးစ်-စေ-ကေဆာကို အထောက်အထားပြု၍ ယင်းအာယသ်တော်သည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ) အလီ၊ဖှာတေမာ၊ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျရောက်သည်ဟု ယူဆထားကြလေသည်ဟု ဖော်ပြထားလေသည်။
အလ်မီဇာန်းသဖ်စီးရ်ကျမ်းတွင် စူရာ-ယေ-ရှူရာ မုက္ခပတ်တော်၂၃နှင့်ပတ်သက်ပြီး«مَوَدَّتِ قُربیٰ»، ဟူသော အဓိပ္ပာယ်သည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အလီ၊ဖှါတေမာ၊ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်းန်)(အ.စ)တို့သာဖြစ်ကြောင်းကို စမ်းစစ်လေ့လာကာ သဖ်စီးရ်ပညာရှင်အသီးသီးတို့မှ မိမိတို့၏အမြင်များကို သဖ်စီးရ်ပြုတင်ပြထားမှုကို တင်ပြရင်း ထိုအကြောင်းအရာအပေါ်မီးမောင်းထိုးပြထားသော အဲဟ်လေစွန္နသ်တို့၏ရေဝါယသ်တော်များအပြင် ရှီအာတို့၏ရေဝါယသ်တော်များကိုပါ ရေးသားထားလေသည်။ အာလူစီသည် ယင်းအာယသ်တော်ကို သဖ်စီးရ်ပြုလုပ်ရာတွင် အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်မှ ဆင့်ပြန်ခဲ့သော ရေဝါယသ်တော်တစ်ခုအားတင်ပြခဲ့သည်မှာ - «قُربیٰ» သည်မည်သူတို့ဖြစ်သနည်းဟု တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အား မေးခဲ့ရာ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)မှ အလီ၊ဖှာတေမာ၊ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)တို့ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ သုဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အာလူစီသည် ရှာမ်မြို့မှ လူတစ်ဦးသည် အလီအိဘ်နေဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့သည့်အခါ အလီအိဘ်နေဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ ယင်းအာယသ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇာယ်ခဲ့ပြီး အထောက်အထားပြုခဲ့ကြောင်းကိုပါ ရေးသားထားသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းမှ ယင်းအာယသ်တော်သည် အဲဟ်လေဘိုင်း(အ.စ)တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျရောက်ခဲ့သည်ဟု သက်သေပေးထားသော ဟဒီးစ်တော်ပေါင်းများစွာရှိနေကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ကိုရေတွက်၍ပင်မရနိုင်လောက်အောင်များပြားကြောင်း ဆိုထားလေသည်။ ထို့နောက် ယင်းအာယသ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားနိဂုံးချုပ်ရာတွင် ဟဒီးစ်-စေ-စဖီနာ ကိုရေးသားကာနိဂုံးချုပ်ခဲ့လေသည်။ တဘက်မှလည်းရူးဟ်ဟွလ်မအာနီကျမ်းတွင် ယင်းအာယသ်တော်အား အကိုးအကားပြုကာ အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)သည်သာ အေမာမ်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှီအာတို့မှ ဖော်ထုတ်ထားမှုကို ငြင်းဆိုဆန့်ကျင်ပြီး ရေးသားထားသည်မှာ ယင်းအာယသ်တော်သည် အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)တို့အပေါ်အချစ်ထားဖို့ရန်သာ မိန့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏အမိန့်ကို လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိကြောင်း ဖော်ကျူးထားခြင်းမရှိပါ။ သုဖြစ်လေသည်။ သွဘရီသည် ဂျမေအွလ်ဘယားန်ကျမ်းတွင် ဤအာယသ်တော်အားသဖ်စီးရ်ပြုလုပ်ရာတွင် «قُربیٰ»နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးကို တင်ပြကာ ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ဆွေမျိုးတော်များဟု ရေးသားထားလေသည်။ ဖက်ခ်ရေရာဇီသည် သဖ်စီးရ်ကဘီးရ်ကျမ်းတွင် ဇမခ်ရှရီ၏သဖ်စီးရ်-ရေ-ကရှားဖ်တွင် တင်ပြထားမှုအတိုင်းရေးသားထားလေသည်။ အိဘ်နေအသွီယာသည်လည်း အလ်မိုဟ်ရရုလ်ဝဂျီးဇ်ကျမ်းတွင် ရေးသားထားသည်မှာ «قُربیٰ»သည်မည်သူတို့နည်းဟု တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားမေးခဲ့ကြရာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)မှ «قُربیٰ»ဟူသည့်ဝေါဟာရ၏ဆိုလိုရင်းသည် အလီ၊ဖှာတေမာ၊ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)တို့ဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားတော်မူခဲ့လေသည်ဟုဖြစ်သည်။ အိဘ်နေကစီးရ်သည် အလ်ကုရ်အာန်နီလ်အဇီးမ်သဖ်စီးရ်ကျမ်းတွင် အလီအိဘ်နေဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အားဒမစ်ကစ်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ် «قربیٰ» နှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သူတို့ဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်းလာမှုကို အလီအိဘ်နေဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာကိုရေးသားထားလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ကြံမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုရ်အာန်နှင့်ဟဒီးတော်တို့မှ ကြိုတင်၍မိန့်ဆိုထားမှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
စူရာ-ယေ-အဲဟ်ကားက် မုက္ခပတ်တော်(၁၄)နှင့်(၁၅)တို့တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ မိန့်ဆိုထားမှုသည် သခင်မကြီးဖှာတေမာ(အ.စ) အားရည်ညွှန်း ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကလေးသည်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားလေသည်။ အလ္လာဟိုအရှင် မြတ် သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အား မိမိ၏မြေးတော်၏ ကြံမ္မာတရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သ တင်းပေးမိန့်ကြားသည့်အခါ တမန်တော်ြမတ်ကြီးသည် ထိုအကြောင်းအရာကို သမီးတော် ဖှါတေမာ(စ.အ)အား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ သမီးတော်(စ.အ)သည် လွန် စွာပင် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့လေသည်။ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် ဟဇ်ရသ်ဇကရီယာ(အ.စ) အား ငါးပါးသောသူတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး သွန်သင်ခဲ့ရာတွင် စူရာယေမရ်ယမ်၏ ပထမဦးဆုံးသော (کهیعص) မုက္ခပတ်တော်ကိုလည်း သွန်သင်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းအာယသ်တော်၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့လေသည်။ ( ک)၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ကရ်ဘလာ၊ (ه)၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ပျက်သုဉ်းခြင်း၊ (ی)သည် ယဇီးဒ်၊(ع)သည် ရေဆာလောင်မှု နှင့် (ص) သည် ခံသီးတရားဟူ၍ သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့လေသည်။ အထက်ပါအကြောင်းအရာကို အားလုံးသော သဖ်စီရ်ပညာရှင်(ဋီကာဖွဲ့သောပညာရှင်)များမှ လက်ခံထားကြသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ဟဇ်ရသ်-သေ-ယာဟ်ယာ(အ.စ)နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့အကြား ရှဟီးဒ်ဖြစ်ပုံချင်းအလွန်တူညီမှုရှိနေကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပေသည်။(တူညီမှုများအတွင်းမှ တစ်ခုအနေဖြင့်တင်ပြရသော် နှစ်ပါးလုံးသည် ဦးခေါင်းဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းကို လင်ပန်းထဲသို့ ထည့်ခဲ့ကြလေသည်။ ဗြာဒိတ်တော်များကို ပင့်ဆောင်ပို့ချပေးသော ဂျီဘ်ရာအီလ်သည် (အားလေအဘာ)ငါးပါးသော သူတို့၏နာမတော်များကို ဟဇ်ရသ် ဇကရီယာ(အ.စ)အား ပို့ချသွန်သင်ပေးခဲ့ရာ ဟဇ်ရသ်-သေ-ဇကရီယာ(အ.စ)သည် ၎င်းတို့၏နာမတော်များကို လိုက်လံရွတ်ဖတ်ခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏နာမတော်မှလွဲ၍ ကျန်နာမတော်အားလုံးကို လိုက်လံရွတ်ဖတ်ခဲ့ရာတွင် ဟဇ်ရသ်-သေ-ဇကရီယာ(အ.စ)၏ နှလုံးသားအတွင်း၌ ပီတိဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နာမတော်ကို ရွတ်ဆိုခဲ့ရာတွင် သူ၏မျက်ဝန်းအစုံမှ မျက်ရည်များစီး၍ပင်ကျလာခဲ့သည်။ ထိုအခါ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် ဟဇ်ရသ်-သေ-ဇကရီယာ(အ.စ)အား ဝဟီ(ဗြာဒိတ်တော်)ပို့ချ၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ဘဝကြံမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပေးမိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ဟဇ်ရသ်-သေ-ဇကရီယာ(အ.စ)သည် လွန်စွာမှ ငိုကြွေးလျှက် မိမိကိုလည်း ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ကဲ့သို့သော ကြံမ္မာတရားရှိသည့် သားတော်လေးတစ်ပါး ချီးမြင့် မြှောက်စားရန် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ထံသို့ တောင်းခံခဲ့လေသည်။ ထိုသို့တောင်းခံရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ခံစားရသကဲ့သို့ မိမိသည်လည်းခံစားလိုသည့်အတွက် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့နောက်အလ္လဟိုအရှင်မြတ်သည် ယဟ်ယာအမည်ရှိသော သားတော်လေးတစ်ပါးကို ဟဇ်ရသ်-သေ-ဇကရီယာအား ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မက္ကာမြို့မှ ကရ်ဘလာဘက်သို့ သွားနေစဉ် ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး၌ ဟဇ်ရသ်-သေ-ယာဟ်ယာအား တမ်းတသတိရလျက် ရှိနေခဲ့၏။ ရေဝါယသ်တော်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏သွေးသည်လည်း ဟဇ်ရသ်ယာဟ်ယာ(အ.စ)၏သွေးကဲ့သို့ ဆူပွက်လာပေမည်။ ထိုအခါ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် ငြိမ်သက်သွားစေရန်အတွက် ဟဇ်ရသ်-သေ-ယာဟ်ယာကိုရှဟီးဒ်ပြုလုပ်ခဲ့သူများကို သွေးကြွေးပြန်ဆပ်သကဲ့သို့ မိုနာဖိက်၊ကာဖိရ်နှင့် အီမာန်(ယုံကြည်မှု)အားနည်းသူ အယောက်(၇၀၀၀၀)ကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပစ်မည်ဖြစ်ပေသည်။ ရှီအာတို့၏အမြင်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်ပတ်သက်သည့် အခြားအာယသ်တော်များမှာ - စူရာ-ယေ-အဲဟ်ဇားဘ်အာယသ်တော်အမှတ်(၆)၊စူရာ-ယေ-နေဆာ အာယသ်တော်အမှတ်(၇၇)၊ စူရာ-ယေ-အစ်ရာအ် အာယသ်တော်အမှတ်(၂၇)နှင့် စူရာ-ယေ-ဖဂျ်ရ် အာယသ်တော်အမှတ်(၃၀)တို့ ဖြစ်သည်။(ရှီအာတို့သည် စူရာ-ယေ-ဖဂျ်ရ် အား အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ စူရာ ဟု တင်စားထားကြလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုစူရာအတွင်း၌ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြထားသည့်အတွက် ဖြစ်လေသည်).
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)ဖွားမြင်တော်မူသည့်အခါ ဂျိဘ်ရာအီလ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံသို့ရောက်လာပြီးလျှင် "အိုရစူလ် တနေ့၌ အသင့်၏နောက်လိုက်သား(အွမ္မသ်)တို့သည် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရှဟီးဒ်ပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် အသင့်နောက်ဆက်ခံမည့်အေမာမ်များသည် သူ့၏အဆက်အနွယ်မှ ဖြစ်ပေမည်"ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)လုပ်ကြံခံရမည့်သတင်းကို မိမိ၏သာဝကတို့အား မိန့်ကြားခဲ့လေသည်ဟု ရေဝါယသ်တော်များတွင် ဖော်ပြထားလေသည်။ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည်လည်း ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိ၏တမန်တော်အပေါင်းတို့အား မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ ထိုအတိုင်းပင် (တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏သတင်းပေးမှုအရ)အလီ(အ.စ)သည်လည်း ထိုအကြောင်းအရာကို သိထားခဲ့သည်။ တနေ့သောအခါ အလီ(အ.စ)သည် တစ်နေရာသို့ခရီးထွက်လာရင်း ကရ်ဘလာမှဖြတ်သန်းခဲ့လေသည်။ ထိုနေရာမှ ဖြတ်သန်းသည့်အခါ သားတော်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်ပတ်သက်ပြီး တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အဆိုအမိန့်ကို သတိရလာ၍ ထိုနေရာတွင်ခေတ္တခဏရပ်လျှက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးကာ ငိုကြွေးခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အေမာမ်အလီ(အ.စ)သည် ကရ်ဘလာအား ဋီကာဖွဲ့ရှင်းပြခဲ့သည်မှာ (کرب)သည် ဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ပြီး (بلا)သည် စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုဖြစ်လေသည်။ ထို့အပြင်မိန့်ကြားတော်မူလေသည်မှာ ထိုနေရာ၌ရှဟီးဒ်ဖြစ်မည့်သူအားလုံးတို့သည် စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု မရှိပဲ ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ ဝင်ရောက်ကြပေလိမ့်မည်ဟု ဖြစ်ပေသည်။
အနောက်တိုင်းမှ အစ္စလာမ်ကိုလေ့လာသူများအကြား ဝဲလ်ဟာဝဇန်ဆိုသူသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ တော်လှန်ခြင်းကို အာဏာရရှိရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး သာသနာအတွက်အလျဉ်းမဟုတ်ဟု ယူဆထားသည်။ ထိုအတိုင်းပင် လာမီးဇ်ဆိုသူမှလည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ယဇီးဒ်အပေါ်တော်လှန်ခြင်း ကို ရှုံ့ချထားသလို အေမာမ်(အ.စ)အားလည်း အမြှော်အမြင်မရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ပြောထားလေသည်(ဤသို့သတ်မှတ်ပြောဆိုမှုသည် မိုအာဝေယာမှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)အပေါ်မြင်သည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်လေသည်)အထက်ပါနှစ်ဦးသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ကရ်ဘလာတွင်မိန့်ခဲ့သော မိန့်ခွန်းများကို အထောက်အထားမခိုင်လုံကြောင်းနှင့် ကရ်ဘလာပြီးနောက်ပိုင်းရာစုနှစ်များ၌ ထိုအကြောင်းအရာများကို တီထွင်၍ သွတ်သွင်းလာခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူထားကြလေသည်။ ထိုသို့မှတ်ယူမှုအပေါ် လာရာဝကျာဝလီရီမှ အဖြေပေးထားသည်မှာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ထိုအကြောင်းအရာများသည် နောင်ရာစုနှစ်များ၌ တီထွင်ခဲ့ကြသည်ဟူ၍လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ သို့သော် စစ်မှန်သော ရေဝါယသ်အထောက်အထားများအရ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ လုပ်ရပ်သည် အမှန်တရားအပေါ်၌ရှိနေခဲ့ပြီး သူ၏ တော်လှန်မှုသည် သာသနာအတွက် ဖြစ်ပေသည် မှာပေါ်လွင်နေပါသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)သည် စစ်မှန်သော အစ္စလာမ့်အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရေးနှင့် အစ္စလာမ်သာသနာအစစ်အမှန် ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ထိုသို့တော်လှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် မိမိကဲ့သို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသူများကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင် ယခုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်အဝကို မဖော်ပြနိုင်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရည်ရွယ်ချက်စစ်မှန်မှုရှိမရှိကို ကရ်ဘလာအခင်းနောက်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော တော်လှန်ရေးများတွင် ပုံရိပ်ဖော်၍ မြင်တွေ့နိုင်သည်။
ဝေလ်ဖဲလ်မာဒလူးန်ဂ် ရေးသားထားသည်မှာ ကရ်ဘလာအခင်းမဖြစ်ဖြစ်စေရန်ဖန်တီးသူတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို လေ့လာစမ်းစစ်နိုင်ပြီးသိနိုင်သည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)အား ယဇီးဒ်ကို ပုန်ကန်သူနှင့် မိမိအသက်နှင့် မိသားစုကို မထောက်ထားပဲ တဇွတ်ထိုးနိုင်သူ ဟူ၍ မည်သို့သော အခါမျှ သတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိ၏နောင်တော်အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)သည် မိုအာဝေယာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားမှုအပေါ် သစ္စာတည်မြဲခဲ့လေသည်။ မည်မျှပင် မိုအာဝေယာ၏အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် သဘောတူမှုမရှိခဲ့ပါစေ။ သို့သော် မိုအာဝေယာသည် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို ဆန့်ကျင်၍ ယဇီးဒ်အား ထီးနန်းလွှဲအပ်ခဲ့သည့်အတွက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် (မစစ်မှန်သော ခလီဖှာ)ယဇီးဒ်နှင့် ဘိုင်အသ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ရှဟီးဒ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် ကြိုးစားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကူဖှာမြို့သားတို့ဘက်မှ မိမိအား ကူညီကြတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည့်အခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အေးချမ်းစွာ ပြန်လှည့်ရန်အတွက် တစ်ဘက်ကို ပြောကြားခဲ့လေသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ဘက်မှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား အေးချမ်းစွာပြန်လှည့်ခွင့်မပြုခဲ့ပါ။ အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား အကျဉ်းအကျပ်ပြုလုပ်ကာ ထိုစစ်ပွဲကို မဖြစ်မနေ ဖန်တီးခဲ့လေသည်။ စစ်ပွဲကို အဦးဆုံး အိဘ်နေဇယားဒ်ဘက်မှ စတင်ခဲ့လေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ပထမဆုံးဖြတ်ချက်သည် ကူဖှာမြို့သားတို့ဘက်မှဖိတ်ကြားမှုကို လက်ခံသဘောတူကြောင်း ပြန်လည်အဖြေပေးရန်အတွက်ဖြစ်ပေသည်။၎င်းအပြင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကို မြင်မက်ခဲ့သော စစ်မှန်သော အိပ်မက်အပေါ် ခံယူချက်ထားရှိခဲ့ပြီးနောက် ထိုအိပ်မက်သည် မိမိအား ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)သည် ရှေ့တွင် ဖြစ်လာမည့်အကြောင်းကိစ္စများအပေါ်အလျဉ်း တုန်လှုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)သည် မိမိခမည်းတော်ကဲ့သို့ ယုံကြည်ထားလေသည်မှာ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ အနွယ်ဝင်များကို လူသားအားလုံးအပေါ်ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ရန်အတွက် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်မှ ဖန်ဆင်းထားခဲ့သည်ဟု ဖြစ်ပေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မိမိ၏ခံယူထားမှုအတိုင်း လျှောက်လှမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။.
အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့သည် အမဝီမျိုးဆက်မှ ပထမဦး ဆုံးခလီဖှာ ဖြစ်သူ မိုအာဝေယာလက်ထက်တွင် လှုပ်ရှားမှု မပြုလုပ်တော့ပဲ နှုတ်ဆိတ်၍နေ ခဲ့သော်လည်း ယဇီးဒ်လက်ထက်တွင်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည်၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်၌ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ကူဖှာမြို့ရှီအာများ ယဇီးဒ်အားတော်လှန်မှု၌ မိမိတို့ ဘက်မှ ဦးဆောင်မှုပြုပေးရန် ဖိတ်ကြားမှုအရ မိမိ၏မိသားစုများအပါအဝင် လူအချို့ နှင့် ကူဖှာဘက်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ဖဇရ်ဒက် ဆိုသော နေရာသို့ရောက်သောအခါ ကဗျာဆရာတစ်ဦးနှင့်ဆုံခဲ့ပြီး ၎င်းမှ အိုဟိုစိုင်းန် ကူဖှာမြို့သား တို့၏နှလုံးသားသည် အသင့်ဘက်၌ ရှိနေသော်လည်း ၎င်းတို့၏ဓါများသည် အသင့်၏လည် ပင်းပေါ်၌ရှိနေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့လေသည်။ ကူဖှာမြို့စားအိဘ်နေဇေယားဒ်သည် ယဇီးဒ် ၏အကူအညီဖြင့် စစ်သည်(၄၀၀၀)ကိုစေလွှတ်ပြီး အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)အားဖမ်းဆီး စေခဲ့သည်။ ထို့နောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့အား ယူဖရေးတီးမြစ်ဘက်သို့ သွားရောက်ကာ ရေယူမှုကိုလည်း ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့လေသည်။ အေဒီသက္ကရာဇ်(၆၈၀)ခုနှစ် အောက်တို့ဘာလတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)သည် ယဇီးဒ်နှင့်သစ္စာခံမှုကို ငြင်းဆိုခဲ့သည့်အတွက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်အတူ နောက်လိုက်များကိုပါသတ်ဖြတ်(ရှဟီးဒ်)လုပ်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အားလုံး၏ဦးခေါင်းများကိုဖြတ်ကာလှံထိပ်များပေါ်တွင်စိုက်လျှက် (ရှာမ်မြို့)ဒမစ်ကစ်မြို့ထိ သယ်ဆောင်သွားကြသည်။ ရှီအာမွစ်လင်(မ)တို့သည် မိုဟရမ်လ(၁၀)နေ့ကို ဝမ်းနည်းပူဆွေးသောနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ရှဟီးဒ်ဖြစ်သူများအတွက် တမ်းတသတိရ ဝမ်းနည်းကြေကွဲသည့်အခမ်းအနားများကျင်းပကြလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏သွေးကြွေးဆပ်လိုမှုနှင့် ထိုသို့သောအခမ်းအနားများကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဘနီအိုမိုင်ယာတို့ကို အားနည်းစေသလို ရှီအာတို့အတွက် ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားများသည် စစ်မှန်သော အစ္စလာမ်ကို အားဖြစ်စေသလို မတရားသော ဘနီအိုမိုင်ယာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ၎င်း၏နောက်လိုက်သားများကို အားနည်းစေသည်မှာအမှန်တရားတခုသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)၏မျက်နှာတော်၏အရောင်သည် ဖြူ၍ဝင်းလက်နေ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ(အမာမာ)ခေါင်းပေါင်း အနက်ရောင်စောင်းလေ့ရှိသည်။ သူသည်မရှိဆင်းရဲသားများနှင့်အတူထိုင်၍ အစားအစာစားလေ့ရှိပြီး ၎င်းသူတို့အား တစ်ခါတစ်ရံအိမ်သို့ဖိတ်ကြားပြီးကျွေးမွေးလေ့ရှိသည်။ သူ၏ ဖခင်အလီ(အ.စ)သည် ကောက်ကျစ်သူတစ်ဦးမဟုတ်သလို သူသည်လည်း ဖခင်ကဲ့သို့ပင် ကောက်ကျစ်သူမဟုတ်ပေ ဟုမိုအာဝေယာမှ ပြောခဲ့သလို အမ်ရိုအားဆွ်မှလည်း ကောင်းကင်ဘုံသားတို့၏ အနှစ်သက်ရဆုံးသောသူသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
ဝေလ်ဖလ်မာဒလူးန်ဂ်သည် အီရာနီကာစွယ်စုံကျမ်းတွင် ရေးသားထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏စာရိတ္တသည် အဘိုးတော် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အတိုင်း ဖြစ်လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ဖခင်အလီ(အ.စ)နှင့်အလွန်တူ၏။ အေမာမ်ဟစန်သည် မိမိ၏သားတော်နှစ်ပါးလုံးအား မိုဟမ္မဒ်ဟု အမည်ပေးခဲ့ပြီး အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိသားတော်များကို အလီဟု အမည်ပေးခဲ့သည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အလီ(အ.စ)နှင့်အလွန်တူသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အချို့က ယူဆထားသည်။(ထိုသို့အယူအဆသည် အမှန်တရားတစ်ခုမဟုတ် လူတို့၏ ယူဆချက်သာဖြစ်ပေသည်ကိုသတိပြု၍ မှတ်သားသင့်သည်)ရစူလ်လေဂျာဖရီယားန်ဆိုသော သမိုင်းသုတေသီကြီးတစ်ဦးမှဆိုထားသည်မှာ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့်အလွန်တူသည်... ဟူသော ရေဝါယသ်သည် လုပ်ကြံထားသော ရေဝါယသ်ဖြစ်ပြီး အေမာမ်အလီ(အ.စ)ပုံရိပ်များနှင့် အာရှူရာသမိုင်းအား ဖျက်စီးရန်အတွက်ရည်ရွယ်၍ ဤသို့လုပ်ကြံဖန်တီးထားကြောင်းဖြစ်လေသည်။၎င်းအပြင် ဤသို့သော ဖန်တီးလုပ်ကြံမှုသည် အွစ်မာန်အားထောက်ခံအားပေးခဲ့သော သူတို့မှ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဖြစ်လေသည်။ ဆယိဒ်မိုဟမ္မဒ်ဟိုစိုင်းန်သွဘာသွဘာအီသည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)တို့အကြား အချို့သူတို့မှ နှိုင်းယှဉ်ထားသည့်နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆိုထားလေသည်မှာ -အချို့သောဋီကာဖွင့်ဆိုသူများသည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)တို့အကြားအတွေးအခေါ်များမတူကြဟု သတ်မှတ်ပြီး အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)သည်သွေးအေးသူ(ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားသူ)နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် သွေးကြွသူ(စစ်ကိုလိုလားသူ) ယူဆကြသည်။ဤသို့ယူဆပြောဆိုမှုသည် အချီးနှီးသာဖြစ်ပြီး မှားယွင်းပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ယဇီးဒ်နှင့်သစ္စာမခံခဲ့သလို မိုအာဝေယာ အုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလ၌လည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိနောင်တော် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့်အတူ (၁၀)နှစ်တိုင်တိုင် ကြံကြံခံ၍နေခဲ့သည်။ မိုအာဝေယာကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ တော်လှန်မှုမပြုခဲ့ပါ။ မိုဟမ္မဒ်အေမာဒီဟာအေရီမှ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့် အလွန်တူသည်ဟု မြောက်များစွာသော မူရင်းကျမ်းများတွင်ဖော်ပြထားလေသည်။၎င်းအပြင် ရေဝါယသ်တစ်ခုတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရသည်မှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့် အတူဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားလေသည်။ ထို့အပြင် အခြားရေဝါယသ်တစ်ခု၌လည်း အလီ(အ.စ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား သွားလာပုံနေပုံထိုင်ပုံတို့တွင် မိမိနှင့်အလွန်တူကြောင်း မိန့်ကြားထားလေသည်။ ဟုတင်ပြထားလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် နောင်တော်အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)အား အလွန်မှပင် အရိုအသေပေးခဲ့သည်။ မည်သို့သောအခါမျှ မိမိနောင်တော်အပေါ် စောဒက တက်မှုမပြုလုပ်ခဲ့ပေ။ မိုဟမ္မဒ်ဟနဖီးယားသည်လည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)လက်ထက်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ဤသို့ပင်ဆက်ဆံခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟစိုင်းန်(အ.စ)သည် အလွန်မှပင် ဂရုဏာတရားရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ ထို့ဂုဏ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မဒီနာမြို့အတွင်း သင်းပျံ့နေခဲ့၏။ ကျေးကျွန်များနှင့် ကျေးကျွန်မတို့အား လိမ်မာရေးခြားရှိမှုကြောင့် လွပ်လပ်မှုပေးလေ့ရှိခဲ့သည်။ ရေဝါယသ်တော်တစ်ခု၌ဖော်ပြထားလေသည်မှာ မိုအာဝေယာသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံသို့ ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် အဝတ်အစားအပြည့်အစုံဖြင့် ကျေးကျွန်မတစ်ဦးအား စေလွှတ်ခဲ့လေသည်။ ထိုကျေးကျွန်မသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံသို့ရောက်ရှိလာသည့်အခါ ထိုကျေးကျွန်မမှ လောကကြီးနှင့်သေခြင်းတရားအကြောင်းကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယသ်တော်များနှင့် ကဗျာအလင်္ကာများရွတ်ကာ ပြောဆိုခဲ့သည်ကို လွန်စွာမှပင် နှစ်တော်မူခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းသူမအား လွပ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည့်အပြင် ထိုပစ္စည်းဥစ္စာများကို သူမအား ပေးခဲ့လေသည်။ တနေ့သောအခါတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ကျေးကျွန်တစ်ဦးသည် အမှားအယွင်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် «والعافین عن‌الناس»(အရှင်မြတ်သည် လူသားတို့အားခွင့်လွှတ်ပေးသနားတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပေသည်) ဆိုသည့်အာယသ်တော်ကို ရွတ်ဆိုခဲ့သည့်အတွက်သူ့အား ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ၎င်းကျေးကျွန်သည်«واللّه یحب‌المحسنین»(ဧကန်အမှန် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် ကောင်းမှုပြုသူတို့အား နှစ်သက်တော်မူပေ၏)ထပ်မံရွတ်သည့်အခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ။ စ)သည် ၎င်း၏ထိုအပြုအမူကို နှစ်သက်တော်မူသွားသည့်အတွက် လွပ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အိုစာမာအိဘ်နေဇိုင်းဒ် နာမကျန်းဖြစ်နေစဉ်၌ ၎င်းပေးရမည့်အကြွေးကို သူ့ဘက်မှပေးချေပေးခဲ့လေသည်။ ရေဝါယသ်တော်တစ်ခုတွင် လာရှိထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိရရှိခဲ့သော အမွေများကို မိမိလက်ဝယ်သို့မရောက်မီ မရှိဆင်းရဲသားများအား ပေးဝေခဲ့လေသည်။ ၎င်းအပြင် လူတစ်ဦးပေးရမည့်အကြွေးကိုလည်း အကြွေးရှင်အား မေးခွန်း(၃)ခုမေးခဲ့ပြီး မေးခွန်းများကိုမှန်ကန်စွာဖြေနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းသူပေးရမည့်အကြွေးကို ထိုအကြွေးရှင်အား ပေးချေပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိမိ၏လက်စွပ်တော်ကို ထိုမရှိဆင်းရဲသားအား ပေးသနားခဲ့လေသည်။ ထိုအနေအထားများကို မြင်တွေ့နေခဲ့သော ယဟူဒီ ဇနီးမောင်နှံတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကို လေးစားခဲ့ကြပြီး အီမာန်ယူခဲ့ကြလေသည်။ ထို့အပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိ၏သားသမီးများကို ပညာသင်ကြားပေးသည့် ဆရာအား ပစ္စည်းဥစ္စာများချီးမြှင့်ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ချီးမြှင့်ရင်း ဤပစ္စည်းများသည် ပညာသင်ကြားပေးသည့်အတွက် အဖိုးအခပေးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း မိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။ တစ်နေ့သောအခါတွင် ရှာမ်မြို့မှ လာရောက်သူတစ်ဦးသည် အေမာမ်အလီ(အ.စ)နှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား မကောင်းပြောဆိုခဲ့သည့်အခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ၎င်းသူအားခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသူအပေါ်ဂရုဏာတရားထား၍ ပြန်လည်ဆက်ဆံခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိအသက်ရှိစဉ်ကာလ၌ မရှိဆင်းရဲသားတို့ထံ အစားအသောက်များထမ်းရွက်ကာ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော ဒဏ်ရာများသည် အာရှူရာနေ့ရောက်သည့်အခါမှ ပေါ်လွင်သွားခဲ့လေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အေမာမ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် မာအ်စူမ်(၁၄)ပါးအတွင်း၌ တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်ခြင်းအပေါ် တစ်လောကလုံးရှိ ရှီအာတို့သည် ကနဦးကတည်းမှ ယုံကည်လက်ခံထားခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ သွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ(မော့အ်ဂျေဇာ)များ အမြောက်အမြားရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ယဇီးဒ်၏နန်းတော်အတွင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ခန္ဓာမရှိသော ဦးခေါင်းမှ စကားပြောလာသည့်အတွက် ရောမမှ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးပင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ်မျက်ရည်ကျခဲ့သည် စသဖြင့်အကြောင်းအရာတို့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ် ယုံကြည်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့သည်။
=== အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဖွားမြင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော (ကရာမသ်)အံအားသင့်ဖွယ်ရာများ === အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ဖွားမြင်ချိန်မရောက်မီ သုံးလစော၍ လောကကြီးသို့ရောက်လာခဲ့လေသည်။ ထိုအတိုင်းပင် အီစာနဗီ(အ.စ)နှင့်ယာဟ်ယာနဗီ(အ.စ)တို့လည်း ပုံမှန်ထက်စော၍ ဖွားမြင်ခဲ့ကြလေသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အား ရက်ပေါင်း(၄၀)တိုင်တိုင် မိမိကိုယ်တော်တိုင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့လေသည်။၎င်းအပြင် မိမိ၏လက်စွပ်တော်ကို မြေးတော်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏နုတ်တော်အတွင်းသို့ ထည့်ထားပေးလေ့ရှိသလို တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏တံတွေးတော်ကို မြေးတော်အား တိုက်ကြွေးလေ့ရှိခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မွေးဖွားလာခဲ့ချိန်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ရန်အတွက် ကောင်းကင်ဘုံမှ မလာအေကာအပေါင်း (၁၀၀၀)ကျော်ဆင်းသက်ခဲ့လေသည်။ ထို့သို့မွေးဖွားလာချိန်တွင် ဂျီဘ်ရာအီလ်(ကောင်းကင်တမန်)သည် ဆင်းသက်လာပြီးအရှင်မြတ်ဘက်မှ မင်္ဂလာသတင်းပါးလိုက်မှုကို သယ်ဆောင်လာခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင် မိမိနှင့်အတူ ကရ်ဘလာမှ မြေကြီးတစ်စုပ်ကိုလည်း တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဂျိဘ်ရာအိလ်သည် မိခင်ဖှာတေမာ(စ.အ)အိပ်နေစဉ်တွင် ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဖှိသ်ရို့စ်မည်သော ကောင်းကင်တမန်တပါးသည် အရှင်မြတ်ဘက်မှ ပေးသောအပြစ်ကြောင့် မိမိ၏အတောင်ပံများ ကျိုးသွားခဲ့လေသည်။ သို့သော် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဖွားမြင်တော်မူပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ကောင်းသွားခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဖွားမြင်တော်မူခြင်းအပေါ် မင်္ဂလာသတင်းစကားပြောကြားဖို့ရန်အတွက် လာနေသောကြသော ကောင်းကင်တမန်အုပ်စုကြီးတစ်စုနှင့် ဖှိသ်ရို့စ် မည်သော ကောင်းကင်တမန်သည် လမ်း၌ဆုံခဲ့လေသည်။ ထို့နောက်ဖှသ်ရို့စ်သည် မိမိကိုလည်း ၎င်းတို့နှင့်အတူ လိုက်ပါခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ အိမ်သို့ရောက်လာပြီးနောက် ဖှိသ်ရို့စ်သည် မိမိ၏အတောင်ပံအား အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပွတ်သပ်ခဲ့မှုကြောင့် မိမိ၏အတောင်ပံသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် မိမိနေထိုင်ရာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်သွားခဲ့လေသည်။၎င်းသည် ယနေ့ထိတိုင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ဗိမ္မာန်တော်သို့ လာရောက်ဖူးမြှော်သူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေတွက်၍ စာရင်းပြုစုရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးနောက် ကောင်းကင်ယံ၌ တဖြေးဖြေးမှောင်မိုက်လာကာ ညသို့ကူးပြောင်းသွားခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကောင်းကင်ယံမှ သွေးမိုးရွာသွန်းခဲ့ပြီး လူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်များသို့ပင် သွေးစက်များကျလာခဲ့လေသည်။ ထိုသို့သွေးမိုးရွာသွန်းမှုသည် အီရန်နိုင်ငံရှိ ခိုရာဆာန်ပြည်နယ်အတွင်း၌ရှိ နေရာဒေသများအထိသို့ ရောက်ခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင် ရှာမ်နှင့်အခြားနေရာဒေသများတွင် ကျောက်တုံးများအောက်မှ သွေးများစီးကျခဲ့သလို နံရံများအကြားမှလည်းသွေးများ ယိုစီးလာခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်မဖြစ်မီ ညတွင် အွမ္မေစလ်မာသခင်မကြီး(သို့)အိဘ်အဘ္ဘားစ်သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ မုတ်ဆိတ်တော်များသည် မြေကြီးများပေကျံလျက် ရှိခဲ့ပြီး ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ခွက်တစ်ခုထဲသို့ သွေးများထည့်နေသည့်အနေအထားကို အိပ်မက်၌မြင်တွေ့ခဲ့လေသည်။ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)အား ဂျီဘ်ရာအိလ်မှပေးခဲ့သော မြေကြီးကို အွမ္မေစလ်မာသခင်မကြီးမှ သိမ်းထားခဲ့လေသည်။ ထိုမြေကြီးသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)ရှဟီးဒ်မဖြစ်မီည၌ပင် သွေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းသွားခဲ့လေသည်။ ထိုအနေအထားကို မြင်သွားခဲ့သော သခင်မကြီးအွမ္မေစလ်မာသည် ကရ်ဘလာအခင်းစတင်တော့မည်ကို သိသွားခဲ့ပြီး အော်ဟစ်ငိုကြွေးခဲ့လေသည်။ ကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်အပေါ် ပထမဆုံးငိုကြွေးသူသည် အွမ္မေစလ်မာသခင်မကြီးသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် ကရ်ဘလာတွင်ကျနေသော သွေးများကို လိုက်လံစုစည်းသည် ဟု အိပ်မက်မက်သော ရေဝါယသ်တော်နှင့် အွမ္မေစလ်မာသခင်မကြီးမှ ကရ်ဘလာမြေကြီးကိုသိမ်းထားခဲ့ပြီး ထိုမြေကြီးသည် သွေးဖြစ်သွားသည် ဟူသော ရေဝါယသ်နှစ်ခုအား စနဒ်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ဆင့်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့မြင်ရပေသည်။ သို့သော် အချို့သော စနဒ်တို့သည် ခိုင်လုံမှုရှိပြီး အချို့သည်အားနည်းမှုများရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့မှုအပေါ် ဂျင်န်အပေါင်းတို့သည်လည်း ငိုကြွေးကြကာ နောင်ဟာ(အလင်္ကာ)များပင် ဖတ်ခဲ့ကြသည်။၎င်းအပြင် ဂျင်န်အမျိုးသမီးတို့သည်လည်း ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ်ငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ငိုကြွေးသံများကို အွမ္မေစလ်မာအပါအဝင်အချို့အမျိုးသမီးများလည်းကြားခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ကောင်းကင်တမန် မလာအေကာ အပေါင်းတို့လည်း ငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။၎င်းအပြင် ရေ၌နေထိုင်ကြသော သတ္တဝါတို့နှင့်ကုန်းပိုင်းတွင် နေထိုင်ကျက်စားကြကုန်သော သတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်လည်း ငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။ ကရ်ဘလာအခင်းမဖြစ်ပွားမီ ညတွင် လူတစ်ဦးမှ လူသားတို့အားသတိပေးနှိုးစော်သည့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ပါ အာယသ်တော်များကို ဖတ်နေသည့်အသံကို ကြားနေခဲ့ကြသည်။ သို့ပေမဲ့ဖတ်သည့်သူအား မတွေ့ခဲ့ရပေ။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဦးခေါင်းတော်အား ကူဖှာသို့ သယ်ဆောင်သွားနေစဉ် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)နဗူဝသ်မကြေညာမီ ရှေးနှစ်ပေါင်း(၃၀၀)ကျော်ကတည်းမှ ရောမတိုင်းပြည်ရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတော်တစ်ခုတွင် ရေးသားထားသောမုက္ခပတ်တော်များအတိုင်း ကလောင်တံတစ်ချောင်းမှ ကူဖှာသို့သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိနံရံတစ်ခုပေါ်တွင် အလိုလျှောက်ရေးသားနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။ အေမာမ့်(အ,စ)၏ဦးခေါင်းတော်၏ ရနံ့သည်အလွန်မှပင် မွှေးကြိုင်သင်းပျံ့နေခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ဦးခေါင်းတော်မှ ဖြစ်ပေါ်နေသော မော့အ်ဂျေဇာများအပေါ် လက်ခံကြည်ညိုလာခဲ့သည့် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးသည် ဦးခေါင်းအားသယ်ဆောင်လာသူများကို ငွေအသပြာအနည်းငယ်ပေး၍ ထိုဦးခေါင်းကို မိမိ၏အိမ်၌ခေတ္တခဏပင်မဆို ထားလိုကြောင်း တောင်းခံလာခဲ့သည့်အခါ ၎င်းတို့မှလည်းသဘောတူခဲ့ပြီး ဦးခေါင်းကို ထိုဘုန်းတော်ကြီးအိမ်သို့ ပင့်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုညတွင်ပင် ဘုန်းတော်ကြီးသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဦးခေါင်းတော်မှ စကားများပြောနေသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ရှိသွားပြီးနောက် အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ် အီမာန်ယူလာခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ဘုန်းတော်ကြီးမှ စစ်သည်တို့ကို ပေးခဲ့သော ငွေအသပြာများသည်လည်း ကျောက်ခဲများ ဖြစ်သွားခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင် ဦးခေါင်းတော်မှ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ အာယသ်တော်များကို ဖတ်လျက် ရှိနေခဲ့၏။ ညတစ်ညတွင် ခူလီဘင်န်ယဇီးဒ်အစ်ဘဟီးဆိုသူသည် ကူဖှာသို့ရောက်ရှိလာပြီး ဦးခေါင်းတော်အား မိမိအိမ်သို့ ပင့်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အိမ်သို့ရောက်သည်နှင့် ဦးခေါင်းတော်ကို လင်ပန်းတစ်ခု၌ ထည့်၍ ထားလိုက်သည်။ ထိုအခါ ကောင်းကင်ယံမှ ရောင်ခြည်တော်သည် ထိုလင်ပန်းအတွင်းရှိ ဦးခေါင်းတော်ထံသို့ တည့်တည့်မတ်မတ်ရောက်ရှိလာပြီး ထိုလင်ပန်း၏ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် အဖြူရောင်ငှက်များ ပျံသန်းရစ်ဝဲနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြရသည်။
အေမာမ်ဟိုင်းန်(အ.စ)အား ကရ်ဘလာမြေပြင်တွင် ဒုက္ခပေးခဲ့ကြသူအားလုံးတို့သည် ကရ်ဘလာအခင်းပြီးနောက် များမကြာမီကာလ၌ပင် ကံကြံမ္မာဆိုးများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီး ၎င်းတို့၏ဘဝများသည် မှောင်မိုက်သွားခဲ့သည်။၎င်းသူတို့အတွင်းမှ အချို့သည် အသတ်ခံရသလို အချို့သည်လည်းမျက်ကန်းဘဝသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြသည်။ အချို့သည်လည်း အနာကြီးရောဂါ၊ရေငတ်မပြေသည့်ရောဂါ၊ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းရှိ လက်များ၌ အသားရည်ခမ်းခြောက်လာခြင်း၊မီးလောင်ကျွမ်း၍သေခြင်း၊ကင်းကိုက်ခံရခြင်း၊ရာထူးနှင့် ပစ္စည်ဥစ္စာများဆုံးရှုံးသွားရခြင်း၊ဇနီးသည်ဖြစ်သူမှ မိမိကိုနေအိမ်မှ နှင်ထုတ်ခံရခြင်းစသဖြင့် ဒုက္ခများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည်။၎င်းအပြင် ကရ်ဘလာတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံမှ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို လုယူသွားခဲ့ကြသော သူတို့သည်လည်း ဒုက္ခအမျိုးမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည်။ဥပမာအနေဖြင့်တင်ပြရလျှင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ခေါင်းပေါင်း(အမာမာ)ကို လုယူခဲ့သူသည် ကရ်ဘလာပြီးနောက် အရူးဘဝသို့ရောက်သွားခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ခြုံထည်ကို လုယူသွားခဲ့သူသည် ဆင်းရဲတွင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့ရသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ဝတ်ထားသော အင်္ကျီအား ချွတ်ယူသွားခဲ့သူသည် အနာကြီးရောဂါစွဲကပ်ကာ ဘဝဆုံးခဲ့ရသည်။၎င်းအပြင် အေမာမ့်(အ.စ)ထံမှ လုယူသွားသော ပစ္စည်းများသည် ရောင်းချ၍ မရသောပစ္စည်းများဖြစ်ခဲ့သလို ရောင်းချရာ၌လည်း ဈေးကောင်းမရရှိခဲ့ချေ။ အေမာမ်(အ.စ)၏ထံမှ လုယူသွားသော ကုလားအုပ်များကို သတ်စားခဲ့ကြရာ ၎င်း၏အသားသည် ခါး၍နေခဲ့၏။ အေမာမ့်(အ.စ)ထံမှ ချွတ်ယူခဲ့သော အဝတ်အစားတို့သည် သွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ရွှေ၊ငွေတို့သည်လည်း ကျေးနီဖြစ်သွားခဲ့သည်(သို့) လက်ဝတ်ရတနာများပြန်လည်ပြုလုပ်ရာတွင် ပန်းတိမ်ဆရာတို့၏လက်ဝယ်၌ မီးလောင်သွားခဲ့လေသည်။၎င်းအပြင် လုယူသိမ်းပိုက်ခဲ့သော ကုံကုမံ(ဇာအ်ဖရားန်)များသည်လည်း လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့သည်ဟု သမိုင်းတွင်ဖော်ပြထားလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏နဖူးတော်တွင် ရောင်ခြည်များဖြင့်ဝင်းလက်နေခဲ့ပြီး လူတို့သည် အေမာမ်(အ.စ)အားကြည့်၍ ညဘက်မှောင်မိုက်သောအချိန်တွင် မီးအလင်းရောင်မပါပဲ လမ်းသွားနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အေမာမ်(အ.စ)သည် မကျန်းမာသူများကို (ရှဖာ)ပေးသနားတော်မူ၍ ပြန်လည်ကျန်းမာစေရန်ပြုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိခဲ့သည်။ ကာဘာကျောင်းတော်ကို သဝါးဖ်ပြုရင်း အမျိုးသားတစ်ဦး၏လက်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ခန္ဓာသို့ အလိုလျှောက်ကပ်သွားခဲ့လေသည်။ မည်သို့မျှပင် ခွာ၍ မရခဲ့ချေ။ အားလုံးသော သာသနာ့ပညာရှင်များက ထိုလက်ကိုဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မိမိ၏တန်ခိုးတော်ဖြင့် လက်နှင့်ခန္ဓာကို ခွဲပေးခဲ့လေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏အခြားသော မော့အ်ဂျေဇာများလည်းရှိနေသေးသည်။၎င်းတို့အတွင်းမှ အကြောင်းအရာ အချို့ကို တင်ပြလိုသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ ကလေးမွေးလာခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ဖခင်မည်သူမည်ဝါမှန်းမသိခဲ့ကြချေ။ ထိုအခါ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် ထိုကလေး၏ဖခင်သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ထိုမွေးကင်းစကလေးငယ်ကို စကားပြောနိုင်စွမ်းပေး၍ မိမိဖခင်၏အမည်ကို နုတ်မှရွတ်စေကာ ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့လေသည်။၎င်းအပြင် ရာသီချိန်မရောက်သေးသော အသီးအနှံများကို မိမိ၏ကလေးများစားသုံးရန် ဖန်တီးပေးခြင်း၊ကရ်ဘလာတွင် ရေဆာလောင်နေသူများကို မိမိ၏လက်စွပ်ကို ၎င်းသူတို့၏ ပါးစပ်များအတွင်း၌ ငုံထားစေပြီး ရေဆာလောင်မှုကို ဖြောက်ဖျက်ပေးခဲ့ခြင်း၊ မိမိ၏ ကြံမ္မာတရားကို ကနဦးကတည်းမှ သိနေခြင်းနှင့် လူတို့မသိနားမလည်နိုင်သော အကြောင်းအရာများကို သိနေခြင်း၊ကူဖှာသားတို့၏ အေမာမ့်(အ.စ)အပေါ်ထားရှိသော စိတ်ဓာတ်များသည် အေမာမ့်(အ.စ)၏ ရှေ့မှောက်တွင် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် သဏ္ဌာန်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း၊ အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် ကူဖှာတပ်၏ စစ်သူကြီးဖြစ်လာမည်ကို ကြိုတင်၍ ပြောဆိုမိန့်ခဲ့ခြင်း၊၎င်းအပြင် ကရ်ဘလာအခင်းအပြီး မကြာမီကာလတွင် အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ် သေမည်ဟု ၎င်းအားသတိပေးခဲ့ခြင်း၊ မိမိဦးခေါင်းတော်ကို အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံသို့ သယ်ဆောင်သွားသူအား အိဘ်နေဇေယားဒ်မှ မည်သည့်ဆုလာဒ်များ ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်မိန့်ကြားခဲ့ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်လေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏မြှုပ်နှံရာဒေသတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေဝါယသ်အမျိုးမျိုးရှိထားလေသည်။ အချို့ဆိုထားသည်မှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဖခင်၏ဘေးတွင်မြှုပ်နှံခဲ့သည်ဟု ဆိုထားကြသော်လည်း အချို့ကမူ ကရ်ဘလာတွင် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဦးခေါင်းတွဲ၍ မြှုပ်ထားသည်ဟု ဆိုထားကြလေသည်။ သို့သော်အချို့သည် ဂျန္နသွလ်ဘကီးဟ် သင်္ချိုင်းတွင်၊အချို့က ဒမစ်ကစ်မြို့တွင်(နေရာအတိအကျမသိ)မြှုပ်နှံထားကြောင်း ဖော်ပြထားကြသည်။ အချို့ကလည်း ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၏တစ်နေရာတွင်လည်းကောင်း အချို့သည် ဖာတေမီအနွယ်ဝင်တို့မှ ကာဟေရာဒေသသို့သယ်ဆောင်သွား၍ မို့ဟ်စင်န်နွလ်အမီးန်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွင်မြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုဗလီသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အားအစွဲပြု၍ ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားလေသည်။
အာရှူရာအခင်းပြီးနောက်ပိုင်း များမကြာမီကာလတွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏ဗိမ္မာန်တော်ကို အဦးဆုံးလာရောက်ဖူးမြှော်၍ ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ကြလေသည်။ မိုအီဇ်ဇွလ်ဒေါင်လာဟ်သည် ဘူဝါဟ်အနွယ်ဝင်များကြီးစိုးအုပ်ချုပ်နေသော ကာလတွင် ဘဂ်ဒါးဒ်မြို့၌ အာရှူရာအခမ်းအနားကို စတင်ကျင်းပခဲ့လေသည်။(ထို့ကြောင့် စွန္နီများဘက်မှလည်း ထိုအခမ်းအနားနှင့်ဆန့်ကျင်သော ပွဲလမ်းသဘင်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျင်းပလာခဲ့ကြသည်)အီဂျစ်ကိုအုပ်ချုပ်သော ဘုရင် ဖှာသွေမီ မှလည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများကိုကျင်းပခဲ့လေသည်။ အာရှူရာအခမ်းအနားသည် စလ်ဂျူကီယားန်တို့ အုပ်စိုးစဉ်ကာလများ၌ ပိုမိုမြိုင်စိုင်လာခဲ့ပြီး ပါဝင်သက်ရောက်သူဦးရေ အမြောက်အမြားဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ရှီအာအိစ်နာအရှရီယာ စဖဝီမင်းဆက်တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် မိုဟရမ်ပထမ(၁၀)ရက်၌ ဝမ်းနည်းကျေကွဲသည့်အခမ်းအနားများကျင်းပလာခဲ့ကြသည်။(သို့သော် စဖဝီမင်းဆက်မတိုင်မီခေတ်ကာလများတွင် ထိုသို့(၁၀)ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပလေ့မရှိခဲ့ပါ) ထိုသို့သောအခမ်းအနားများတွင် ထည့်သွင်းပြုလုပ်လေ့ရှိသောအစီအစဉ်များမှာ
(၁) ဗလီကျောင်း၊သာသနာ့အဆောက်အဦးနှင့်အများနှင့် သက်ဆိုင်သော နေရာများကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်သမိုင်းအကြောင်းဟောပြောခြင်း
(၂)ထမ်းစင်သဏ္ဌာန်ပြုလုပ်၍ လူအများမှ (အလောင်းတော်သယ်ဆောင်လာသည်ဟု သဘောဖြင့်)အများနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် ထမ်း၍သယ်ဆောင်သွားကြခြင်း၊ အလံများသယ်ဆောင်ကြခြင်း၊အလံများစိုက်ထူကြခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်အာရှူရာတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး အီရန်နိုင်ငံသားရှီအာများမှလည်းကောင်း၊အခြားနိုင်ငံသားရှီအာတို့မှလည်းကောင်းထို့အပြင် စွန္နီများမှလည်းကောင်း အုပ်ရေပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ ရေးသားခဲ့ကြပြီးဖြစ်လေသည်။ သို့ပေမဲ့လည်း ရေးသားထားသောအချို့စာအုပ်နှင့်ကျမ်းများကိုသာအောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားသည်။
· Dar Karbala Chi Ghozashat (Haj Sheak Abbas Qomi)
· Par tu ye azz Azamat-t-Husayan(A.s) (Lut fullah Safi Gulpaigany)
· Eibarat ha ye Arshura (Syed Ahmad Khatami)
· Cha ra ha ye Humase Arshura (Muhammad Baqar Puramine)
· Jam me Eibarat (Syed Husayan Ishaqi)
· Shaheed –e-Jaweed (Sawalehe Najaf Arbadi)
· Shaheed-e-Zindah(Ali Shariati)
· Peshawaye-e-Shahedaan(Syed Reza Sadr)
· Thareef ha ye Arshura(Murtaza Mutahari)
· Unsur-e-Shujaatt (7 volum) (Mirza Khaleel Kuraei)
· Samu al zaat fi Samu al maena(Abdullah Alayee) (sunni)
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named EoI
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)&oldid=706704" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။